Qodobka waxaa ku jira:
1 Waa maxay HGH ama hormoonada Horumarka Aadanaha - Somatropin?
Noocyada 2 iyo qaababka HGH
3 Saameynta HGH ee ku saabsan metabolismka
4 HGH isdhexgalka qaaxada kale
5 HGH isdhexgalka dadka neurotransmitters
6 Saameyntii fitamiinada iyo asymoorada amino ee HGH
Saamaynta 7 ee Amino Acids ee habka HGH
8 Kicinta jirka nafsadda ee hormoonka HGH
9 Isticmaalka HGH ee jirka dhismaha iyo kordhinta dhererka aadanaha
10 Isticmaalka HGH ee daawada
11 Isticmaalka somatotropin ee ciyaaraha isboortiga
12 Horumarinta Aadanaha iyo kansarka
13 Qiyaasaha horumarinta HGH
Waa maxay HGH ama hormoonada Horumarka Aadanaha - Somatropin?
Ilaa hadda, hormoonada Horumarka Aadanaha (HGH) waa daawada ugu caansan ee waxtarka leh ee anabolic. HGH waxay heshay codsigeeda maaha oo kaliya sida daaweynta dhirta ugu fiican ee jirka loogu talagalay jirka, jimicsiga jirka maskaxda, horumarinta murqaha, laakiin sidoo kale ciyaaraha kale sida boodhka, kubada cagta, kubbadda koleyga iyo ciyaaraha kale ee ciyaaraha iyo ciyaaraha fudud
HGH waxay si fiican u qabatay hagaajinta ciyaaraha fudud - sida kordhinta dulqaadka, daaweynta dhaawacyada. Baaxadda HGH waxay sii kordhaysaa maalin kasta, iyadoo habka saxda ah ee isticmaalka somatropin (HGH) ay suurtogal tahay in lagu hagaajiyo waxqabadka isboortiga, awoodda, waxqabadka jirka, adkaysiga iyo wakhtiga soo-kabashada
Muxuu jidhkeenu ugu baahanyahay HGH? C tarjumaadda luuqada "Soma" macnaheedu waa jirka. Somatotropic macnaheedu waa aqoonsiga jidhka iyo jiritaanka dhabta ah ee asalka. Inta lagu jiro koritaanka bini'aadamka, HGH waa hormoonka hormoonka koritaanka hormoodka ah ee mas'uulka ka ah koritaanka iyo qaabka jirka bini'aadamka, content iyo waxsoosaarku si toos ah waxay ku xiran tahay korniinka, xajmiga, miisaanka, hormoonka koritaanka badan ee jirka sii kordhaya, in badan oo qofku koraan .
Ka dib markii la ogyahay oo ah wareegyada caloolxumada ee qalfoofka, mararka qaarkood lafaha waxay sii wadaan inay ku koraan dhumuc, laakiin meelaha sida daanka hoose, sanka, cagaha, gacmaha, iwm looma kulmin ossification inta lagu jiro nolosha qofka
Xaalado dhif ah oo ku jira jirka dhalinyarada ah, dheecaanka HGH sababo kala duwan ayaa si weyn loo kordhiyay, ka dibna waxaa jira xaalad marka ilmuhu ku koraan xajmiga weyn iyo xitaa gigantic ka badan mitirka 2. Waqtigan xaadirka, hoosta kormeerida takhasus leh falanqaynta hormoonka koritaanka, wax ka qabashada ayaa la samayn karaa, carruurta la il darnaanta yaraanta kobaca is-koritaanka, si loo kordhiyo hoormoonka koritaanka shilalka ama, siiba, si gaabis ah hoos u dhig soo saarka somatotropin
Qofka qaangaarka ah ee jirka oo buuxa, HGH wuxuu qabtaa hawlaha anabolic wuxuuna mas'uul ka yahay hababka looxa dhejinta borotiinka ee dhammaan xubnaha iyo unugyada. Intaa waxaa dheer, HGH waa hormoon cadaadis, xaaladaha walaaca ah ee heerka HGH ayaa si xoog leh u kordha kaas oo ka caawiya jirka in uu dardar galiyo borotiinka gaar ahaan habka tamarta tamarta unugyada aadanaha
Dadka qaba murqaha wanaagsan iyo dastuur adag waxay guud ahaan u adkeeyeen cadaadiska iyo mudnaanta HGH
Marka maqnaanshaha hoormoonka koritaanka ee jirka ilmaha, carruurtu aad bay u koraan, xitaa laba xajmood oo xajmi ah. Iyadoo la'aanta HGH la'aanta qof weyn ayaa laga yaabaa inuu bilaabo inuu horumariyo nooc kasta oo ka mid ah xumad, ama xitaa gobolka ayaa dhiman kara dhimashada
Wax yar oo ku saabsan qanjirka pituitary - qanjirada pituitary waa qaybta hoose ee maskaxda ee qaabka iyo xajmiga cherry, wuxuu ku yaalaa saldhigga dhirta, wuxuuna mas'uul ka yahay soo saarida hoormoonka somatotropic iyo kuwa kale, sida hormoonka kor u kaca (hormoonka) saameeya qanjidhka thyroid), adrenocorticotropic (wuxuu kiciyaa qanjirrada adrenal), gonadotropic (firfircoon gonads), iwm.
Qanjirka 'pituitary' ayaa si toos ah u xakameynaya hypothalamus, waxay soo saartaa xoriyada iyo xayawaanka. Waxaa habboon in la fiiriyo in hgh ay ku xiran tahay laba hormoon - somatoliberin iyo somatostatin, somatoliberin hypothalamus waxay kordhisaa hormarka hormoonka korriinka qanjirka 'pituitary gland'
Somatostatin, si kastaba ha ahaatee, waxay hoos u dhigtaa dheecaanka hoormoonka koritaanka, ugu dambeyntii haddii aan dooneyno inaan kordhino xaddiga hormoonka koritaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo qadarka somatoliberin ama in la yareeyo nuxurka qaaxada
HGH waxay kaliya saameyn kartaa unugyada tuubada tijaabada ah ee xaddiyada 2000 oo ka sarreeya jir ahaaneed. Gudniinka caadiga ah, HGH waxay ku dhaqmaan oo keliya beerka. Beerka wuxuu soo saaraa isugeyn sida koritaanka insulin, oo sidoo kale loo yaqaan somatomedin. Somatomedin - waxa kale oo uu leeyahay saameyn dhaqso ah iyo koritaan, taasoo saamaynaysa unugyada bartilmaameedka.
Dhakhtar ahaan, badanaa waxaan arkayaa kiisaska marka cudur daran beerka uu cunuggu joojiyo koritaanka iyo xaalad la mid ah fayruska pituitary wuxuu dhacaa, inkasta oo cudurku sidiisa oo kale uu keeno somatomediin la'aanta.
Dhinaca kale, acromegaly wuxuu caadi u yahay heerka caadiga ah ee gulukooska dhiigga ee dhiigga. Cudurkan kiiskan waxaa sababa heer sare oo ku jira dhiigga somatomedine.
Guud ahaan, silsiladda xeerka anabolismka leh hormoon somatotropic ayaa lagu dabaqayaa muruqyada qalfoofka waa sida soo socota:
Hawlaha anabolic, tusaale ahaan, koritaanka murqaha, waxaanu isticmaali karnaa dhawr habab:
1) waxa ugu fudud oo waxtarka leh waa hordhaca joogtada ah ee jirka ee HGH
2) Kordhi xaddiga somatoliberin ee
3) Yaree qadarka somatostatin
4) Si loo soo bandhigo somatomed jirka
Faahfaahin dheeraad ah, tixgelinta qawaaniinta somatotropin iyo somatotropin
HGH badanaa hormoonka peptide, wuxuu ka kooban yahay tiro ku filan oo ah astaamaha amino acids 191. 1921, tallaabada hoormoonka koritaanka waxaa lagu daboolay xayawaanka, saameyntu waxay ahayd qiyaasta farsamaynta marka ay soo bandhigtay naqshad cufan oo ah laf dhabarka ah ee qanjirka pituitary. Farsamadan Faytojiyeyaashu waxay si toos ah u muujiyeen suurtogalnimada in la kordhiyo koritaanka dhalinyarta.
1944, HGH oo la nadiifiyey HGH waa la go'doomiyay xayawaanka, somatropin ayaa bilaabay in laga takooro 1956 waxaana loo bilaabay in loo isticmaalo daaweynta guulaha ee naarada, kadibna aqoonyahanadu waxay aqoonsadeen qaababka 3 ee HGH oo leh miisaanno kala duwan
Xaqiiqda dhabta ah ee isticmaalka hoormoonka koritaanka ayaa ka helay codsigiisii ​​kubbadda koleyga, hormoonka koritaanka ayaa loo bilaabay in loo isticmaalo beerista macmalka ah ee kubadda koleyga ee ku fadhida wax ka badan mitirka 2
Siideynta hormoonka koritaanka ayaa u muuqda mid xajmiga leh iyadoo ay ka timaaddo 6-12, inta badan inta badan waxay dhacdaa inta lagu jiro xilliga jimicsiga, xaaladaha ba'an, isbeddelka heerkulka iyo inta lagu jiro hurdada, marka cuntada cunto karbohidratka la qaado, dheecaanka HGH hoos u dhaco
Daraasado dheeraad ah ee hoormoonka koritaanka ayaa muujiyay in hormoonka koritaanka ee noocyada hoose uusan si buuxda u saameeynin noocyada sare. Tusaale ahaan hormoonka kobcinta bini'aadamka ayaa si fiican uga jawaab celiya daayeerada iyo naasaha kale, marka laga reebo dufanka HGH ama lo'da aan saameyn ku yeelan jidhka bini-aadamka
Noocyada iyo qaababka HGH
Wakhti dheer oo HGH ah ayaa la heley oo wali laga helaa meydka dadka, qaar ka mid ah waddamada qaarkood xitaa sharciyo gaar ah ayaa la mariyay kadib markii furitaanka qofka qanjirada qanjirada ku qasban yahay in loo wareejiyo xarumo khaas ah oo lagu shaqeynayo. Hadda HGH waxay barteen inay soo dejiyaan oo ay helaan farsamo
1963, markii ugu horreysay, Maraykanka ayaa aasaasay barnaamij qarameed oo loogu talagalay uruurinta walxaha jidhka pituitary iyada oo la soo saarey wax soo saarka daroogada - hoormoonka koritaanka bini'aadamka
1964 ee Baltimore wuxuu bilaabay urur iskaa wax u qabso ah "koritaanka qof" caawimaad iyo daaweyn bilaash ah oo ka yimaada miyir-qabad ka timaada yaraanta somatopin, laakiin ugu dhakhsaha badan qaar ka mid ah dadka caafimaad qaba ee koritaanka hoose ee zainetrisovalsya koritaanka buuraha ee waaliddiinta oo raba inay kordhiyaan kobcinta caruurtooda, taas oo keenta dulsaar wayn oo ah daroogo rajo leh
Caanaha koritaanka hormoonka bini-aadanka ayaa si tartiib tartiib ah u bilaabay inuu helo caan, waalidku waxay bilaabeen inay iibsadaan HGH carruurtooda si ay u sameeyaan waalidiintooda toddobaadkooda, hormoonkooda koritaanka bini'aadamnimada sidoo kale waxay isku cadeeyeen daaweynta cudurada halista ah sida gubashada, jabka lafaha, boogaha caloosha, mustaqbalka, hoormoonka koritaanka wuxuu ka heli doonaa codsigiisa liis dheer oo ah horay u sii jiritaanka iyo daaweynta cudurrada
Sidoo kale, hoormoonka koritaanka wuxuu ka heley codsigiisa ciyaaraha isboortiga, taas oo kordheysa baahida, taas oo aan saameyn karin qiimaha hormoonka koritaanka ee suuqa iyada oo la kordhiyo
Astaanta hormoonka koritaanka adduunka ayaa si caan ah u helaya maalin kasta oo uu marayo, waxaana uu leeyahay rajo wanaagsan oo ku saabsan codsiga iyo horumarka, sidaas awgeed caanaha koritaanka sare ee koritaanka hormoonka bini'aadamka ayaa u qalmaa ficil ficil ah oo aan wax saameyn ah lahayn
Ilaa hadda, shirkadda dawada ee ugu weyn dunida ayaa loo aqoonsaday inay tahay suuqa ugu weyn dunida ee daawooyinka Pfizer, soo saarista hoormoonka koritaanka ugu fiican ee la yiraahdo Genotropin, oo ah dhibaatada keliya ee daroogadaasi waa kharashka qaaliga ah
Qeybta caalamiga ah ee HGH 0.9 mg waa 3 IU ama 1 IU waa x mg xmUMX, celcelis ahaan qiyaasta ragga loogu talagalay waa 0.3 mg ama 0.9 IU marka ay jirto 3 ama 0.6 IU oo loogu talagalay haweenka, saameynta anabolic iyo muruqyada korrinka degdega waxay kordhin karaan qiyaasta 2-2 IU
Maadaama daraasadaha ay muujiyeen isticmaalka hoormoonka koritaanka subaxnimada calool madhan iyo ka hor inta aan la seexin isla sidaas, bukaanku wuxuu dooran karaa hab nololeed iyo roonaan. Sidoo kale, daraasaduhu waxay muujiyeen in qaybinta qiyaasta maalinlaha ee qaybaha 2 ay saameyn la mid ah qaadashada qiyaasta maalinlaha ee hal dose
HGH waxaa loo maamulaa si taxadar leh oo loogu talagalay xajmiga caloosha 2-3 mm, laakiin xaqiiqda waxaa lagu duri karaa qayb kasta oo ka mid ah jirka, garabka, lugta, laakiin caloosha ayaa ah midka ugu raaxo badan iyo xanuun la'aan, qaar ka mid ah HGH gaari dhibaato Meelaha, iyada oo tixgelinaysa in meesha daroogada la keeno ay gubi doonto baruurta si dhakhsa ah, maahan, dhab ahaantii saameyn isku mid ah ayaa laga gaarey sameynta qayb ka mid ah jirka
Qiyaasta celceliska daaweynta, soo kabashada waa bilaha 5-8, in ka badan bilaha 8 HGH waxay noqotaa mid waxtar leh, waana lagama maarmaan in la dhammeeyo koorsada ama hakadka
Qiyaasta haweenka iyo habka daaweynta waxay ka yar tahay ragga, maxaa yeelay HGH waxay u dhaqmaysaa haweenka si ka fiican oo wax ku ool ah, sababo badan oo kala duwan, isdhexgalka hoormoonka kale, nuugista ka sii fiican, miisaanka, muruqyada unugyada, iwm.
Gabadhu waxay u saameeyaa hormoon korriin ah marka loo eego jidhka labka ah, marka lagu daro dumarka oo dhan waxay u nugul yihiin hoormoonka koritaanka ee u oggolaanaya dumarka inay qaataan qiyaas yar oo leh isla guul
Saameynta HGH ee ku saabsan metabolismka
Waxaa laga yaabaa in tallaabada ugu muhiimsan ee hoormoonka korriinku uu yahay borotiinka wax soo saarka, bilowga beerka, dhiigga iyo murqaha. HGH waxay u keentaa saameyn anabolic ah oo ah unug xooggan, hormoonada koritaanka waxay kordhisaa hormarka iyo gaadiidka amino acids ee muruqyada, iyada oo si wanaagsan loo jimicsado jirdhiska, maskaxda murqaha ayaa koraaya iyo dhumucdeeda, taas oo keeneysa korodh weyn oo ka yimaada muruqyada
Hormarka koritaanka waxaa loo qeybin karaa qaybaha 2 peptide, qaybta koowaad waxay leedahay saameynta anabolic, saamiga gubashada labaad ee baruurta, guud ahaan, waxaa jira kororka difaaca iyo kor u qaadista guud ee waxqabadka jirka. Dardar-gelinta borotiinka kobcinta ee koritaanka HGH, awooda dardar-gelinta koritaanka lafaha dhererka, si loo xiro aagagga loo yaqaan cartilaginous, iyo sidoo kale koritaanka lafaha ee dhumucda ka dib marka la gooyo aagagga cummaanka
Maaraynta qiyaaso yar iyo mid dhexdhexaad ah, hoormoonka kor u kaca wuxuu kordhiyaa suurtagalnimada unugyada gulukoosta iyo waxay saameyn ku yeelataa insulinta. Dareemidda borotiinka ayaa kor u qaada beeryarada, taas oo keenaysa kororka wax soo saarka insulin. Marka la samaynayo qiyaaso sarreeya oo sareeya hormoonada koritaanka, kororka sonkorta dhiigga ayaa dhacda, dystrophy suurtagal ah ee qanjidhada ayaa yaraynaysa wax soo saarka insulin, taas oo ah, in ka badan qiyaaso badan oo hormoonno hormoon ah ayaa sababi kara diabetes mellitus
Yaraynta unugyada adipose, daaweynta hoormoonka ee koritaanka buurnaanta ayaa muujisay saameyn aad u wanaagsan marka la eego xaalad jireed iyo tababarka wadnaha, taasoo keeneysa koritaanka muruqa ee walxaha bararsan
Hormoonka korriinka waxay hagaajinaysaa tayada dhiigga oo ka hadlaya hagaajinta borotiinka-synthetic-ka ee dhuuxa lafta
Dheef-shiid kiimikaad ah - bilawga daaweynta hoormoonka koritaanka, dib u dhac ku yimaada fosfooraska iyo potassium ee kaadida ayaa dhacaya, taas oo muujinaysa borotiinka synthesis
Kalsiyum iyo korodhka waxtarka, kadibna hoos u dhac ayaa la arkay, tani waxay muujinaysaa qaabka cusub ee cusub iyo xoojinta nudaha lafaha hore. Calaamadaha koritaanka murqaha jidhka waxaa lagu arkay fosfooraska fosfooraska ee jirka, marka lagu daro saameynta anabolic ee hormoonka koritaanka waa mid adag oo ka hortag ah. Qof kasta oo billaabaya inuu soo saaro STG si uu u keeno gobolka anabolic isla markiiba ogeysii dhibic cunto xumo.
Dad badan, tani waa la yaabay, maaddaama kororka muruqyada ee fahamka ay tahay in lala xiriiriyo koritaanka cuntada, laakiin maaha. Daraasadihii ugu danbeeyay ayaa muujiyay in saameynta ka hortagga hormoonka koritaanka hormoonada ay ka badan karto saameynta tooska ah ee anabolic.
Sidaa darteed, waafaqsan caqligalka waxyaabaha, isticmaalka alaabta caag ah ma aha in la kordhiyo, laakiin hoos u dhac.
Isdhexgalka HGH ee hormoonnada kale
Marka ficilka thyroid hoos u dhaco, jirka ayaa si aad u liita ugu gudbiya hargabka HGH meel ka baxsan. Xaaladdan, si loo gaaro saameyn daweyn oo wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in marka hore la saxo shaqada qanjirka thyroid (xagga kor u kaca). Tan waxaa lagu gaari karaa iyadoo lagu maamulayo hormoonnada tayroodh (tixgelin la'aan) iyo daroogo kale (adrenomimetic).
Waxaa muhiim ah in bukaanka qaba hyperthyroidism (kor u kaca shaqada tayroodh) heerka HGH ee dhiigga mar walba sarreeya. Waxtarka hirgelinta HGH ee xagaaga ayaa had iyo jeer ka sarreeya xilliga jiilaalka, sababtoo ah xagaaga, waxaa jira waxoogaa korodhsan jir ahaaneed oo ku yimaada shaqada tayroodh. Wuxuu ciyaaraa doorka iyo kordhinta xasaasiyadda unugyada hoormoonka tayroodhka.
Badanaa, tirtirka ayaa loo isticmaalaa, laga helaa qanjidhada qanjirada ee qanjirada. Marar dhif ah, iskudhafka synthetic, sida triiodotyronine (triiodothyronin hydrochloride) iyo L-thyroxine. Diyaargaroobidda isku dhafan oo ay ku jiraan isku dhafka L-thyroxine iyo triiodotyronin ayaa sidoo kale la heli karaa.
Kuwa ugu caansan waxay yihiin tirokoob, tirokoobi, iyo cytel.
Qiyaaso yar yar ee hoormoonada xayawaanka (glucocorticoids) waxay kor u qaadaan saameynta hormoonka koritaanka ee unugyada. Qiyaaso badan, oo liddi ku ah, daciif ah. Waxaa intaa dheer, qiyaasaha qaarkood ee hormoonnada glucocorticoid waxay gabi ahaanba xannibi karaan saameynta iyo saameynta anabolic ee somatotropin labadaba. Qaar ka mid ah noocyada nacaybka (nacaybka) ayaa ah mid aan la xiriirin xaqiiqda ah in uu jiro somatotropin yar oo jidhka ka mid ah oo aan xaqiiqda ah in beerku uusan soo saarin somatomed ku filan.
Taasi, iyo kan kale ayaa ku filan. Qanjirrada 'adrenal excess' ee loo yaqaan 'glucocorticoid' sababtoo ah ACTH hypersecretion ee qanjirka 'pituitary gland' waa in lagu eedeeyo.
Glucocorticoids waxay xannibaysaa saamaynta somatomedin iyo somatotropin ee heerkulku yahay, oo lagu daray, waxay hoos u dhigaan dheecaanka GH ee unugyada eosinophilic ee qanjirka pituitary.
Glucocorticoids ma aha oo kaliya inay joojiso saameynta somatotropin. Ka dib markii la geynayo jidhka guud ahaan qadar xaddiga 100, waxay joojiyaan sii deynta GH ee jawaabta insulin hypoglycemia iyo faleebo faleebo ah ee arginine, sii-daynta tababbarka ka dib ee GH halka qaadashada L-DOPA hoos u dhacdo.
Ku dhowaad isku mid ayaa laga sheegi karaa dhammaan hababka kale ee lagu dhiirigelinayo soo-saarista iyo sii deynta dhiigga GH iyo somatomedin, iyo sidoo kale saameyntooda ugu dambeysa.
Glucocorticoids si fudud ugama saari karto saameynta GH. Waxay iyaguna sidoo kale yihiin buugga. Soddotropin sii-deynta sii-deynta ka dib ayaa sidoo kale xannibay.
Cabbiraadda hoormoonka hormoonka ee habeenkii ayaa sidoo kale ku dhacda glucocorticoids. Qodobada ugu sareeya ee hormoonnada koritaanka hormoonku waxay noqdaan kuwo ka hooseeya dhererka isla markaana yareynaya waqti yar.
Glucocorticoids waxay saameyn xun ku yeelan kartaa oo kaliya nidaamka somatotropin, laakiin sidoo kale nidaamka synthesis iyo saameynta ugu dambeysa ee hoormoonka kale ee isku dhafan (kor u qaadayaasha) nidaamka somatotropin.
Testosterone waxay kor u qaaddaa nidaamka somatotropin ee ragga iyo glucocorticoids, haysashada antagonismka testosterone ma aha si toos ah laakiin si aan toos ahayn u muujineysa waxtarkeeda mucjiso ee nidaamka somatotropin.
Marka lafdhabarta koontooyinka adrenal si kor loogu qaado ficilka hormoonka koritaanka, waa la hagaajiyaa hoos. Marka xajmiga qolofta adrenal ay kordhiso shaqadeeda, ama ku dar qadar yar oo ah daawooyinka glucocorticoid ee jirka. Waqtigan xaadirka, kaliya glucocorticoids ayaa loo isticmaalaa, oo xulashadooduna aad ayay u ballaaran yihiin.
Kuwani badi ahaan waa prednisolone, prednisolone hemisuccinate, methylprednisolone, dexamethasone, triamcinolone, hydrocortisone, hydrocortisone acetate, hydrocortisone hemisuccinate. Daawooyinka oo dhan si taxaddar leh iyo qiyaas aad u yaryar u dalbo si aaney u keenin saameyn cad.
Xuruufta cortex-ka waxaa ku badan cirbada cudurka Onenko-Cushing, marka hyperplasia ee xuddunta adrenal ka soo baxdo iyada oo loo marayo faafidda ACTH iyo heerka glucocorticoids ee dhiigga ka badan dhamaanba la arki karo oo aan la qiyaasi karin. Waxaa suurtogal ah in lagu ogaado cudurka Itenko-Cushing oo keliya marka uu arko bukaanka.
Xaqiiqdu waxay tahay in dufanka ku jira jidhka dadkani uu yahay mid caan ku ah. Dufanka ayaa badanaa la dhigaa dhabannada, caloosha, dhinacyada iyo badhida. Muruqyada gacmaha iyo lugaha ayaa ah kuwa la riixay, oo ka soo horjeeda astaamaha caloosha iyo badhida, waxay si fudud u eegaan xataa xitaa dhab ahaantii. Mawduucyada jidhka ee sida noocaas ah waxay u eg yihiin pear. Daadinta dufanka ayaa ku jirta meelaha kor ku xusan sababtoo ah xaqiiqda ah in ay jirto tirada ugu badan ee daawada insulin.
Insulintu waxay magdhow u tahay saamaynta quraanka ee glucocorticoids ee la xidhiidha metabolismka borotiinka, laakiin isla mar ahaantaana, wuxuu supercompensates saamaynta quraanka ee steroids ee la xidhiidha dheef-shiid kiimikaadka.
Glucocorticoids xad dhaaf ah oo jirka ku jirta ayaa dhici karta ma ahan kaliya inta lagu jiro jirada. Hypertrophy ee qanjidhada adrenal waxay u horumarin karaan sababo kala duwan. Waxay kobcin kartaa kaddib marka uur la yeesho, ka dib marar badan oo ku soo noqnoqoneysa, oo ka soo horjeeda cudurka dabaysha (sida caadiga ah sanbabada ama qaansarrada), ka dib marka loo eego, sababo la xiriira da'da. Midkood walbahaarka ee nolosha qofka ayaa ka baxa isagoo aan raadsanayn qanjidhada adrenal ugu yaraan wax yar, laakiin waxay yihiin fareer. Qeybta labaad ee nolosha, dad badan ayaa bilaabay inay isku mid noqdaan pear-ka ku jira muuqaalkooda jidhkooda. Tan waxaa loo yaqaan 'Itenko-Cushing' da 'syndrome'.
Ka hor intaanad bilaabin daaweynta hoormoonka hormoonka, hormoonnada glucocorticoid ee dhiiga waa in la yareeyaa iyada oo aan loo eegin haddii uu yahay Cushing ama cushoid syndrome asal ahaan.
Noocyada daran ee cudurka Onenko-Cushing waxaa lagu daaweeyaa xag jir.
Mid ka mid ah qanjirrada adrenal ayaa la saaraa, kan kalena waa la jarjaraa oo la beero neutron. Cudurku wuxuu u eg yahay gacan. Cudurka khafiifka ah, iyo sidoo kale cudurrada cunkoid, ayaa laguula dhaqmaa si caadi ah. Soo qor daawooyinka hoos u dhigaya shaqada koontada adrenal.
Hogaamiyaha kiiskan waa daawo sida Aminoglutethimide (synim. "Orimeten"). Aminoglutethimide waa mid wanaagsan, sababtoo ah marka lagu daro xakameynta kiliyaha adrenal, wuxuu yareeyaa soosaarida estrogen ee jidhka sidaas darteedna wuxuu leeyahay saameyn aan macquul aheyn.
Waxyeelada aan tooska aheyn ee orrogenic waxay sidoo kale u sabab u tahay xaqiiqda ah in glucocorticoids ay xakameynayaan waxqabadka of androgens labadaba heerarka gacanta iyo nidaamka. Ka tirtiridda glucocorticoids xad dhaafka ah, aminoglutethimide wuxuu joojiyaa falalka of androgens.
Foomka sii deynta: kiniinada 0.25 g.
Xameeyaa 0.25 g, 2-4 jeer maalintii.
Dhibaatooyinka kale waa dhif iyo naadir waxayna muujinayaan uun xasaasiyad, taasoo si dhakhso ah u gudubta siidaynta daroogada.
Intaa waxaa dheer, aminoglutethimide wuxuu leeyahay waxqabadyada anticonvulsant.
Chloditan (syn. "Mitotane") waa daroogo aad u firfircoon oo xakameynaya waxqabadka gobolka kortikal ee qanjidhada adrenal.
Foomka sii deynta: kiniinada 0.05 g.
Lagu qaato afka, laga bilaabo 2-3 g maalin kasta maalmaha ugu horeeya ee 2, ka dibna xaddiga 0.1 g / kg miisaanka jidhka maalintii. Qiyaasta maalinlaha ah waxaa lagu bixiyaa qiyaasaha 3 ee daqiiqadaha 15-20 ka dib markii la cuno. Dhibaatooyinka kale ayaa ka badan inta ay qaadanayaan aminoglutethimide.
Lalabbo, cunto xumo, madax xanuun, lulmo la'aan. Marka ay dhacaan, qiyaasta daawada ayaa si fudud loo yareeyo heerka daroogada si fiican loo dulqaatay.
Labada aminoglutethimide iyo chloditan labadaba waa astaamaha qadiimka ah ee ka soo horjeeda. Mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa sidii daaweynta murqaha dhismaha.
Xilligan, suuqa daawada ee dalkaaga waxaa ku jira noocyada ugu badan ee 2 ee insulin-gaaban oo gaaban: bini'aadam (jinsi ahaan loo naqshadeeyey, laga helay boogeenta bakteeriyada) iyo porcine (laga helay qanjirada pankreatic ee doofaarrada dhirta-farsamada). Waxyaabaha aan caadiga ahayn waa noocyada saddexaad, insulin-ta 'insulin', oo ka soo baxda qanjirka buluugga.
Inkastoo insulinta doofaarka, inkasta oo ay ka jaban tahay insulin insulin, ma aha mid tayo fiican leh oo loo adeegsan karo si dhab ah guusha.
Nooca ficilka insulin waa in uu si weyn u yareeyo heerka sonkorta ee dhiigga. Dhibaatada oo dhan ee isticmaalka farsamada insulin waa inay hoos u dhigto heerka sonkorta dhiigga ku filan si xoog leh si loo sii daayo somatotropin ugu badnaan iyo waqti isku mid ah oo aan ku filnayn qofku inuu miyir beelo.
Insulin ayaa bilowda in si taxadar leh loo maamulo, oo leh qiyaas yar oo yar (4 U) subag ahaan. Haddii jimicsiga subaxdii, markaa insulin ayaa la duraa kadib jimicsi. Haddii tababarku yahay fiidkii ama galabtii, markaa insulinta ayaa la soo bandhigaa subaxdii waxaana qofka cayaaraha ah bilaabi doona tababarka kaddib marka tallaabada insulin dhammaato. Maalin kasta, qiyaasta insulin-ta waxaa kordhay 4 IU illaa iyo inta ay qaadato qiyaasta 60 IU. 60 U waa qiyaas amaan ah oo aan ahayn qof keliya ayaa miyir beelay.
Si ka duwan sida hoormoonka kale ee loo yaqaan 'peripheral peripheral hormones', insulin ma laha xeerka tropic. Sidaa daraadeed, hordhaca insulin-ta ma aha mid xariif ah oo la qabatimo.
Si khaas ah, xitaa dhakhaatiir badan ayaa ogaanaya tan. Rugta caafimaadka maskaxda, waxaan u baahday inaan kormeero bukaanka lagu daaweeyo jadeecada insulin. Qaar ka mid ah ayaa lagu duray 240 IU ee insulin maalin kasta ka dibna si dhakhso ah loo joojiyay daaweynta. Waxna ma dhicin ka dib. Wax calaamado ah lagama tago, calaamado muujinaya dib u celinta, iyo waxyaabaha la midka ah ee aan fiicnayn.
Xitaa marka laga reebo, haddii heerka sonkorta dhiiggiisu uu yaraa (sobabaha) ka hor daaweyn insulin, heerka sonkorta dhiigga ayaa dib ugu soo noqdey daaweynta insulin kadib. Haddii finanka sonkortu uu ahaa mid u dhow, waxay u egtahay muuqaal caadi ah, iwm. Daaweynta insulin-ta ma aha oo kaliya sababo isbeddel aan fiicnayn, burburinaya beeryarada, laakiin liddi ku ah waxay xoojinaysaa beeryaraha, waxayna kordhisaa awooddeeda synthetic (tani waa fure insuliinta).
Dareenka insulin wuxuu ka duwan yahay ciyaartoyda kala duwan. Iyadoo heerarka sonkorta dhiiggu sarreeyo, qaarkood ma dareemaan wax xitaa ka dib markii la isticmaalo 20 IU insulin. Dabcan, iyaga loogu talagalay xadka ugu sarreeya ee sare waa inaanan 60 IU, laakiin 80 IU. Iyada oo heerka sonkorta dhiiga ee dastuurkeedu hooseeyo, dareenka jirka ee insulin, lid ku ah, wuxuu noqon karaa mid aad u sarreeya. Hordhaca insulinta xaaladaha noocaan ah waa inaanan bilaabin 4, laakiin 2 U iyo kordhinta qiyaasta maalin kasta, laakiin mar kasta 2-3 kasta. Qiyaasta ugu badan ee la ogolyahay waa wax ka badan 40 U mudista.
Waxaa jira kiisaska marka hore la eego, marka, marka koorsada daaweynta insuliintu ay sii socoto, dareenka ayaase hoos u dhaco, laakiin, liddi sii kordhaya. Sidaa darteed, tusaale ahaan, markii la gaaray qiyaasta caadiga ah ee 60 U, qofku si lama filaan ah ayuu u bilaabmaa wakhti ka dib si uu u dareemo in qiyaastaas ay tahay mid aad u sareysa sababta oo ah hypoglycemia.
Si tartiib ah, hoos u dhigista qiyaasta insulin maalinlaha ah, wuxuu joojiyaa 40 U, sida ugu filan, laakiin halkan mar kale "yaab leh" ayaa isaga sugaya. Muddo ka dib, 40 U noqoshada mar kale waa weyn mar labaadna qiyaasta daawada mar kale waa la dhimayaa. Dareenka noocan oo kale ah insulin laga sameeyay dibedda kaliya ayaa xaqiijinaysa in insulin ka baxsan xoojineysa beeryaraha gaarka ah waxayna kordhisaa wax soo saarka insulin-ta (endogenous insulin). Dabcan, arrintan, baahida insulin, oo laga qaado dibedda, ayaa dhacda.
Waxaa jira laba hab oo loo maamulo insulin - jilicsan oo adag. Marka la eego habka jilicsan, insulinta ayaa la isku duraa ka dib cuntada, oo ay adag tahay calool madhan. In la baro insulinta calool madhan, dabcan, waxay keenaysaa sii-deyn ballaaran oo somatotropin ah. Laakiin farsamada noocan oo kale ah ayaa sidoo kale khatarta ugu jirta sababtoo ah khatarta ugu weyn ee ku dhici karta miyirka hypoglycemic.
Sidaa daraadeed, adoo isticmaalaya qaab adag, insulinta waxaa kaliya oo maamula qof awood u leh in uu ka baxo indha-indheynta ugu yaraan saacadaha 1.5-2. Saacadaha 1.5-2 ka dib marka la duro insulin, qofka ayaa la arkay kadibna raashinka waa la dhajiyaa. Kormeerku waa lagama maarmaan si qofka looga saaro koomaada hypoglycemic, haddii uu ku dhaco. Ka noqoshada coma hypoglycemic waxaa lagu sameeyaa iyada oo la adeegsanayo maamulka galmada 40% glucose, ama cirbadda hoose ee xNUMX ee 1% adrenaline. Mararka qaarkood waxay sameeyaan labadaba. Marka hore, adrenaline, ka dibna, haddii aysan ku caawin, ka dibna glucose.
Cunto-gelinta cuntada ee ku saleysan soo bandhigida insulin-ta waa dhibaato gaar ah. Nooc kasta oo insulin ah wuxuu leeyahay laba jajab. Mid ka mid ah garabku wuxuu u dhexeeyaa dhinaca wadada dufanka, iyo kan kale - baruurta iyo borotiinka isla hal mar. Tan iyo markii la xakameynayo ficil-celinta fal-galinta insulin, wax waliba waxay ku xirnaan doonaan
Asaasida amino acids crystalline si toos ah u murqaha. Halka, ayadoo ay sabab u tahay dhaqdhaqaaq jireed oo ku filan, waxay isla markiiba ku jiraan hababka protein-synthetic. Qaar ka mid ah asiidhyada amino ayaa marka hore "loo beddelay" barafyada beerka. Markaa borotiinkan waxaa loo qaadaa murqaha.
Cunnooyinka raashinka leh asaasiga ammaamada isla markiiba waxay keenaan dhibaatooyin halis ah.
Dhibaatada ugu horreysa waxay tahay in alaabada amino acids crystalline loo baahan yahay aad u badan.
Fikradda xulashada iyo fekerka ah ee fekerka ah ee kiiskan waa in la cuno kaliya asiidhyada amma crystalline iyo wax kale oo badan. Waxay la socotaa culeyska cuntada sida insulinta oo dhan ay raaci doonto "waddada borotiinka", waxayna kordhin doontaa qiyaasta muruqa caanaha oo aanad helin dufan. Si kastaba ha noqotee, bixinta qiiqa ammaahda ah ee cadceeda ah oo keliya ayaa ah mid aad u qaali ah, oo ah sababo dhaqaale, oo aan macquul ahayn.
Intaa waxaa dheer, ka dib marka la soo saaro insulinta, dheelitirka nitrogen ee wanaagsan ayaa la ilaalin doonaa dhammaan maalmahaas. Qiyaasta wadarta qamriga amino ee cuntada waa in la kordhiyaa 2-3 g kasta 1 kg miisaanka jidhka, iyo marmarka qaarkood. Dhammaan waxay ku xiran yahiin himilooyinka cayaaraha ee isboortiga u dhigay. Dhowaan, waxaa jira cadad sii kordhaya oo caddayn cilmi ah oo ah in ugu badnaan ee miisaaniyadda nitrogen aysan u baahnayn wax ka badan 1.7 g oo borotiinka ah 1 kg miisaanka jirka.
Si kastaba ha ahaatee, doorka neurotransmitter ee qaar ka mid ah asiidhyada amino, awoodda ay u leedahay in lagu daro dheef-shiid kiimikaadka, tallaabada gaarka ah ee firfircoon ee cuntada, iwm looma xisaabin halkan.
Dhibaatada labaad waxay tahay in aashitada asaasiga ah ee saafiga ah ay aad u jilicsan yihiin xakamaynta hypoglycemia. Si loo dhammaystiro gargaarka hypoglycemia, ugu yaraan qadar yar oo ah carbohydrates ayaa loo baahan yahay, laakiin waxaa kaliya lagama maarmaan ah in la dhaafo, maaddaama carbohydrateskani si toos ah ugu xiraan insulinta "wadada dufanka". Kadib dhammaantiis, "wadada" insulin ayaa la xakameynayaa, sida aynu ognahay, inta badanna subagga cuntada.
Dhibaatada saddexaad waxay tahay in shakhsiyaadka qaba xanuunka 'atrophic gastritis', ama astaamaha hooseeya ee casiirka caloosha, asiidhyada amino-ka ee crystalline waxay keenaan saameyn jilicsan. Iyada oo leh astaamis aan lahayn - shuban dhab ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la tijaabiyo xaddiga qandhada ammaahda ah ee loo yaqaan 'crystalline amino acids' ee ah in ciyaartoyda isboortu ay isku halleyn karaan iyadoon wax saameyn ah ku yeelan karin naftiisa.
Cabbirka celceliska cuntada ayaa ah sida soo socota. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu dadaalo si loo hubiyo in ku saabsan 1 / 3 ee wadarta guud ee cuntooyinka ay tahay astaamaha amino acids, ama amino acids leh peptides, qaybta 1 / 3 - budada protein, iyo 1 / 3 qayb cunto ah. Amino acids oo leh peptides ayaa ka raqiisan asiidhyada saafiga ah ee saafiga ah iyo tufaaxa badan (dhammaan amino acids acids ah waxay leedahay dhadhan aad u xun) iyo ka sii fiicnaanta asiidhyada amino, waxay sii xumaanayaan dhadhanka).
Noocyada bakteeriyada waa in aan la karinin ilaa ay ka kooban tahay. U diyaari si joogta ah ee baradho la shiiday. Ukunta ukunta ugu macquulsan, sababtoo ah waxaa ku jira dhammaan asiidhyada amino oo si fiican u dheellitiran. Dheeraad ah, marka loo eego xaddiga faa'iidada leh, caanuhu waxay ka yimaadaan kiiska, hilibka, soyka iyo caanaha caanaha. Si dhakhso ah iyo dheecaan buuxa ee borotiinka, oo ay weheliso waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo enzymes dheefshiidka.
Xaaladaha caadiga ah, borotiinku wuxuu u baahan yahay saacado badan oo dheef-shiid kiimikaadka ah, mana jiro waqti lagu sugo asalka insulin. Waa lagama maarmaan in la gaaro gelitaanka asaasiga ammaaka ee dhiigga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah illaa laga gaarayo ficilka insulin uu joojiyay. Diyaargarasyada ugu caamsan ee ay ku jiraan enzymes digestive waa pancreatin, festal, enzistan, mezim, trienzyme, iwm. Dhaqankayga ayaa muujinaya in ugu fiican ee daawooyinkan ay tahay "festal".
Fikrad ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo ugu yaraan 100 - 150 g of asal asaliga ah oo keli ah ee crystalline ah gudaha 6 saacadood ee tallaalka insulin, iyo haddii khayraadka maaddooyinka uu ogolaado, ka dibna ka sii badan.
Haddii waxtarka qalabka aysan u oggolaaneynin isticmaalka amino acid iyo borotiinka ee cuntada lagu rido, markaa waa inaad si fudud uga shaqeysiisaa cuntooyinka borotiinka, in la yareeyo qaadashada karbohidratka ilaa ugu yaraan iyo gebi ahaanba iska daaya qaadashada dufanka.
Haddii insulinta la isku duro calool madhan, markaa raajada hypoglycemia waa in laga bilaabo marka la qaato asal asaasiga ah, iyaga oo ku dhaqaya qadar yar oo biyo ah. Haddii hypoglycemia aan si buuxda u joojin, ka dibna waxaad si fudud u qaadan kartaa carbohydrateska dheef-shiid kiimikaadka ah isla markaana si sax ah u dhiganta oo ku filan inay joojiso hypoglycemia. Carbohydrates-ka xad-dhaafka ah halkii laga abuuri lahaa kaydka glycogen ayaa toos u gali doona unugyada adipose waana in la xusuusnaado. Marnaba looma dhigi karno karbohidratka karboheedhka "daadinta".
Wax kale maahan markaa cayilka. Tilmaam wanaagsan oo ku saabsan tani waa jiidayaasha sumoobaya, kuwaas oo helaya tiro badan oo dufan leh oo leh caawimaadda karbohidratka ee ku salaysan asalka insulin. Daawada hypoglycemia, cabitaanada qalalan ee ciyaaraha biyaha ayaa ku haboon carbohydrate (carbohydrate) ama nafaqada karbohidratka meel fog iyo waqtiga jimicsiga.
Shakhsiyaadka horay ugu sarreeya ee heerarka sare ee hormoonnada glucocorticoid ee jirka ku jira, kororka baruurta ayaa laga yaabaa inay ka badato kororka murqaha oo leh qaladka ugu yar ee culeyska cuntada (bacdamaa carbohydrates). Dadkaas oo kale, baruurta waxaa badanaa la dhigaa caloosha, dhinacyada, baraha iyo dhabannada.
Murugada culus ee cuntada culus ee asalka ah ee insulinta ayaa ku jirta xaqiiqda ah in aadan awoodin karbohidratka, cuntada waa inay ahaataa mid gebi ahaanba borotiinka.
Laakiin hal maalin ayaan ku soo galay kiis cajiib ah oo kufilan. Ciyaraha bilaabay insulin-ta oo ay ku jirto load amino ambalaan ah ayaa si lama filaan ah u burburay illaa uu ku soo laabto cuntadiisa caadiga ah, oo ay ku jirto qadar xaq ah oo ka mid ah carbohydrateska.
Waxay ku jirtey cuntada sida caadiga ah ee uu ku heley qulqulo qallooci ah inkastoo dhammaan shuruucda la taaban karo oo aan la isku hallayn karin ee jir ahaaneed. Qofkasta oo kale, sida cuna qabatinka ah ee asalka insulin ma keenayso wax cayilan.
Isticmaalka insulinta ee ujeedooyinka anabolic waa mid aad u adag oo aad u ballaaran oo aan u qoondeeyey buug gaar ah. Nooca cusub ee buuggani wuxuu si dhakhso ah uga soo baxayaa daabacaadda cinwaanka. Anabolism Insulin II Ka eeg cinwaanka bogga ugu dambeeya ee daboolka.
Wadahadal badan iyo dood ku saabsan rabshad waa dhibaatada isku dhafka insulin iyo hormoonka koritaanka. Dhammaanba, dhammaan buugaagta ku saabsan biochemistry waxaa jira cutub kala duwan, oo loo yaqaan "hormoonada caadiga ah".
Aqoonta rasmiga ah waxay sidoo kale tixgelisaa somatotropin inay noqoto hoormoon ka hortag ah, laakiin waxaan hore u sharaxay caddaynta iyo caddaynta qoraalkan. Waxaan mar kale ku celinayaa: qadar yar oo HGH ah ayaa kaliya xoojiya beeryaraha, iyada oo aan wax dhibaato ah u keenin. Kaliya qiyaaso badan oo somatotropin ah waxay sababi kartaa sonkorowga mellitus, kaliya haddii uu jiro saameeyn hidda ah tan.
U sheeg in aynu hore u ogaanay qaar ka mid ah qiyaasaha hidaha ee sonkorowga, iyo hormoonka koritaanka ayaa wali loo baahan yahay. Maxaa la sameeyaa? Baaritaanka dheef-shiid kiimikaad sonkorowga, mawduuca qarsoodi ama qarsoodi ah. Tani ma aha mid aad u adag, maadaama ay jiraan sahlan iyo isla markiiba tilmaamayaasha sheybaarka lagu kalsoonaan karo. Ugu horreyn, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo baaritaano dhiig oo aasaasi ah iyo kaadi ah ee sonkorta. Dhammaan falanqaynta waxaa la sameeyaa subaxnimada calool madhan.
Dhiiga qof caafimaad qaba calool madhan waxa ku jira 4.4-6.6 mmol / l (80-120 mg%) oo ah gulukoos. Bukaanka qaba sonkorowga mellitus wuxuu kordhin karaa diiradkiisa 28-44 mmol / l (500-800 mg%) ama ka badan.
Si kastaba ha noqotee, marxaladaha hore ee sonkorowga ama foomamka yar yar (oo aan ka hadleyno kiisaska noocaan oo kale ah), sonkorta dhiigga soonka kama badna heerka, waana ka maqnaanshaha kaadida. Sidaa daraadeed, tijaabada dhiigga ee sahlan ee sonkorta ma aha tilmaame go'an oo ah dheef-shiid kiimikaad oo caadi ah. Falanqeyn fara badan oo dheellitiran waa baaritaanka PTH ee dulqaadka (iska-caabbinta) glucose. Waxaa loo sameeyaa sida soo socota. Bukaanku marka hore waxay go'aaminayaan heerka sonkorta ee dhiigga calool madhan. Ka dib markaa waxaa loo ogol yahay in uu cabo 50 g glucose, oo lagu tirtiro 200 ml oo biyo ah. Inta lagu jiro saacadaha 3 ee hadda, shaybaarada dhiigga ayaa laga soo qaadayaa daqiiqado kasta 30. Qofka caafimaadka leh, sonkorta dhiiga ee dhiiga ka dib markaa sida guluukoosta sida kakooban inta lagu jiro saacada ugu horeysa ee ku saabsan 50% heerarka bilowga, laakiin aan ka badnayn 9.4 mmol / l (179 mg mg), iyo saacad labaad hoos u dhaca qiimaha bilowga ah ama xitaa aad u hooseeya sababtoo ah sii deynta insulin-ta ee insulin by beeryaro leh kaydka si weyn.
Bukaannada qaba sonkorowga mellitus, xitaa marxaladda hore ee qarsoon, cudurku wuxuu dhacaa kaddibna wuu weynaadaa cabbirka. Heerka bilowga ee gulukoosku ma dhaco xitaa saacadaha 3.
Xitaa more sax ah waa tijaabada labajibbaaran, oo qaybta labaad ee gulukoosta xaddiga 50g loo oggol yahay in la cabbo saacad 1 ka dib qaybta hore. Qofka caafimaadka qaba, culeyska kowaad wuxuu keenaa kororka dheecaanka insulinimada sidaas darteed qaybta labaad ee gulukoosku ma keenayso koror cusub oo ah heerka sonkorta ee dhiigga.
Iyada oo tilmaamo ka sarreeya heerka ay ka hadlaan joogitaanka "hump". Haddii calaamadaha sonkortu aysan ku soo laaban wakhti wakhti dheer ah, ka dibna waxay ka hadlaan wareegga sonkorta "flat". Haddii sonkorta lagu soo celiyo sonkorta ku keento kor u kac ku yimaada heerka sonkorta ee dhiigga, tani waxay ku siineysaa sawir jajab ah sonkorta sonkorta leh.
Heerka sonkorta dhiiga ku jirta waxay ku xiran tahay habka ururinta dhiigga: dhiig kariyaha heerka sonkorta wuxuu ka sarreeyaa midka jooniska. Sidaa daraadeed, xaaladdan waa lagama maarmaan in dhiigga laga qaado farta kaliya.
Kacaawinta sonkorta dhiigga ma aha had iyo jeer calaamad diabeteska. Waxay noqon kartaa natiijada dareenka caadifada caadiga ah. Diiqada xoog leh waxay keenaysaa kor u kac weyn oo ah heerka sonkorta ee dhiigga. Mashruucani wuxuu kacay kaddibna wuxuu noqday mid ku soo kordhay geedi socodka horumarinta, maaddaama uu jiro xaalad walaac ah qofku wuxuu mar walba u baahan yahay tamar dheeraad ah weerarka ama difaaca si looga baxsado, ka dib marka dhan.
Kaadida, sonkorta ayaa la ogaadaa oo keliya marka heerka dhiigga uu gaaro heerar aad u sarreeya oo kelyuhu aanay awoodin in ay la qabsadaan suntan. Dhanka kale, ogaanshaha sonkorta ku jirta kaadida iyada oo la socota waxyaabaha caadiga ah ee dhiigga laga yaabo inaysan ka hadlin sonkorowga, laakiin waxa ku saabsan cudurada kelyaha. Qaar ka mid ah
waxaa jira calaamado ah sonkorow. Gaaban, gawracatada waxaa lagu dhiirrigeliyaa astaamaha dufanka leh, waxyaabaha ku jira ee dhiiga si toos ah ugu tiirsanaanta baruurta jirka ku jirta.
Sababtoo ah lipolysis la'aanta, dufanku wuxuu si joogto ah u burburiyaa astaamaha dufanka leh iyo glycerin, kaas oo dhiigiisa ku shubaya, ka dibna cadaadiska insulin mar kale wuxuu ka yimaadaa dhiigga galka adipose, marka dufan dhexdhexaad ah la sameeyo. Kadib marka la tirtiro miisaanka xad-dhaafka ah, dhammaan tilmaamayaasha sonkorta dhiigga waa caadi. Qiimeeynta ujeedada dheef-shiid kiimikaadka sonkorta, waa in aad si buuxda uga madax bannaanaato unugyada adipose.
Iyada oo ah dhakhtar wax ku ool ah, had iyo goor ayaan la kulmay dhacdo xiiso leh oo ku socota.
Shakhsiyaadka qaba osteochondrosis ee laf-dhabarka ilmo-galeenka, marinnada sonkorta ka dib culeysku ma kicin karo heerkuna sarreeyo, laakiin markaa wakhti dheer uma imanayso heerka ugu horeeya. Iyada oo loo soo jeestay suugaanta akadeemiyadda, waxaan ogaadey in xaaladdan la ogaaday in badanaa dadka bukaanka ah, hase yeeshee daaweyntiisaan qofna kuma soo jeedin. Iyada oo nooca shaqadayda, badanaa waxaan la kulmay dhacdooyinka kubbadda sonkorta ee kubada cagta iyo bustayaasha. Waxyaabaha gaarka ah ee isboortiska waa sida osteochondrosis ee laf-dhabarka afka ilmo-galeenka ayaa horay u soo baxa. Cayaartoydaasi waxay ku xiran tahay waxqabadka "buundada kubbadda cagta", iyo boorsooyinka sababtoo ah dhirbaaxada joogtada ah ee madaxa. Dad yar ayaa ogyihiin in dharbaaxo madaxa ah uu qoorta ka dhaawacmay wax ka badan madaxa madaxa. Xitaa barokac yar oo madaxa ah ayaa isbedelaya wareega.
Isla mar ahaantaana, maraakiinnada qoorta ee ku quudiya medulla ayaa la duubaa. Waxaa ku yaal medulla oblongata in xarumaha dheelitirka sonkorta ku yaal yihiin. Laga soo bilaabo halkan iyo xadgudubyadeeda qaab-qabsasho sonkorta ah. Xakameynta dhuunta ilmo-galeenka ee isku-dhafan oo lagu jimicsado jimicsi khaas ah ayaa ka caawiya inay soo celiyaan sonkorta sonkorta si caadi ah. Waxaa la yaab leh, habka daaweynta qadar yar oo insulin ah ama daroogooyinka sonkorta hoos u dhigta xitaa si dhakhso ah u siman yihiin xuubka sonkorta, xitaa iyada oo aan saameyneynin dhabarka afka ilmo-galeenka.
Qalabka afka ilmo-galeenka "guud ahaan lama dhimi karo Qaybta isgoysyada ee ku-meel-gaadhka ah ee laf-dhabarka ilmo-galeenka ayaa la kulma culeys ka weyn kan lumbar.
Sidaa daraadeed, calaamadaha yaryar ee ugu horreeya ee dhuunta ilmagaleenka (osteochondroh) ayaa u muuqday dadka horeyba uga jiray da'da 16. Madaxa ayaa noqda wax aad u adag. Hannaanka horumarka, ma aynaan wakhti u helin inaan la qabsano xiritaanka. Osteochondrosis ilmo-galeenka oo sabab u ah ka-dillaacidda xummad-dillaaceed ayaa kobcaya xitaa maqnaanshaha wax kasta oo sababa waxyeelo dibadeed. Maxaan ka dhihi karnaa xajinta korodhka!
Haddii sahanku aanu soo saarin sonkorowga qafiifka ah ama qarsoon, ka dibna somatotropin dabcan waa la isticmaali karaa. Sidaa awgeed, waxaan ku noqon karnaa doodeena bilawga ah: miyuu suurtagal yahay in la isku daro insulinta somatotropin, waana run mecnaheedu?
Haddii cayaartu si nidaamsan u sameyso insulin kali ah oo si toos ah u hesho natiijada uu ku qanacsan yahay, ma jirto baahi loo qabo in lagu xiro walxaha kale ee insulin-sida calaamadaha insulin-ta insulin.
Haddii qofku isticmaalo hoormoonka hormoonka kobcinta oo uu yeesho horumarkiisa horumarka, haddana wax walwal ah ma jiro. Waxaad si fiican u siin kartaa daawada farmasiga ah ee tababarka hal daroogo iyada oo aan xakameynin qaboojiyaha oo leh gasacadaha baakadaha dhalaalaya. Isla la mid ayaa lagu sheegi karaa steroids. Haddii ay jirto kali ku filan oo keliya, markaa, Ilaahay mahadsan, diyaarinta koox kale ayaa raaci doonta koorsada xiga.
Xaalad gebi ahaanba ka duwan ayaa soo baxaysa marka kaliya oo daroogo xoog leh aysan awoodin in ay bixiyaan duruufaha la doonayo. Aan u sheegno tusaale ahaan: cayaartu waxay korodhaysaa korriin fiican oo degdeg ah oo ka yimaada cufnaanta insulin oo keliya, laakiin ... mid weyn "laakiin" ayaa soo baxa: kororka muruqyada ayaa ku yimaada isla xaddiga dufanka subcutaneous.
Qofna marnaba majiraan muruqyada si dhakhso ah, wuxuu jecel yahay insulin, laakiin marna ma helin dufan si dhakhso ah, mana rabo inaan tuuro insulin. Oo halkan somatotropin yimaado badbaadinta. Qadar yar oo somatotropin ah ayaa kaa caawinaya in aad insulin ka sameysid baruurta ilaa borotiinka. Kadibna kororka muruqyada ayaa ugu badnaan noqon doona, kordhinta baruurtu waa yar tahay.
Qaado tusaale kale. Nin ayaa doortay daawada farmasiga ah sida somatotropin sababtoo ah, isla mar ahaantaana uu helayo qulqulka murqaha, wuxuu rabaa in uu bogsado dhaawac lafdhabarta ah. Kareemku waa 100 marar badan oo xasaasiyad leh somatotropin, ama halkii somatomedin, iyo doorashada kiiskan si sax ah loo sameeyey. Laakiin xitaa halkan waxaa jira hal weyn "laakiin" - somatotropin waa mid aad u qaali ah, wax badanna waxay u baahan tahay wax badan oo ah daaweynta oo dhan, iyo sababtoo ah qiimaha sarreeya, waxay ka badan tahay inta badan daawooyinka kale. Hawlaha hormoonada koritaanka waxaa lagu kordhin karaa iyada oo lagu darayo qiyaaso yar oo insulin ah iyo thyrocalcitonin.
Isdhexgalka HGH ee neurotransmitters
Neurotransmitters waa dhexdhexaadiyayaasha isku gudbinta halista ah ee unugyada dareemayaasha illaa mid kale. Endorphins iyo catecholamines waxay leeyihiin saameyn xooggan oo ku saabsan sameynta iyo dheecaanka HGH. Catecholamines waa dhexdhexaadiyeyaasha gudbinta calaamadaha kacsiga dareemayaasha ee habka dhexe ee neerfayaasha. Catecholamine neurotransmitters catecholamines waa dopamine, norepinephrine, adrenaline (oo sidoo kale hoormoonka adrenal medulla). Silsiladda catecholamine biosynthesis ayaa loo fududeyn karaa sida soo socota:
Sida aad arki karto, tiyosiinta amino acid muhiim u ah ayaa laga soo saari karaa phenylalanine amino acid muhiim ah. Marka loo eego tallaalka tyrosinase enzymes, L-DOPA (dioxophenylalanine, bidix) ayaa la soo saaray. Qayb ka mid ah L-DOPA waxay u socotaa qaabka melanin (tani waa isku mid ah midabka timaha, Iris, maqaarka, iyo xitaa qaar ka mid ah dhismayaasha dareemayaasha), iyo qayb ka mid ah sameynta dopamine, kaas oo norepinephrine iyo adrenaline horeba soo saaro.
Waxaa sidoo kale jira jawaab celin ka dhaxaysa melanin iyo L-DOPA.
Nidaamka neerfayaasha dhexe ee melanin waxay u adeegtaa nooc ka mid ah kaydka kaydka, taas oo, haddii loo baahdo, kaydka L-DOPA waa la buuxin doonaa. Kaliya adrenaline iyo L-DOPA waxaa lagu sameeyaa qaab saafi ah. Haddii aad u baahan tahay inaad kordhiso qiyaasta dopamine ama norepinephrine ee jirka (CNS), tani waxay si aan toos ahayn u dhicin.
Waxaa jira a- iyo b-adrenoreceptors of unugyada. Catecholamine kasta wuxuu u dhaqmi karaa mid ka mid ah noocyada kale ee aqbalaha, taas oo ku xidhan qiyaasta loo isticmaalo.
Xakamaynta a-adrenoreceptors waxay keenaysaa in la sii daayo somatotropin by qanjirka pituitary. Xakameynta b-adrenoreceptorov, ee liddi ku ah, waxay xakameysaa. Dhinaca kale, xannibaadda daaweenta a-adrenergic waxay keenaysaa in la xakameeyo sii deynta HGH, iyo xannibaadda b-adrenergic qaboojiyeyaasha waxay kordhisaa dheecaanka somatotropin.
Adrenaline waxay saameyneysaa duubayaasha a-iyo b-adrenergic labadaba, iminka waxa loo soo saaraa si macno leh. Geli galka hoose. Qiyaas dhexdhexaad ah iyo qadar sare ah ee adrenaline ayaa kicin kara HGH, sababtoo ah waxay u dhaqmaan si xoog leh oo ku saabsan a-adrenoreceptors marka loo eego b-reseptors.
Microdose adrenaline wuxuu saameyn ku yeeshay xarumaha soo saaraha b-adrenergic. Waxyaabaha HGH ee ku jira dhiigga ma kordhinayaan, lakiin hoos uma dhicin. Ciyaartoyda "pre-steroidal epoch", ciyaartoyda, ka hor tababarka, waxay iskutallaabin jireen adrenaline, taas oo kordhisay adkeysiga habka tababarka iyo, isla mar ahaanta, sii kordhinta tababarka diyaaradeed ee HGH.
Dhexdhexaadinta norepinephrine si khaas ah ayaa loo saameeyaa. Noradrepaline waxay kicineysaa adrenoreceptors, kordhinta sii deynta HGH ee dhiiga iyo bixinta
Wax walba oo kale waxay leeyihiin saameyn cad oo gubanaysa. Wakiilka ugu awoodda badan ee dejiya dhiiga ee norepinephrine waa ephedrine. Diyaaradan dhirta ah waxaa laga heli karaa efedra muraayad ah waxaana loo isticmaalaa sida farsamo khaas ah. Waxaa laga helaa qaab eefedrine hydrochloride. Hab kale oo awood leh oo dhiirigelinaya qaababka noradrenerjiga ah waa alkohooliin alkoholy.
Ka qaado jilif mid ka mid ah geedaha Afrika. Waxaa laga helaa qaabka yohimbine hydrochloride.
Dopamine wuxuu u dhaqmaa sida ugu dhaqsaha badan adrenoreceptors. Hordhaca maadooyinka daroogada dofiminostimuliruyuschee wax ficil ah looma keeno kororka xoojinta HGH ee dhiigga, laakiin sii deynta HGH oo ka jawaabeysa dhaqdhaqaaqa jidhka oo kordha, taasoo si weyn u kordhisa waxtarka tababarka. Murugo leh, oo leh xayawaanka Akomegaly, maamulka daroogooyinka ee kiciya dijinta daawaynta dopamine, liddi ku ah, waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada sii-deynta badan.
Wakaaladaha ugu badan ee la isticmaalo ee kor u qaada soo dejinta dopamine ee jidhka waa: beerka alkaloid bromocriptine (parlodel), L-DOPA (dioxyphenylalanine - deris ah oo ka mid ah phenylalanine amino acid). Waxaa intaa dheer, waxaa soo baxday in L-DOPA lafteeda ay kaalin muhiim ah ka ciyaarayso CNS oo ah neurotransmitter. Markii ugu horeysay, L-DOPA waxaa loo isticmaalay ammaahda Mareykanka. Cimilada amino acid phenylalanine, oo lagu qaato qiyaaso ku filan oo weyn, waxay u adeegtaa il-biriqsi ka mid ah jirka L-DOPA, ka dibna waxay ku soo noqotaa dopamin iyada oo dhammaan silsiladaha dambe ee isbeddelka (dopamine> noradrenalin> adrenaline). Dofomin ayaa sidoo kale laga soo saari karaa tyrosine amino acid.
Tyrosine, sida phenylalanine, ayaa loo adeegsadaa ciyaaraha isboortiga iyo caafimaadka ee dalal badan.
Habka loo adeegsanayo L-DOPA waxaa laga yaabaa inuu noqdo taariikhda ugu qanisan. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in L-DOPA ay ku cadeeyeen dhaqtarka caafimaadka ee daaweynta cuduro badan oo halis ah. Bilawga, L-DOPA waxaa loo isticmaalay cudurka Parkinson iyo da'da parkinsonian.
Kadibna waxaa loo soo jeestay in daroogada aysan wax xun ka caawinnin inuu qof ka bogsado daalkii nidaamka dareenka, taas oo ay sababeen qaar ka mid ah arrimo dibedda ka baxsan. Caadi caadi ah halkan kuma caawineyso, qofna ma qaban karo daawo wanaagsan. Isbitaalka Cusbitaalka Qalliinka ee Moscow ee No.8 wuxuu magacaabay ZP Solovyov waxaa ku yaal rugta caafimaadka ee neeriyada. Neurosis - xadgudub ku-meel-gaar ah oo gardarrada ah ee GNI, kaas oo dhacaya kaddib marka uu aad u culus yahay. Mararka qaarkood neurosku way sii dheeraadaan oo way adagtahay in la daweeyo. Tan iyo markii 80s ee qarnigii labaatanaad. Kuwa takhasuska leh ee bukaan-socodka ayaa si guul leh u adeegsaday daaweynta L-DOPA koorsada (0.5 g maalinkiiba maalmaha 10) haddii ay jirto xaalad daraasad ah nidaamka dareenka.
Sida laga soo xigtay aragtidayada, L-DOPA waxay natiijo aad u wanaagsan u leedahay daaweynta sifududsi la'aanta, sababtoo ah waxay kordhisaa dareenka unugyada hormoonnada jinsiga. Natiijo wanaagsan ayaa sidoo kale laga helay daaweynta noocyo kala duwan oo ah niyad-jabka dareenka oo sababay waxyaabo badan oo khatarta ah ee neuropsyka ah.
Tan iyo bartamihii 70s, dadka Maraykanku waxay bilaabeen inay isticmaalaan L-DOPA cayaaraha waxayna sii wadaan inay isticmaalaan ilaa hadda. Haddii aad qaadatid L-DOPA subaxdii, waxay si siman ugu habboon tahay briimmooyinka maalinlaha ah. Isla mar ahaantaana, qarsoodi-wakhti dambe ee HGH ayaa si aad ah u kordha. Waxaa xiiso leh in L-DOPA keliya oo la isticmaalay tababbar wax saameyn ah kuma yeelan nidaamka HGH.
Iyadoo la adeegsanayo acromegaly, qaadashada L-DOPA, lidkeeda, waxay yareysaa dheecaanka xad-dhaafka ah ee hoormoonka koritaanka.
Suuqa Maraykanka ee dheellitirka nafaqada cayaaraha ayaa wali ka buuxa alaabo ganacsi oo leh L-DOPA. Run, dhammaantood waxay leeyihiin magac kale. Qaar ka mid ah shirkadaha ayaa isku rogay xaqiiqda ah in ay kiniin ka sameystaan ​​L-DOPA iyadoo lagu magacaabo hormoon kiniin korodhsi ah (!) Ama "kiniin IGF-1" (kobcitaanka insulin-sida). Si aanad u dhicin jillin jaban, waa in aad had iyo jeer falanqee qaybta daroogada ee laguu soo bandhigay.
L-DOPA waa shey wanaagsan, shaki kuma jiro, laakiin waxa ay ka fog tahay qiimaha ay bixiso HGH iyo IGF-1. Qorshayaasha HGH iyo IGF-1 xitaa ma aha mid mabda 'ahaan ah, sababtoo ah kuwani waa peptide in si dhakhso ah loogu dhajiyo habka caloosha iyo mindhicirka.
Waxaa xusuus mudan in L-DOPA uu leeyahay saameyn antitumor ah. Tan iyo bartamihii 1980s, waxaa jira talooyin rasmi ah oo ka yimid Wasaaradda Caafimaadka isticmaalka L-DOPA ee ku dhaqanka qalliinka, taas oo ah, si kastaba ha noqotee, lama soconayo, maadaama ay aad u fududahay in la doorto bukaanku marka hore daaweynayo daaweynta ka dibna lagu cabsi geliyo hawlgalka soo socda.
Khasaarada daroogada ayaa ah in ay tahay wax u nugul beerka.
Worldwide, L-DOPA waxaa laga helaa kiniinnada iyo kaabayaasha 0.25 iyo 0.5 g. Shakhsi ahaan, dhakhtar caafimaad, waxaan la kulmay kaliya kiniinada 0.5 g.
Haddii ay dhacdo xaddi badan, lallabbo iyo matag waa suurto gal. Waxaa keena xad-dhaaf ah dopamin, kaas oo laga sameeyay L-DOPA ee jirka.
Dopamine wuxuu awood u leeyahay inuu furo xarun matag, oo ku yaala medulla oblongata.
Dumarku waxay ku dhow yihiin 2 marar badan xasaasiyad daroogada ka badan ragga, waxay leeyihiin natiijo badan oo lagu daweynayo, iyo xulashada qaadashada waxay ku bilaabataa qiime yar. Ragga, xulashada qiyaasta ugu fiicani waxay ku bilaabmaysaa xaabadda 1 ee 0.5, iyo dumarka leh? Kiniinada, qiyaasta 0.25 g
Qadarka ugu badan ee daawooyinka ay ku jiraan L-DOPA hadda waa la heli karaa adduunka oo dhan daaweynta cudurka Parkinson. Qaar badan oo iyaga ka mid ah, L-DOPA waxaa lagu daraa walxaha xannibay burburkooda xayawaanka. Sidaas daraadeed daroogo badan ayaa maskaxda gashaa.
Haa, iyo qiyaasta L-DOPA waa la yarayn karaa. Daawada sida NACOM, L-DOPA waxaa lagu daraa lamid ah. Labada carbidopa iyo waxyaabo la mid ah ayaa hor istaagaya qallafinta L-DOPA ee ku jira unugyada dhiigga iyo unugyada dulinka ah. Sidaas oo kale ayaa maskaxda ku socota. Xulashada qiyaasta daawooyinkaan waa in si taxadar leh loo sameeyaa, laga bilaabo? Kiniiniyada, haddii kale ha u gudbin lallabbada iyo matagidda. Tani waxay khuseysaa daaweynta iyo ciyaaraha isboortiga labadaba. Waxaan mar kale ku celinayaa in kororka HGH sii kordho iyadoo la raacayo tallaabada daroogooyinkaasi ay ka dhici doonto oo keliya ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa gaaban, oo ah mid aad u sarreeya (haddii kale waxaa dhici karta inaysan dhicin natiijada horumarinta noocaan ah ee HGH).
Daawada isboortiga, b-adrenoreceptor blockers ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Dhanka kale, waxay kordhiyaan dheecaanka HGH, iyo dhinaca kale, waxay kordhiyaan habka nidaamka dareenka parasympathetic, kaas oo ka masuul ah hababka anabolic ee jirka. Tirada b-adrenoreceptor blockers hadda ee loo isticmaalo daawada isboortiga waa mid aad u ballaaran. First of all, waa anaprilin (obzidan), whiskey (iprindolol), trazikor (oxyprenolol) iyo kuwo kale oo badan. Asal ahaan, waxaa loo isticmaalaa ciyaaraha fudud iyo ciyaaraha kuwaas oo la xiriira jaantuska adkaysiga weyn - dabaasha, dabaasha, kuleylka, iwm.
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqada ah in dukaamada b-adrenergic dardar-celinta garaaca wadnaha. B-adrenoreceptor blockers isla markiiba waxay kordhiyaan xoogga foosha murqaha wadnaha.
Endorphins waa nooc cusub oo furan oo ku saabsan neurotransmitters. Waxay soo saaraan qanjirka 'pituitary', waxay leeyihiin saameyn ah morphine-sida (narkotikada iyo xanuunada). Endorphins ayaa hadda la soo saaraa macmal. Waxay boqolaal jeer ka fiican yihiin morphine.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ay isbarbar dhigi kartaa ugu dambeyntii in aysan aheyn kuwo la qabatimay oo wax la qabatimay. Dalka Maraykanka, endorfin waxaa loo isticmaali jiray hawlaha daaweynta iyo isboortiska in ka badan sanado 20. Endorphin ugu xoogan waa b-endorphin. Waxaa markii ugu horeysay lagu soo dejiyey 1975. Waa polypeptide oo ka kooban haraaga amino acid 31.
Morphine iyo endomorphins labadaba waxay keenayaan koror weyn oo ah heerka HGH ee dhiigga. Saameyntani waxay la xiriirtaa saameynta ay ku leedahay dheecaanka somatoliberin by hypothalamus.
Intaa waxaa dheer, waxay dardar-gelinayaan sameynta DNA, si weyn u yareeya heerka dheef-shiid kiimikaad hoose, heerkulka jidhka hooseeya. Dhimista dheef-shiid kiimikaadka hoose waxay keenaysaa hoos u dhac weyn oo ku yimaada habdhaqanka iyo, oo ay weheliso saameynta somatoliberin-kicinta, waxay leedahay saameynta anabolic ee ugu xoogan iyo dhaqaalaha dhammaan substrates cuntada.
Morphine looma isticmaali karo ciyaaraha isboortiga, dabcan, laakiin b-endorphin waa u qalmaan si taxadar leh. Marka la maamulo xididada, b-endorphin waxay sababi kartaa kororka heerka HMG-da ee HGH by factor of 20-30 (!). Qalab kale maahan hadda waxtarkan. Daroogadaasi waxay leedahay mustaqbal weyn.
Waxaa suurtogal ah in la sii wanaajiyo suurtagalnimada soo-saarka jirka ee b-endorphin by jidhka laftiisa iyadoo la adeegsanayo saameyn xanuun leh oo loo yaqaan 'DBE'. DBV waxaa sababa acupuncture, sariirta badan ee cirbadaha, qaadayaasha Kuznetsov, jimicsiga jimicsiga saamaynta xanuunka, iwm. Natiijo wanaagsan waa daaweynta meelaha qaarkood ee jirka oo leh dheecaan dillaac ah. Qalabka daaweynta caadiga ah ee nidaamkaan waa nidaamka D'Arsonval. Awoodda qulqulka dabayshu waa la hagaajin karaa.
Saameynta fitamiinada iyo asiidhyada amino ee HGH
Xitaa laftiisa, hirgelinta nicotinic acid kaliya waxay hoos u dhigtaa sonkorta dhiigga waxayna kordhisaa xasaasiyadda unugyada labadaba insulin iyo hormoon somatotropic labadaba. Faytamiin PP waa fitamiin badan oo nooc walba ah. Xaqiiqdu waxay tahay in dhammaantood aan laga reebin, dareen-celinta casriga ee jirka ku socdo iyada oo loo marayo enzymes, oo ay ku jiraan nicotinic acid. Enzymes waxaa lagu magacaabaa NAD iyo NADP oo ku xiran enzymes.
NAD waa nicotinoamidine nucleotide. NADP - nicotinamide dinucleotide phosphate. Nikotinic acid, sidaas darteed, waxay qaadataa, halkaasoo toos ah, iyo meesha ka qaybqaadashada aan tooska ahayn ee dhammaan noocyada sarrifka. Daawooyinka yaryar, waxay leedahay saameyn fitamiin ah (ka hortaga pellagra), iyo qiyaaso badan (megadoses), waxay horeyba u leedahay saameyn daaweyneed oo halis ah. Saameynta jirka ee dhammaan fitamiinada iyada oo aan ka reeban waa wax aan macquul ahayn, iyada oo aan ka qayb qaadashada nicotinic acid. Saameynta jirka ee dhammaan fitamiinada iyada oo aan ka reeban waa wax aan macquul ahayn, iyada oo aan ka qayb qaadashada nicotinic acid. Iyadoo la isticmaalayo waqti dheer, nicotinic acid wuxuu hoos u dhigaa kolestaroolka dhiigga wuxuuna yareynayaa xajmiga jilicsanaanta jilicsan ee jilicsan.
Saameynta fayoobida ee nicotinic acid aad ayuu u cad yahay, gaar ahaan marka loo eego maraakiibta yaryar iyo kilyaha. Qalabkaan nicotinic acid wuxuu ka dhigayaa hab aad u qiimo badan oo ah balaarinta ballaarinta. Haddii qofku si dhakhso ah ugu sii socdo, koritaanka shabakadiisa kiniiniga ayaa dib u dhac ku ah koritaanka maskaxda. Qalitaanka muruqyada xinjirta 2 waxay saameysaa dhiigga dhiigga 16 (!) Times. Qodobka ugu muhiimsan ee socodka dhiigga ee dhiigu wuxuu noqon karaa mid xaddidan kobaca murqaha wuxuuna sababi karaa in la joojiyo dhammaan natiijooyinka isboortiga. Isticmaalka nicotinic acid kiiskan wuxuu ka caawiyaa cayaaraha ka baxsan duruufaha.
Nikotinic acid sidoo kale waa fiicantahay, maxaa yeelay waxay leedahay saameyn xooggan oo tayada jirka ah ee jirka oo dhan.
Haddii, tusaale ahaan, qofku u nugul yahay hargab, ka dibna dhowr bilood oo daweyn ah oo la qaato qiyaaso badan oo fitamiin PP ah ayaa ka dhigaya inuu difaaco saameynta banaan baxa banaanka. Nitroginic acid kicinta qanjidhada adrenal si aad u wanaagsan (qanjidhada adrenal waxay leeyihiin nicotinic "reseptors" oo lagu dhiirigeliyo kaliya nicotinic acid iyo wax kale) in cirbadda kaliya ee lagu duro qadaro badan oo ah nicotinic acid ay jebiso weerarka neefta. Iyadoo daaweyn joogto ah la leh nicotinic acid, hypertrophy ee qanjirrada adrenal iyo kororka adkaysiga. Qiyaasta fal-celinta catabolic waa sida "nicotine" hypertrophy ee qanjidhada adrenal ma badasho.
Iyada oo la isticmaali karo waqti dheer ee nicotinic acid ee jirka (labadaba habka dhexe ee dareemayaasha iyo xayndaabka), xaddiga serotonin ayaa kordha. Serotonin waa labadaba neurotransmitter iyo dhexdhexaadiyaha. Dhibaatooyinka qaarkood, waxay isu muujinaysaa dhexdhexaadiye habdhiska dareenka niyadda, iyo kuwa kale oo dhexdhexaadiye ah ee parasympathetic. Waa mid ka mid ah saldhigyada hormoonada hormoonada gudaha (gudaha gudaha). Marka qofku hurdo, heerka dhiigga ee serotoninku wuu kici karaa, tani waa sababta ugu weyn ee kororka hormoonka hormoonka koritaanka. Serotonin sidaasi waxay xoojisaa nidaamka dareenka si fiican.
Isticmaalka dheeraadka ah ee qiyaasta sare ee nicotinic acid wuxuu kor u qaadaa tamarta guud ahaaneed isla markaana waqti isku mid ah ayuu qofku ku qaboojiyaa gudaha iyo ka dheellitirka.
Macmacaanka serotonin ee CNS ayaa la kordhin karaa xitaa haddii la isku daro nicotinic acid leh pyridoxine (Vitamin B6). Pyridoxine waxaa loo qaataa afka oo kiniiniga ah ilaa xaamiin 300 maalintii.
Qiyaaso badan oo nicotinic acid ah (inkastoo aan isla markiiba ahayn) laga saaro qof ka niyad jabka ah. Qofka haysta shahaadada dhakhtarka maskaxda, waxaan awood u leeyahay inaan si toos ah u sheego: Maamulka gaabinta ee 50 ml. Nicotinic acid waa mid awood u leh inuu qof ka baxo cabitaanka khamriga, "jebinta" ka fogaanshaha. Nikotinic acid sidoo kale waxay ka caawineysaa jabitaanka heroin, laakiin kaliya marka la isku daro hababka kale ee soo-gaadhista. Hirgelinta qiyaasaha waaweyn ee nicotinic acid waxaa lagu sameeyaa xaaladaha qolka daaweynta. Bukaanku wuxuu ku yaallaa sariirta, hal gacan wuxuu ku xiran yahay nidaamka daroogada xididka nicotinic, iyo dhinaca kale wuxuu xiran yahay tonometer, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si joogta ah ula socoto cadaadiska dhiigga.
Cadaadiska dhiigga ee cadaadiska nicotinic acid waxaa lagu yareynayaa dhammaan dadka, laakiin heerar kala duwan. Qaarkood waxay si sahlan u qaadaan faleebo. Waa inay ku seexdaan sariirta oo keliya sababtoo ah nidaamka laftiisu wuxuu soconayaa muddo dheer. Dadka qaarkiis marka hore waxay u nugul yihiin cirridka, cadaadiska dhiigga ayaa aad u badanaa oo ay u leeyihiin inay u maamulaan cordiyiin si qoto dheer, ama kuwa kale ee iftiimiya iftiinka. Ma wiiqi doonaan talaabada nicotinic acid, laakiin ma ay u oggolaan doonaan cadaadiska inuu hoos u dhigo heerka caadiga ah. Cadaadiska aad u badan ee cadaadiska dhiiggu wuxuu keeni karaa suuxdin sababo la xiriira xaqiiqda ah in maskaxdu ay yarayso dhiigga, sidaas darteedna oksijiin, tamar iyo substrates.
Nidaamkan noocan oo kale ah waxaa sameyn kara dhakhtar, laakiin inta badan waxaa badanaa loo dhiibaa kalkaalis caafimaad oo takhasus leh oo ilaaliya bukaanka sida gaduudka oo ah kansar sababtoo ah saamaynta kudub dhexaad ee fitamiin PP.
Hirgelinta qiyaaso badan oo ah nicotinic acid ayaa si weyn u kordhisa kiimikada casiirta caloosha iyo hawsha enzymes dheefshiidka. Iyadoo xanuunka gastritis-ka, nabarrada iyo boogaha ee mareenka caloosha iyo mindhicirka, xanuun ku dhaca mareenka caloosha iyo mindhicirka ayaa dhici karta. Dadka badankood, boogaha ayaa qarsoon (70% kiisaska) iyo dadku waxay bilaabaan inay dareemaan xanuunka caloosha ka dib maamulka maamulka nicotinic acid. Xaqiiqdii, nicotinic acid kaliya waxay muujisaa cudurrada qarsoon ee aan hore loo dareemin. Qeybtan keligeeda waxay marwalba sheegi kartaa "mahadsanid".
Pyridoxine, oo leh isticmaalka dhexdhexaad ah, ayaa sidoo kale waxoogaa kordhin kara kiimikada cabitaanka gastric, laakiin ilaa xad aad u yaryar oo aysan ku dhicin wax dhib ah, xitaa boogaha.
In kabadan 30 sano ka hor, cilmi baarayaal Maraykan ah ayaa qeexay awooda nicotinic acid (fitamiin PP) si loo xakameeyo lipolysis la'aanta. Lipolysis-spontaneous waa burburka joogtada ah ee dufanka subcutaneous leh sii daayo asiidh dufan bilaash ah (FFA) iyo glycerol galay dhiigga. FFA iyo glycerin labadaba waxay joojiyaan hormoonka hormoonka koritaanka.
Hirgelinta nicotinic acid waxay ku dhowdahay dhamaanba lipolysis la'aanta, "nadiifiyaa" dhiigga FFA waxayna keenaysaa sii-deyn xooggan oo HGH ah. Natiijada ugu weyn waxaa lagu ogaaday soo bandhigida nicotinic acid intravenously, inkasta oo saameyntu ay la socoto maamulka galmada iyo gudaha gudaha. Kaliya 10 mg ee nicotinic acid, oo lagu maamulo xididada, waxay kordhin kartaa nuxurka hormoonka koritaanka ee dhiigga 2. Dhaqdhaqaaqa isboortiga, qiyaasaha ilaa xadka 250 waxaa loo isticmaalaa xididada. Natiijo ahaan, saameyn aan la garan karin ayaa la arkay. Haddii ay dhacdo in ay lagama maarmaan tahay in kor loo qaado korriinka dhalinyarada, nicotinic acid waxtar uma leh wax ka yar hordhaca HGH ee jirka. Saamaynta anabolic ee qiyaasta weyn ayaa laga yaabaa in ay ka badato saameynta steroids anabolic.
Khasaarada kaliya ee isticmaalka nicotinic acid waa in kiiskani uu jiro korodh dufanka subcutanous. Tani waxay sababtay xannibaadda lipolysis-kicinta. Saameyntan waxaa loo hagaajiyaa cuntada iyo "qalajinta", ka dib marka lagu daaweeyo fitamiin PP.
Saameyn aad u wanaagsan oo ku saabsan shaqada somatotropic ee jirka wuxuu leeyahay fitamiin W ama carnitine. Waxaa sidoo kale loo yaqaan vitamin kobcinta awoodda uu u leeyahay inuu kobciyo koritaanka carruurta yaryar. Carnitine waxay kordhisaa xiidmaha unugyada unugyada dhiigga. Sidaa darteed, asiidhyada dufanka si sahlan u galaan unugyada, halkaasoo ay ku jiraan oksitized iyadoo la sii daayo qadar xoog leh oo tamar ah. Carnitine, jidka,
wuxuu ku kordhiyaa qiiqa dheecaanka ah ee saliidda cad, taas oo xaaladaha caadiga ah ay adag tahay. Yaraynta asiidh dufanka ah ee dhiigga ku jira ee ficillada ah ee carnitine waxay keenaysaa dheecaan dheeraad ah ee HGH by qanjirka pituitary. Iyadoo ay weheliso "tamarta quudinta" oo ay sabab u tahay oksitidiin badan oo ka mid ah asiidh dufanka ah, waxay taasi abuureysaa shuruudaha lagama maarmaanka u ah kor u qaadista anabolismka.
Kaliya badnaanshaha carnitine waa in ay saameyn ku yeelan kartaa oo kaliya saameynta noolaha dhalinyarada ee carruurta iyo dhalinyarta, taas oo si xushmad leh uga jawaabeysa hordhaca ah ee carnitine marka loo eego jiritaanka dadka waaweyn.
Faytamiin K (foomka biyaha lagu foori karo - vikasol) ayaa awood u leh inuu u dhaqdhaqaaqo shaqada somatotropic ee qanjirka pituitary. In jirka jirka koraya, vitamin K ayaa xitaa keena dhalmo ah unugyada eosinophilic pituitary iyo sii kordhin joogto ah ee dheecaanka HGH.
Waxaan ubaahanahay in aan xasuusno in vikasol uu ku ururi karo jirka. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad qaadato habka vikasol ee maalmaha 5 ee soo raaca fasaxyada 3. Vikasol wuxuu daaweeyaa xinjir dhiig oo hooseeya, kiiskanna lagama maarmaan u ah inuu sii xumaado wareegga dhiigga. Sidaa daraadeed, vikasol aad u dhaafsiisan marnaba suurtagal maahan. Vikasol waxaa laga helaa kiniinada xmUMX mg. Qiyaasta maalinlaha ah ee daroogada waa xmUMX mg.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo fitamiin K, laakiin mid ka mid ah waa mid biyaha lagu foori karo. Waxay ahayd magaca Vicasola (Vitamin K3).
Waxyaabaha fitamiinada la mid ah ayaa u qalma dareenka Mildronate. Si taxadar leh u codso sida wakiilka dhimista kaddib marka uu culus jidhkaagu culus yahay, si kastaba ha ahaatee, waxay awood u leedahay inay hoos u dhigto heerarka FFA ee dhiigga, oo markaa, waxoogaa kor u qaadeysa dheecaanka HGH.
Saamaynta Amino Acids ee habka HGH
Guud ahaan, dhammaan asiidhyada amma crystalline, kiniiniyada, ama ku jira gudaha capsules, waxay ilaa xad u kordhin kartaa hormoonka somatotropic hormoonka dhiigga. Tani, dabiiciga, dheelitirka ugu wanaagsan ee asaasiga ah ee asaasiga ah iyo kuwa aan muhiimka ahayn labadaba waa lagama maarmaan.
Hase yeeshee, waxaa jira asiidhyo amino oo kala gooni ah oo kordhin kara heerka somatotropin ee dhiiga marar badan. Laakiin way fiicnaanayaan in tan loo isticmaalo mega qiyaasaha (qiyaasta ultra-sare). Palm wuxuu halkan ku leeyahay arginin.
Arginine waa aamiin amma bedeli karo. Iyada oo faleebo xidid ku jirto qadar ah 0.5 g per 1 kg miisaankiisu wuxuu kordhiyaa maadada somatotropin ee dhiiga ugu yaraan 2-3. Qaadashada isku midka ah ee afka laga qaato waxay u dhaqdaa wax badan oo daciif ah.
Ugu horreyntii, argininada xididada ayaa loo isticmaalay oo keliya imtixaan. Somatotropin sii deyntiisa ayaa lagu go'aamiyey nabadgelyada awoodda qashinka ee qanjirka pituitary, taas oo lagu soo gabagabeynayo in ay habboon tahay in ay HGH u dillaacdo dibedda, haddii awoodaha u gaarka ah ee pituitary si ay u soo saaraan somatotropin waa ku filan oo u baahan kaliya kicinta ku filan .
Qodobo sahlan: haddii heerka HGH ka dib marka la hirgaliyo arginineerka uu kor u kaco, markaa pituitary ma awoodo inay soo saarto qadarka saxda ah ee HGH-kiisa iyo somatotropin waa in loo soo bandhigo jirka dibadda, haddii kale natiijada la rabo waa lama helin. Haddii jidhku "bixinayo" dareen-celin xoog leh, ka dibna qanjirada pituitary wax kasta waa u socotaa. Waxay "shaqeeyaa" iyo in lagu xoojiyo, sheegto, anabolism, waxaad si buuxda u sameyn kartaa iyada oo aan lagu durin HGH qaali ah. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad sameysid qanjidhada uurjiifka (ama halkii, unugyada eosinophilic ee qanjirada qanjirada hore).
Tan iyo markii aan ka hadalnay qiimeynta awooda kaydka, ma noqon doonto mid aad u macquul ah in la ogaado in isku imtixaanno la sameeyo daawooyinka kale ee horeba loo yaqaan: Insulin iyo L-DOPA. Insuliinta waxaa loo maamulaa xididada xididada 0.1 U / kg. Caadi ahaan, xaddiga HGH ee dhiigga waa in uu kordhiyaa 2-3 marka la barbardhigo asalka asalka ah. Marka baaritaanka L-DOPA la sameeyo, daawada waxaa lagu qaataa afka oo calool madhan. Waxyaabaha HGH ee ku jira dhiigga ragga ayaa kordhay oo aan ka yareynin 3, iyo dumarka aan ka yarayn xilliyada 2 (ilaa saacadaha 20 mg / ml 3 ka dib markii maamulka daroogada). Shakhsiyaadka, hargabka HGH ee ku jira dhiigga wuxuu kordhin karaa 60 ng / ml, laakiin tani waa marar dhif ah.
Waxaa sidoo kale jira baaritaanno leh glucagon, propranolol iyo daawooyin kale. Si aad u ogaatid inta cunno karbohidraatka ah uu xakameynayo dheecaanka HGH ee qofka la siiyey, waxaa la sameeyaa baaritaanka sonkorta dhiigga. Subaxdii, 100 g glucose waxaa la siiyaa qof calool madhan, ka dibna waxaa lagu go'aamiyaa inta ay le'egtahay heerka HGH ee dhiiggu hoos u dhacay.
Hoos u dhaca ugu sarreeya ee heerkiisu waa inuu dhacaa saacadaha 2. Xaddiga HGH ee dhiiga waa in aysan hoos u dhicin 2 ng / ml. Haddii ay hoos u dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad si weyn u cusbooneysiiso cuntadaada karbohidratka ee jihada yaraynta, ama raadso
baaritaan halis ah oo ah is-bedel (iyo waa ka wanaagsan yahay labadaba). Iyadoo la adeegsanayo acromegaly, sonkorow, kelyo la'aanta, iyo qaar ka mid ah cudurrada kale ee daran ee dabadheeraad ah, kororka isbeddelka heerarka HGH ee jawaab celinta gulukooska ayaa dhacaya.
Aynu soo celino, si kastaba ha ahaatee, asaasiga amino. Ka dib markii uu bilaabay "xirfadle" oo leh baaritaano ogeysiis ah, arginine "ayaa soo galay" suuqa suuqyada nafaqada cayaaraha labadaba qaabka saafiga ah iyo qayb ka mid ah waxyaabaha dheeraadka ah. Dhibaatada keliya ayaa ah in marka afka laga qaato, arginine ay waxtar ka badan tahay maamulka xididka. Si loo hubiyo in la sii daayo HGH by qanjirada pituitary, waxaa lagama maarmaan ah in "cuno" ugu yaraan 30 g arginine saafi ah calool madhan. Wax aanan ka badalin suuqyada isboortiga isboortiga cayaaraha, kuwaas oo qaabka loo sii daayo ay u ogolaanayaan inay isticmaalaan waqti isku mid ah arginine.
Isticmaalka qadar yar ayaa ah qashinka waqti iyo lacag. Waxaa jira alaab ay tahay in loo adeegsado sidii ay tahay, ama aan la adeegsan dhammaan.
Aynu hadda xasuusno silsiladda katestolamine synthesis ka soo phenylalanine (ama ka badan tyrosine amino acid).
Ogsoonow: L-DOPA waxaa si toos ah looga dhexdhigi karaa jidhka oo ka yimaada phenylalanine, oo maraya marxaladda tyrosine. Waa L-DOPA oo hadda ah shayga ugu muhiimsan ee dareenkeena ah maadada awood u leh in la kordhiyo sii-deynta kaddib ee somatotropin.
Dabeecada jidhku si wanaagsan ayuu u habeeyey, oo leh shabakad badbaadin badan. Haddii, sabab la'aan la'aanta nafaqada jidhka, astaamaha phenylalanine muhiim maaha, waa (jirka) wuxuu bilaabaa inuu soo saaro L-DOPA laga bilaabo tayrosiin amino oo muhiim ah. Marna ma jiri doonto tiro yar oo tyrosin ah oo jirka ku jirta, waayo waxaan ognahay in aashitamida la bedeli karo laga soo saari karo glutamic ama aspartic acid.
Oggolaanshaha tiryrin saafi ah ayaa isla markiiba si weyn u kordhisa macnaha L-DOPA ee CNS. Isla mar ahaantaana, xitaa dareemayaasha shakhsiyadeed ee isticmaaluhu waxay ku salaysan yihiin heer ilaa xad ah oo leh dareemo macquul ah ee qofka qaadanaya L-DOPA. Oggolaanshaha ugu yaraan 2 g ee tyrosin (calool madhan) waxay keenaysaa dareen yar oo nasasho leh. Ku dhowaad isku mid ayaa dareensan in qofka qaadanaya L-DOPA, oo loo tixgelinayo (iyo) waa isku-xidhka nuqul ee nidaamka cillad-maskaxeed.
Nidaamka neerfaha ee bartamaha wuxuu ka kooban yahay L-DOPA, habka dareenka ah ee habdhiska dareemayaasha, wax yar ayaa laga dhimi karaa.
Teeda kale, maamulka tyrosine ma saameynayo qaabaynta HGH ama dheecaankiisa si kasta. Si kastaba ha ahaatee, xoojinta xidhiidhka kaydka ee CNS iyo kororka qadarka L-DOPA ayaa ka soocday tyrosine taasoo keentay in xaqiiqda ah in tababbarka iyo ka-daba-marinta hormoonka koritaanka hormoonka hormoonka kor u kaca.
L-DOPA waxaa laga soo saaraa tyrosin ee beerka by tallaabo ee tyrosinase enzyme. Dhibcaha 2 waa kuwo muhiim ah halkan. Qodobka ugu horeeya waa in beerku yahay, haddii aanuu fiicneyn, markaa ugu yaraan waa mid caafimaad leh, haddii kale tyrosinase way shaqaynaysaa. Dhibicda labaad waxay tahay in tyrosinase la dhaqaajiyo iyadoon bakteeriyada. Mabda 'ahaan, ma'aha arrin meesha qofku ka helo bakteerka: strawberries ama vitamin-macdanta. Si kastaba ha ahaatee, habka labaad ayaa u muuqda inaan si deg deg ah u fududahay, gaar ahaan maadama uu bakoor ka jiro horay "dhammeystiray", foomka iyadii oo la adeegsanayo.
Qaadashada tyrosin waxay si kala duwan uga duwan tahay L-DOPA markaa ma siinayso wax saameyn ah oo aan suntan lahayn. Dhibaatada uma geysan doonto ciyaaryahan kasta oo tyrosin ah oo ku jira golihiisa wasiirrada ee daaweynta xitaa iloobi fudud. Waxaan ku hareereysan diiqad. Qofna looma caymiyo welwel iyo dareen xun. Maxaad u dulqaadaneysaa haddii aad qaadan karto tyrosin yar. Dareemayaashu way fiicnaan doonaan, natiijooyinka tababarkuna way sii kordhayaan.
Xitaa haddii aan ka tirtirno saameynta tooska ah ee tyrosin ee nidaamka somatotropin, tyrosin waxaa loo isticmaali karaa si fudud oo ah wakiilka dhimista ka dib culeysyada tababarka ballaaran. Marka laga eego aragtida biorhythmology, tyrosin waxaa ugu fiican in la qaato fiidkii ama galabtii.
Dib-u-eegista mar kale habka, waxaan arki karnaa in dopamine oo keliya aan laga soo saarin L-DOPA, laakiin sidoo kale melanin, nooc gaar ah oo lafdhabar u ah oo mas'uul ka ah midabka timaha, indhaha irid, maqaarka, iwm. Haddii uu jiro wax yar L -DOPA ee jirka, melanin ayaa qayb ahaan lagu kharashgareeyay dib u soo celinta isku xirka kaydka habka dhexe ee dareenka. Sababtan awgeed, xitaa caruurta todoba jirka ah waxay noqon karaan kuwo caan ah ka dib marka walwal xoog leh. Badanaa, timo qaylinaya da'da ayaa la xiriirta yaraanta da'da L-DOPA. Mid ka mid ah tijaabiyayaashu waxay caddeeyeen in timaha cagaarka si fudud loo daaweyn karo iyagoo qaadanaya qiyaaso badan oo tirokiin ah.
Si kastaba ha noqotee, qaylinaya "Hurray!" Arrintan ayaa weli ah xilli hore. Qiyaasaha tyrosine ma ahan mid aad u weyn, laakiin ciriiri, 1 g per 1 kg miisaanka jirka. Tani waxay mar kale caddaynaysaa maqnaanshaha qulqulka tyrosine.
Qodobku waa, guud ahaan, ma timo madow. Timuhu way ka raqiisan yihiin waxayna u sahlan tahay in lagu rinjirto marka loo eego tyrosin halkii caadiga ahayd ee cuntada. Timaha Gambarka waa tilmaame aan toos ahayn ee da'da nidaamka dareenka iyo calaamadda tooska ah ee ka mid ah daciifinta nidaamka somatotropin. Sidaa daraadeed, xitaa tiro yar, tyrosin waxay faa'iido u noqon doontaa habka dib u habeynta da'da habka dhexe ee dareenka.
Oo haddaba, aan xasuusto in bilowga silsiladda oo dhan waa phenylalanine - amino acid muhiim ah. Qaadashada phenylalanine sidoo kale waxay hawlgalisaa silsilada oo dhan ee synthesis kallecolamin. Ka dib, L-DOPA waxaa si toos ah looga soo saari karaa phenylalanine. Dhibaatooyin badan ayaa muujiyay in ay jiraan kala duwanaansho.
haddii catecholamines si toos ah looga soo saaro phenylalanine ama marxaladda qaab-dhismeedka tyrosine.
Biyoolojiinka, tani badanaaba waxay dhacdaa: silsilada bayoolajiga ah waxay soo saari kartaa natiijo kale oo ka duwan iyadoo ay ku xiran tahay heerka marxaladda nafta lafteeda la bilaabay. Ugu horreyn, qaadashada fenylalanine ma keento dabcis iyo saameyn ku dejinta nidaamka dhexe ee neerfayaasha. Taa badelkeeda, qaadashada dhowr garaam oo amino acid ah waxay ka caawisaa inay dareemaan kororka tamarta, waxay yaraynaysaa guud ahaan lakulanka, dulqaadka iyo apathy. Marka labaad, inkasta oo uu phenylalanine kordhiyo waxyaabaha ku jira qaybta kaydka L-DOPA, L-DOPA ma keenayso kororka xajmiga.
Sida tyrosin, phenylalanine oo ka baxsan tababbarka nidaamka somatotropin ma dhaqmaan si kasta.
Si kastaba ha noqotee, xilliga tababarka firfircoon, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku guuleysato koror weyn oo ah somatotropin, labadaba inta lagu jiro tababbarka iyo xilliga tababarka.
Suuqa suuqa nafaqada, amino acid ornithine waxaa si firfircoon loogu dhiirigeliyaa sidii loo kicin lahaa sii deynta somatotropin dhiiga. Si kastaba ha ahaatee, xogta cilmiga ah ee xaqiijin doonta saxda ah ee talooyinkan aan weli la heli karin. Waxaadna xayeysiin kartaa wax kasta.
Mawduucyada kiciyeyaasha amino acid ee waxbarashada iyo quudinta HGH, waxaan qabaa, waa mid ka mid ah meelaha ugu mudan ee daawada farasaha. Ka dib dhammaantiis, HGH waa peptide oo ka kooban amino acids iyo sababta ay u kordhinayso qaab-dhismeedkeeda haddii aanay ahayn amino acids. Aminic acid waxay si fiicaan uga jawaabtaa isbeddelada kala duwan, waxaana qabaa inay weli jiraan waxyaabo badan oo la yaab leh oo naga horreeya.
Kicinta jirka nafsadda ee hormoonka HGH
Jimicsigu waa shaki ku jiro kiciyaha ugu xooggan ee dheecaanka HGH. Iyada oo hoos imaneysa saameynta tababarka xoogan, qadar kordhinta HGH ee inta lagu jiro maalinta ayaa noqota mid aad u badan oo xoojiyay qiyaasta ilbiriqsiga. Marka la dhiso qorshe tababar, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo isdhexgalka HGH oo leh hormoono kale inta lagu jiro tababarka. Heerka sare ee tababarka, ayaa sii weyn sii deynta HGH. Awoodda ciriiriga ah waxay kordhin kartaa inta lagu jiro nuska hore ee nuska koorsada, ka dibna wax yar baa yareysa. Isla mar ahaantaana, sii deynta hormoonada jinsiga iyo hoormoonka tayroodhka ayaa sii kordha, taasoo kor u qaadeysa saameynta HGH ee unugyada.
Sii deynta dhiigga ee catecholamines, gaar ahaan norepinephrine iyo adrenaline. Tani waa wejigii ugu horeeyay ee tababarka culeyska, ee loogu talagalay in la abaabulo khayraadka tamarta ee jirka. Waxaa mar horeba la sheegay in HGH uu yahay mid la qabsasho, hormoon "stress" hormoon ah. Niyad jabka insulin ayaa yaraaday, tani waxay leedahay sharaxaad gaar ah. HGH, hormoonnada jinsiga iyo catecholamines waa waxyaabo ka hortag u ah insulin la'aanta iyo saameynta unugyada, haddii kale insulin ayaa ka dhigaysa abaabulidda tamarta tamarta ee HGH iyada oo la socota catecholamines iyo hormoonada thyroid-ka inta ugu horreysa ay jajabiso glycogen beerka, taas oo jabisa gulukooska iyo isticmaalo murqaha.
Murqaha, si qiyaasan, ma isticmaali karo gulukooska dhiigga. Glucose ka soo baxa dhiigga, waxay marka hore u leexiyaan glycogen, ka dibna la geeyo. Marka glycogen dukaamada beerka ka baxdo HGH, kallecolamiinada iyo hoormoonka tayroodh ayaa "ku soo rogaa" unugyada adipose. Marka hore, subcutaneous, ka dibna gudaha. Dufanka asalkoodu dhiiggu ku dhaco, laakiin si fiican looma isticmaalo. Tani waxay u baahan tahay glucose, mana jirto wax lacag ah oo ah gulukoos. Glycoge muruqa (sababo aan jirin midna ma garanayo tan) ma noqon karto glucose kaddibna kiiskani "ma samayn karo wax" si loo isticmaalo asiidh dufan ah.
Ka dib saacadaha 20 ee tababarka (kuwa bilawga ah), plasma albumin ee beerka ayaa u beddelaya glucose, iyo tan cusub ee sonkorta leh waxay ka caawisaa in ay si dhakhso ah u isticmaasho asiidh dufan. Ciyaartoyda si aad u sareysa loo tababaray ayaa waxaa loo adeegsadaa baahiyo tamar la'aan ah ka dib 20, laakiin ka dib daqiiqado 10 ee tababarka. Ciyaartoyda tartanka aqoon-is-weydaarsiga ee "gluconeogenesis", sida "Neoplasms of glucose ee beerka ayaa aad u horumarsan.
Waxay ku dhow yihiin daqiiqadaha ugu horreeya ee gulukooska tababarka ee beerka waxaa laga sameeyaa asiidh dufan iyo glycerin. Taasina waa sonkorta dufanka asaasiga ah waxay ka caawisaa muruqyada inay isticmaasho asiidh dufan ah iyo glycerin, kuwaas oo gebi ahaanba loo qoondeeyay si loogu sameeyo tamar lagu kaydiyo qaabka ATP. Saacadda saacadaha saacadaha 0.5
HGH ee dhiigga wuxuu bilaabaa inuu si waxtar leh u yareeyo. Isla mar ahaantaana, heerka hoormoonka tayroodhka iyo catecholamiin ayaa hoos u dhacda. Si kastaba ha ahaatee, heerka hormoonka glucocorticoid, oo joojiya saameynta HGH, thyroxin iyo hormoonnada galmada, ayaa kordhaya. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in adrenaline ay kicin karto qaababka serotonergic ee jidhka (unugyada dareeraha ee soo saara serotonin ee xayawaanka), serotonin wuxuu bilaabaa inuu kiciyo xajka adrenal iyo qadar badan oo hormoonnada glucocorticoid ah ayaa loo sii daayaa dhiigga.
Glucocorticoids waxay sii xoojisaa gluconeogenesis beerka. Neefsashada insulin-ta ayaa la joojiyaa. Wejiga labaad ee fekerka tababarka ayaa soo baxaya, taas oo lagu gartaa koror weyn oo ku saabsan hab-nololeedka. Kordhinta Tani waxay ku saleysan tahay xaqiiqda ah in hormoonnada glucocorticoid ay ku qaataan badi ahaan baahida gluconeogenesis, amino acid oo ay ka qaataan murqaha. Tani waxay keenaysaa horumarinta hababka isku-dhafka ee unugyada muruqyada.
Ka dib saacadda 1 ka dib bilowga tababarka, waxaa jira horeba ujirta weyn ee geeddi-socodka hab-raaca ah ee geeddi-socodka anabolic. Sidee loo xalliyaa dhibaatada? Sidee looga hortagi karaa murqaha murqaha? Gabagabadu waxay soo jeedinaysaa isbeddelka: tababarku waa inuu noqdaa mid gaaban oo ku filan oo ku filan tamar la'aanta unugyada muruqyada iyo qaabka sonkorta ee ka timaada dufanka cadcad iyo glycerol.
Haddii tababarku sii socdo mudnaan, waxa laga helayaa baahida tamarta ee jidhka ka dibna markaa cagajuglaha murqaha waa lama huraan.
Dadka jaahilka ah ee aan xitaa ogayn aasaaska dhaqtarka caadiga ah ee joornaalada caanka ah waxay qorayaan in ay lagama maarmaan tahay in la "bam" musqulo kasta oo saacado ah si uu u keeno muruqgelinta murqaha. Xitaa murugada murqaha badan, sida badan, sida ay sheeganayaan, murqaha muruqyada ayaa sii kordha inta lagu jiro xilliga nasashada.
Cilmi-baaris dheeraad ah ama aan ka yareynin bulshada cilmiga ah ayaa kuu sheegi doona in muruqyada muruqyada muruq-maalka ahi ay kicinayaan oo kaliya jawaab-celinta tamarta iyo wax kale oo badan. Haddii muruqa uu shaqeynayo waqti dheer, markaa buug-yaraha unugyada muruqyada ayaa kobcaya. Dareemida murqaha ayaa ka baxsan su'aasha. Taas bedelkeeda, muruqa wuxuu bilaabmaa inuu "qalajiyo."
Marka la eego iftiinka kor ku xusan, waxa uu noqonayaa mid caddaynaya sababta ay hadda u socoto isbedelka caalamku uu yahay in la gaabiyo tababarka iyadoo la kordhinayo kordhay xooggooda. Si loo helo qiyaasta wadarta guud ee tababarka, tababarka gaaban waxaa badanaa la sameeyaa: 2-3 jeer maalintii, marmarna marar badan. Hadda cayaartoyda tababaraya 3 maalin kasta 20 daqiiqado qofna ma yaabin.
Xoojinta tababarku wuxuu bilaabmaa inuu qaato foomam aan horay loo arag. Ciyaartoyda qaarkood waxay sameeyaan howlo gaaban oo gaaban oo aan lahayn nasasho inta u dhaxeysa. Sidee loo sameeyaa? Waxaan ku siin doonaa tusaale fudud. Ciyaartu waxay timaaddaa qolka jimicsiga, waxayna bilaabmeysaa inay sameyso seddexdaab: Dhar, jarjar bakhti ah, saxaafada kursiga. Qaabkan oo kale ayaa loo sameeyaa sida soo socota. Habka diirran ee xagasha, ka dibna isla markiiba aan la jebin (!) Habka diirinta ee suunka iyo isla markiiba aan nasasho, habka diirran ee saxda ah kursiga keydka. Ka dibna wax waliba mar kale ayuu soo celiyaa. Xeeladaha isdabajoogga ah ayaa la beddelayaa, kuwa ugu weyn ayaana bilaabanaya. Habka ugu muhiimsan ee lugaha, ka dibna aan lahayn nasasho, habka ugu muhiimsan ee dilaaca, ka dibna aan lahayn nasasho, habka ugu muhiimsan ee saxaafadda kursiga. Sidaas oo kale tababarka oo dhan.
Marka la eego xoojinta, tababarka noocaas ah ayaa la socda geedi socodka. Dufanka ayaa ku duuban dooxooyinka 3. Kadib marxaladda kasta ee kursiga keydka, waa inaad kursiga keydka ku tirtirtaa shukumaan gaar ah. Ma fududa in laysku geeyo sida xooggan oo sarreeya, laakiin qofku ma sameyn karo isaga la'aantiis. Marka hore, saacadaha ugu horeeya ee 0.5 ee tababarka, sii-daynta HGH ee dhiigga (oo ah xaddiga dhererka) ayaa si toos ah u dhiganta xoojinta. Xoogga sare ee xoogga leh, waa ka weyn yahay iska-caabinta. Iyo, marka labaad, iyada oo aan lahayn xoojin sare, waa suurtagal in la dhamaystiro tirada leyliyada loo baahan yahay (wajiyada, celin) ee daqiiqadaha 20-30.
Marka bartamaha-60s ee qarnigii labaatanaad. wuxuu abuuray fikradda asaasiga ah ee koritaanka muruqa, waxaay noqotey in koritaanka muruqa uu si toos ah u saameynayo ku tiirsanaanta xaddiga shaqada lagu qabtay muddada tababarka. Waqtiga tababarka kuma koobna. 70s, kormeer dheeraad ah ayaa u muuqday - waqtiga tababarka. Haatan, kobaca murqaha ayaa si toos ah saamiga ugu yeeshay qadarka shaqada muruqa oo aad u sareysa, isla markaasna wuxuu u dhigmaa qaybta waqtiga ee shaqada la qabtay.
Iyada oo la siman yahay isku dheelitirka shaqada muruqa, korriinka murqaha ee ugu sarreeya wuxuu ahaa xaddiga lacageed ee shaqadan lagu sameeyay waqtiga ugu yar.
Marka xirfadaha xoogga badani ay bilaabeen inay soo galaan foori, mawjado ah indulgence ee kiciyeyaasha bilaabay, xaq u leeyihiin kiciya-kiciya nooca amphetamine. Iyadoo aan kicin, koorasyo ​​xoogan oo xooggan ayaa u muuqday mid aan macquul ahayn.
Si aan u dhicin nidaamka dareenka, kiciyeyaasha ayaa la isku daray qaar ka mid ah steroids kuwaas oo leh xiiso weyn oo ku saabsan unugyada dareenka marka loo eego kuwa kale. Payback ma ahayn muddo dheer soo socda. Weerarada wadnaha iyo qaladka wadnaha ayaa bilaabmay. Yaa waqti u lahaa inuu bedelo qalabka wadnaha, wuxuu ahaa noolyahii, aan samayn
maamusho, taasi ma aha. Dadku waxay noqdeen kuwo taxadar badan. Bedelkii kiciyeyaasha, waxay bilaabeen inay isticmaalaan wakiilada yaraynta, dhaqaaleeyayaasha, iyo tamarjirayaasha, nootropes.
Waxay u oggolaanayaan in ay sameeyaan tiro aad u badan oo shaqo waqti gaaban oo leh walaac yar oo muruqa wadnaha ah. Wadnaha wuxuu bilaabay inuu si gaar ah u tababaro - isla markiiba wuxuu bixiyay natiijada. Ciyaartooyda ayaa gaaray heer cusub oo aan horay loo arag. Burburkii orodka wuxuu helay faa'iido aan horay loo arag oo ka mid ah "siloviki" iyo jir-dhiseyaal.
2. Hurdada ayaa ah arrin muhiim u ah qarsoodiga saxda ah ee HGH. Hannaanka horumarinta, habka tamarta tamarta iyo tamarta jirka ee waqtiga hurdada ayaa si cad loo soo saaray. Isla marka uu qofku hurdo, heerka HGH ee dhiiga si dhakhso ah ayuu u kacaa, gaar ahaan inta lagu jiro saacadaha 2 ee ugu horreeya ee hurdada. Mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee HGH waa baruurta. Inta lagu jiro hurdada, qofku wax ma cuno, jidhkana waxaa ku jira dariiq cunto ah - dufan. Haddii inta lagu jiro xilliga sugitaanka jidhku cuno karbohidraatka iyo amino acids, ka dibna inta lagu jiro hurdada waa inta badan asiidh dufan ah.
Xakameynta nudaha adipose ee subcutaneous iyo sii deynta FFA iyo triglycerides ee dhiigga waxaa bixiya somatotropin. Dabiici ahaan, qiyaas ahaan wuxuu hoos u dhigaa hababka anabolic ee jirka kor u kaca. Nidaamka Habraacista inta lagu jiro hurdada oo kordhay oo kaliya marka la eego nudaha unugyada.
Xilliga hurdo la'aanta ugu yar, dheecaanka somatotropin ayaa si dhakhso ah u liita.
Iyadoo hurdo la hagaajiyay, liddi ku ah, ayaa la soo celiyay. Soo jeedinta in la seexdo ugu yaraan 2 jeer maalintii ayaa leh fikrad nafsadeed oo culus. Hurdada jajabku waxay keentaa korodh ku yimaada dheecaanka HGH. Haddii qofku habeenkii hurdo iyo ugu yaraan saacadaha 1-2 maalintiiba, marka wadarta guud ee hurdada maalinlaha ahi isma bedelayso, si kastaba ha ahaatee, HGH-ka wuxuu hagaajiyaa si cad. Xitaa saameyn wanaagsan ayaa la arkaa haddii qofku hurdo 3 mar maalintii.
Hurdada ugu weyn waa habeenkii, iyo inta lagu jiro maalinta 2 hurdo saacadda 1. Wadarta hurdada maalinta oo idil wakhti isku mid ah isma bedelin. Iyadoo ay joogaan 2 fasaxyada habeenkii, waqtiga hurdo la'aanta habeenku si weyn ayuu u yar yahay.
Xulashada ugu fiican waa isku-dar ah 3-lugo gaaban oo gaaban oo leh 3-hurdada maalin kasta. Caruurta yaryar waxay hurdaan 3-5 mararka qaarkood marar badan. Sababo badan awgood, heerka somatotropin heerkoodu aad ayuu u sarreeyaa, iyo anabolism ayaa si weyn uga adkaata dulmiga.
Hurdada habeenku waxay kuu oggolaaneysaa inaad kordhiso sii deynta HGH. Tani waxay sidoo kale kordhisaa sii deynta dhiigga hormoonada jinsiga oo leh saameyn anabolic ah, hoos u dhigista sii deynta glucocorticoids, oo muujinaysa saameynta quraanku. Guud ahaan, asal ahaan waxtar badan ayaa loo abuuray falcelinta fal-joojinta somatotropin. Da'da, muddada hurdada ayaa si weyn hoos loo dhigayaa oo qoto dheerna way yareysaa. Marka la barbar dhigo sidan, somatotropin saliideedka ayaa sidoo kale la dhimay. Ma inaan sheegaa sida xun u saameynayo qalabka wadajirka ah, iyo sidoo kale heerka guud ee caafimaadka guud ahaan.
Dhaqdhaqaaqa isboortiga waxaa si weyn loo isticmaalaa habka "koronto." "Electro" waa qalab udubdhexaadin ah oo laysku geeyo si joogto ah. Mid ka mid ah electrode waxaa lagu dhajiyaa dhinaca dambe ee madaxa, midka kalena indhaha xiran. Markaad soo jeesato qalabka iyo xulashada saxda ah ee dabeecadaha, bukaanku wuxuu hurudaa hurdo iyo hurdo ilaa inta qalabku uusan furneyn. Nidaamkan, hadda adoo dareemaya dareemayaasha indhaha waxay toos u galaan hypothalamus, ilaa bartamaha hurdada, ka dib marka qofka uu hurdo. Isticmaalidda korontada waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta daalidda, laakiin waxa kale oo ay u adeegsan kartaa hab kale oo wanaagsan oo la seexan karo habeenkii haddii hurdo xumo inta lagu jiro maalintii ay adag tahay sababaha qaarkood.
Iyadoo caawimaadda qalabka korontada ku shaqeynaya, xitaa electroarcosis ayaa la kicin karaa - riyo ah sida qoto dheer oo u oggolaanaya faragelinta qalliinka.
Qalabka elektroonikada hurda iyo elektronarkoza si aan caadi aheyn ayaa loo adeegsadaa daaweynta iyo ciyaaraha isboortiga. Waxay awoodaan in ay badalaan daroogo badan, waana ay ku adkaan doontaa in lagu tiriyo sida doping.
Iyadoo gargaarka qalabka elektaroonigga ah, waxaa suurtogal ah in si toos ah loogu daro mukhaadaraadka maskaxda, oo leh hypnotic, sedion, dib u soo ceshado ama waxyeelo antihypoxic ah. Tani waxaa si fudud loo sameeyaa: Suufka qoyan waxaa lagu qallajiyaa xalka daawada lagama maarmaanka ah iyo in lagu daboolo indhaha. Marka xaddiga hadda la bedelo, walaxda daawada waxay ku gashaa qaybtaas ee bartamaha (hypothalamus halka hurdada loo sameeyay) iyada oo loo marayo xirmooyinka dareemayaasha neurovaskus, ie xarunta hurdada.
Habkan loo isticmaalo maandooriyuhu wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo ka yimaada maamulka gudaha ama duritaanka: 1. Maadooyinka dawooyinka maaha inay xanuujiyaan mareenka caloosha iyo mindhicirka oo aan ku dhex gelin beerka; 2. Maadooyinka dawooyinka ma galaan dhiigga guud ee caadiga ah loomana ogaan karo iyadoo la isticmaalayo tijaabooyin caadi ah. Tani waxay noqon kartaa mid muhiim u ah kiisaska daroogada loo calaamadiyey sida doping iyo in lagu ogaado
jirka aan loo baahnayn; 3. Daroogooyinka si xushmad leh u urursan unugyada maskaxda; 4. Isticmaalka daawada waxaa hoos loo dhigaa tobanaan, iyo xataa boqolaal jeer.
Haddii inta lagu jiro soodheynta gudaha aan ka badnayn 2% inta daroogada ee lagu qaato maskaxda, ka dibna inta lagu jiro electrophoresis xaddiga daroogada ee dhex gasha unugyada maskaxdu waa amar aad u badan; 5. Tayada ficilka daroogada ma ahan mid hore u soo noqnoqda beerka ayaa ka fiicnaan karta ka dib markii la duro, iyo xitaa ka badan sidaas darteed soo dhaweynta gudaha.
Si loo fuliyo hanaanka korontada hawada, dariiqooyinka hoos u dhacaya ee 1-150 Hz, mudada 0.4-0.2 ms, qalabka ilaa 50 V iyo qiyaasta xNUMX-4 mA ayaa loo isticmaalaa. Qalabka jirdhiska, qalab gaar ah ayaa loo isticmaalaa: "Electrosloon-8", "Electrosloon-1", "Electrosloon-2", "Electrosloon-TH". Electronarcon iyo Lenar ayaa loo isticmaalaa koronto-dhaliyaha. Qalabka elektroonik wuxuu ka duwanyahay qalabka korontada ku shaqeeya ee ay isticmaalaan xawaaraha sare ee hadda. Wadamada qaarkood (USA), qalabka korontada oo aan loo isticmaalin dhammaantood sababtoo ah waxtarkooda hooseeya.
Codso aaladaha elektroshoz. Haddii inta lagu jiro habka loo yaqaan electrocin-yada yaryar ama, sida ugu fiican, hurdada caadiga ah ee koritaanka, kaddibna inta lagu jiro habka wareegga elektarooniga, bukaanku si degdeg ah ayuu u dhacaa hurdo qoto dheer.
Wadankeena, Russia, qalabka elektarooniga-ChT waa kan ugu caansan, kaas oo noo ogolaanaya in aan fulino hababka electrocounder si isku mid ah loogu talagalay bukaannada 4.
Iyada oo gacan ka heleysa qalabkan, wakhti gaaban, kooxda cayaaraha oo dhan way qaadan karaan habka electrosine.
Mararka qaarkood, si loo soo jiito hurdo maalmeedka, waxaa la isticmaalaa qalabka maqaarka ama iftiinka. Kaliya waa in la sameeyaa si taxadar leh, si aan u keenin maandoriyaha.
Halkaan, boogoosiyeyaasha benzodiazepine ayaa ah kuwa ugu haboon, kuwaas oo aan lahayn wax sun ah. First of dhan, waa nitrazepam (Jarmalka u dhigma - Radeorm).
Daroogadaasi way fiicantahay sababtoo ah ma keeneyso waxyeelo ka timaadda qaabka hurdada, ma bedesho saamiga qadarkeeda dhaqsaha ah iyo kuwa gaaban. Sibazon waxaa la gelin karaa booska labaad ee heerka hoos u dhaca tayada macaamiisha (Jarmalka u dhigma waa Seduxen, u dhiganta Polish oo ah Relanium). Kadib waxaad ku ridi kartaa benzodiazepine.
noocyada kala duwan sida alprazalam, phenazepam, nozepam (analogga Polishka waa tazepam), lorazepam, bromazepam, gidazepam, clobazam, iwm.
Qaadashadu waa in lagu soo xushaa si taxadar leh, awood ahaan. Haddii ficilka? Kiniiniyada, tusaale ahaan, waa ku filan, markaa waa inaadan kiniinka oo dhan marin.
Daawada "antihypoxant" sodium oxybutyrate "ee qiyaaso yaryar ilaa 2 g, waxay leedahay saamayn deg deg ah, iyo guud ahaan (4 g) saameynaha hypnotic. Sodium oxybutyrate waa wakiil yar oo wanaagsanaa, ugu muhiimsanna, waxay si weyn u kordhineysaa content HMG-ga ah.
Xeryaha acid amino "Phenibut" ayaa la soo saaray iyadoo lagu dhajinayo xagal asal ah oo u dhiganta L-aminobutyric acid. Phenibut sida ku xusan falanqaynta waxa loola jeedaa "Nootropics", macnaheedu waa in la hagaajiyo fikirka. Laakiin qiyaasaha 2 ee 4 g, waxay leedahay saameyn muddo gaaban hypnotic ah. Phenibut wuu fiicnaanayaa maxaa yeelay waxay kordhineysaa maaddada dopamine ee CNS, sidaa darteed kor u qaada tababbarka iyo kordhinta tababarka ka dib heerka somatotropin ee plasma dhiigga.
Dhammaan daroogooyinka kor ku xusan waxaa si toos ah loogu masaafurin karaa maskaxda, ma aha oo keliya qalabka qalabka korontada ku shaqeeya, laakiin sidoo kale leh qalabka qalabka korontada caadiga ah. Nidaamka kiiskan waxaa loo yaqaan "electrophoresis transcerebris". Qalabka elektroorka caadiga ah waxaa lagu geliyaa jirka sheyga daawada iyadoo la isticmaalayo tamar caadi ah. Xilligan tooska ah waxaa lagu helaa iyadoo la hagaajinayo tamarta caadiga ah ee hadda ka jirta nidaamkayaga korantada. Waxaa jira laba hab oo muhiim ah oo loo yaqaan 'electrophoresis transcerebral: transorent and intranasal. Markaad ka shaqeyneyso farsamooyinka loo yaqaan 'transforital technique', hal alwaax oo lagu dhajiyo electrode ayaa lagu meeleeyaa agagaaraha iyo kan kale ee ku yaala gobolka yar yar, iyada oo qabatey jeexnaanta ilmo-galeenka ilmagaleenka sare.
Markaad ka shaqeyneyso farsamada dhamaadka ah, hal electrode farta lagu geliyay ayaa lagu geliyaa dulalka bukaanka, midkalena waxaa lagu dabaqayaa dhabarka madaxiisa, sida haddii ay dhacdo sheyga electrophoresis. Haddii lagu jiro maadada 'electrophoresis', maaddada daawada waxaa lagu soo gelayaa maskaxda iyada oo loo marayo xirmooyinka neerfaha ee orbital, iyo inta lagu jiro galmada iyada oo loo marayo xidhmo xirmooyinka neurovascular ee sanka.
Farsamada ugu ballaadhan ee isdhexgalka. Ilaa hadda, qaababka gaarka loo leeyahay ayaa loo sameeyay hirgelinta sodium oxybutyrate iyo dhammaan bini'aadamka benzodiazepine iyada oo loo marayo qulqulka (laga soo bilaabo). Inkasta oo hirgelinta fitamiin B1 iyo glutamic acid ay sameeyaan oo kaliya farsamada casriga ah.
Nidaamka waxaa la sameeyaa iyada oo la isticmaalayo qalabka caadiga ah ee qalabka korontada. Xilliga hadda la adeegsanayo waxaa lagu xisaabiyaa mA. Cufnaanta hadda ee caadiga ah ee daawada korantada ee caadiga ah sida caadiga ah waxay ka koobantahay 0.01-0.1 nA / m2.
Muddada nidaamyadu waxay kala duwan yihiin 10 illaa 40. U adeega ilaha qalabyada gidaarka ee hadda taagan: AGN-1, AGN-2, AGN-32, AGP-33, AGVK-1. Qalabkaas, xoogga ah ee caanaha sanbabada ayaa hoos u dhigi doona 60 V, ka dib markaa hadda la saxo oo la dhajiyo. Waqtigan xaadirka ah waxaa xakamaynaya miliammeter.
Cayaartoyda si firfircoon ula shaqeynaya shaqo-qabasho mararka qaarkood ma laha fursad ayan seexan karin inta lagu jiro maalinta, laakiin xitaa u fadhiiso nasasho.
Xaaladdan oo kale, waxaa jira hal waddo oo keliya: in wax laga beddelo hurdo habeenkii ah si loo kobciyo saamaynteeda dib u soo celinta, anabolic iyo anti-catabolic. Waxaa jira hab lagu saameyn karo oo la yiraahdo "sleepy physiological extended". Waxay ku salaysan tahay qaadashada kiniinka hurda dhowr saacadood ka hor wakhtiga jiifka. Hurdada habeenkii, sidaas darteed, waxaa la kordhiyaa saacadaha 2-3. Qodobbooyin badan, iyo gaar ahaan, deriska barbaruuriga ah, waxay leeyihiin awood ay ku kordhiyaan dheecaanka hoormoonka koritaanka habeenkii.
Calaamadaha ugu badan ee daawada loo yaqaan 'hypnotic drugs' - Phenobarbital. Markii hore, waxaa si weyn looga yaqaan magaca "Luminal". Marka lagu daro, derajooyinka barbiturate-ka waxaa sidoo kale loo isticmaalaa, sida, tusaale, Cyclobarbital, iwm. Waxaa jira muuqaalo muujinaya kiniiniga hurdada ee kooxaha kale. Barbiturates, gaar ahaan, waxay yareyneysaa waxqabadka kortenska adrenal iyo sii daayo hormoonnada hablaha - glucocorticoids. Marka la eego, waxaa loo tixgelin karaa daroogo leh saameyn liddi ku dhisan, inkastoo kiiskani yahay kan ugu weyn.
Hoormoonada kortenska adrenal waa xiriirka khilaafka ah ee hormoonnada jinsiga - androgens. Isticmaalka barbiturates waxay keenaysaa in la kordhiyo istiraatiijiyada of andensens by qanjidhada galmada. Mararka qaarkood saameyntu waxay gaadhi kartaa illaa xad dadka isticmaala baakteeriyada mudo dheer oo loogu talagalay qaar ka mid ah cudurrada joogtada ah (suuxdinta) waxay u baxaan timaha jirka sida daanyeer.
Hase yeeshee waxa ugu muhiimsan waa in la yareeyo naqshadeynta iyo sii deynta glucocorticoids ee dhiigga, barbiturates "jeermiska" dheecaanka HGH by pituitary iyo baabi'iya blockka HGH soo dhaweynaya unugyada peripheral (xaalada this, beerka, halkaas oo somatomedin soo saaray).
Haddii aan isticmaalno barbiturates si aan u dheereyno hurdada habeenkii, waa in si taxadar leh loo qaado. Barbiturates waxay awood u leeyihiin in ay ku ururaan (ku sumoobaan) jirka. Sidaa darteed, waxaa loo isticmaali karaa wax ka badan 10 maalmo isku xigta iyo qiyaasta ugu yar. Walalaha Benzodiazepine waa kuwa sunta ah, ama ma aha wax sun ah. In kastoo ay yihiin kuwa loo yaqaanno "tranquilers". Saameyntooda ku-meel-gaadhka ahi mararka qaarkood (waxay kuxirantahay qiyaasta) inta badan waxay keenaysaa hurdo. Way ku haboon yihiin isticmaalka kiniinka hurda. Sodium oxybutyrate iyo phenibut ayaa weli ka doorbidaya inay yeeshaan saameyn xoog leh oo waxoogaa yar oo anabolic ah. Phenibut wuxuu si aad ah u wanaajiyaa suurtogalnimada dopamine ee CNS, iyo dopamine, sida aynu horayba u ogaanay, waa kiciyaha wanaagsan ee hindhisada HGH.
Bartamihii qarnigii labaatanaad. Daaweynta cudurada maskaxda, maskaxda iyo jimicsiga leh hurdo dheer ayaa si ballaaran loogu dhaqmaa aduunka oo dhan. Bukaanka ayaa la seexday 10 maalmo isku xiga, iyagoo toos u kicinaya cunto, isticmaalka musqusha iyo qaadashada kiniin cusub oo hurda. Waxay qabatay daaweyn noocaan oo kale ah xaaladaha joogtada ah. Ilaa hadda, dalkeenna, xarumaha qaarkood, hurdo 5-waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo habka neerfaha.
Waxaa xusid mudan in hurdo dheera ay muujinayso saamaynta ugu weyn ee boogaha gastric iyo boogaha duodenal, iyo xaqiiqda ah daaweynta ugu xooggan ee boogta faafa waa somatotropin.
Daawada isboortiga ee dhabta ah, hurdo dheer ayaa suurtagal ah in la dalbado, laakiin waxaan inta badan ku khasbanaaday inay ku dhaqmaan maalmaha 2 ee hurdada si loo daaweeyo isdhaafsiga iyo in laga guulaysto "duruufaha" ee koritaanka ciyaaraha fudud. Riyada noocan oo kale ah ayaa la qabtaa dhamaadka usbuuca. Fiidkii, cayaartu waxay sariirta u seexisaa sida caadiga ah. Aroortii ka dib markaad kacsanayso wuxuu qaadanayaa kaniiniga hurdada, wuxuu quraac yahay oo wuxuu hurudaa hurdo ilaa fiidkii. Fiidkii wuu toosaa, qaadataa kiniiniga hurdada, dambiyada oo mar kale sariirta maraya ilaa subaxda. Haddii qofku seexdo habeenkii jimcaha, wuxuu seexanayaa Sabtida iyo Axadda (oo leh jimicsi lagu cuno iyo kiniin cusub oo kiniiniga hurdiga ah) oo soo kiciya subaxnimadii Isniinta, markaa saacada hurdadaas oo kale waa wadarta maalmaha 2.5.
Riyadan oo kale, dhammaan diyaargarasyada kor ku xusan waxay ku habboon yihiin, waxayna xitaa ka wanaagsan tahay inay ku beddelaan si looga fogaado isu-ururinta iyo takoorka. Waxyaabaha ay ka midka yihiin Benzodiazepine ama isku dhafka leh sodium hydroxybutyrate ayaa ah kuwa ugu door bida. Xaaladaha isku-dhafan, labada benzodiazepin iyo hydroxybutyrate labadaba waxaa lagu qaataa dhexdhexaad.
Cuntada la qaato inta lagu jiro hurdada maalinta 2.5 waxaa habboon in ay ka kooban tahay amino acids, borotiinada iyo borotiinka kali ah. Sidaa daraadeed waxaan heleynaa ugu badnaan somatotropin oo kor u kaca muruqyada waxaa lagu darayaa hoos u dhaca dufanka subcutaneous.
Ma jiro wax daaweyn ah oo daaweyn ah sida aminazin iwm. Sannado badan ka hor, daaweynta jeermis-maskaxeed ayaa loo abuuray si loogu daaweeyo bukaanka maskaxda qaba. Waxay leeyihiin saameyn saa'id ah oo saameynaya qofka caadiga ah, isagoo qaadanaya antipsychotic gaar ah, wuxuu ku dhacaa hurdo qoto dheer. Hurdadani waxay socon kartaa dhawr maalmood, maadaama ay qaar ka mid ah antipsikotikadu u keeni karaan hurdo xitaa ka badan kaniiniga hurdada ee xooggan.
Si kastaba ha ahaatee, neuroleptics, waxay leedahay tiro ballaadhan oo saameyn ah oo aan loo baahnayn. Nooca ugu xun ee "neuroleptics" waa naaquska unugyada dareemayaasha ee L-DOPA, dopamine, norepinephrine iyo xitaa burburinta unugyada dareemayaasha ee soo saara nuurotransmitters. Hurdada oo hoos timaada ficilka neuroleptics ma aha oo kaliya inay keento dheecaan dheeraad ah ee somatotropin, laakiin liddi ku ah, waxay joojisaa sii deynta somatotropin iyo hormoonada jinsiga labadaba. Nidaamyada anabolic ee nudaha murqaha ayaa si weyn u yaraada.
Laakiin tiro badan oo ah unugyada adipose ayaa si joogto ah u koraya. Dhakhtaro badan oo aqoon u leh ayaa u qora bukaanka iyaga oo leh daroogo dhiig-yari ah sida daroogooyinka oo burburiya habka dhexe ee dareenka ee dareenka dhabta ah ee ereyga. Sidaa darteed, waxay noqon laheyd qalad aan la aqbali karin oo ah inaan diirada saarin arrintan. Murugada hypnotic hypnotic waana tan mar walba la xusuusto.
Maaraynta hurdada waxaa lagu samayn karaa iyada oo aan la isticmaalin daroogooyinka dhammaantood, iyada oo ay ugu yaraan qabaan xirfadaha nasashada ee hoose. Waxaa jira siyaabo badan iyo farsamooyin nasasho.
Aan isku dayno inaan ku noolnno kuwa ugu caansan, oo loo yaqaan 'Schulz' tababarka caadiga ah. Adigoon aqoon u laheyn xirfadahan tababarka, qofku wuxuu si toos ah isugu dari karaa xaalad nasasho qoto dheer leh ama hurdo. Xitaa haddii qofku uusan u maareynin inuu hurudo, oo uu ku jiro xaalad nasasho qoto dheer, taasi waxay si muuqata u saameeysaa waxqabadka bayoolojiga ee maskaxda wuxuuna xoojiyaa dheecaanka hoormoonka koritaanka.
Si aad u hesho nasasho dhammaystiran, waa in aad dhabarkaaga jiifsatid oo aad isticmaasho farsamooyinka caadiga ah: 1. Indhahaaga si adag u xir (waxaa ugu wanaagsan inaad tagto qolka madow oo mugdi guud oo idil); 2. Bal qiyaas dareenka culeyska: 1) gacmaha; 2) ee suxulka iyo armaajada; 3) oo gacmaha ku leh faraha faraha ee garbaha; 4) lugaha, laga bilaabo talooyinka faraha iyo dhamaadka kalagoysyada; 5) culeyska muruqyada murqaha leh; 6) culeyska muruqyada dambe; 7) culeyska muruqyada caloosha iyo muruqyada dambe ee caloosha; 8) culeyska muruqyada laabta; 9) culeyska muruqyada garabka; 9) culeyska muruqyada qoorta; 10) culeyska muruqyada oo dhan ee madaxa.
Dhamaadkani waa hawsha ugu muhiimsan, sida nasinta jilicsanaanta, murqaha iyo muruqyada hadalka waxay keenayaan nasinta guud iyo dareenka nabadda. Dhanka kale, dareenka culeyska ayaa keena: a) murqaha murqaha; b) muruqyada hadalka (murqaha carrabka iyo dhagta); c) muruqyada naqshadaha (muruqyada bushqada, indhaha, sunnayaasha, wejiga). Kadib, ka dib markaad awoodo in aad qiyaasto muruqyada muruqyada oo dhan, waxaa jira dareen ah nasasho guud iyo lumis fudud.
Farsamooyinka saddexaad ee caadiga ah waa dareenka kulaylka ee kuleylka oo dhan. Wareegga kuleylka waxaa lagu soo gaabiyaa isku xigga sida mataalida culeyska.
Haddii caadiga ah, matalida qaabka kulaylka iyo culeyska aan shaqeynin, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo qaababka soo jeedinta sida: "Gacmuhu wuxuu noqdaa mid culus oo kulul," iwm. Qaaciddadani waxay u baahan yihiin in la sheego. Haddii uu foomka ku jira qaabka aan shaqeynin, waxaad weydiisan kartaa caawimo dhakhtar takhasus leh, oo horey u hubiyey inuu haysto dibloome. Dhakhtarka cilminafsiga ayaa qaybtaas ka mid ah dadaalka aad u baahan tahay si aad u muujisid naftaada si aad u feejignaan iyo nasasho. Sidaa daraadeed, in la shaqeeyo hagida takhasusle waa mid aad u fudud oo fudud ka madax banaan.
Markaad horumariso xirfadaha nasashada ee takhasus leh, waxaad tagi kartaa shaqo madaxbannaan. Ciyaartoyda qaarkood, xirfadaha nasashada ayaa loo sameeyay si ay u cabbiraan si ay u dareemaan hurdo qoto dheer daqiiqado yar gudahood. Waxaa intaa dheer, wakhtiga baraarujinta ayaa horey loo dejiyey, qofkuna wuxuu toosaa saacad qaylo.
Mararka qaarkood, horumarinta degdegga ah ee xirfadaha is-dhiibista iyo nasashada, qaababka soo-jeedinta waxay ku duuban yihiin cajalad cajalad gaar ah oo ka soo horjeeda asalka muusigga iyo saameynta dhawaaqa gaarka ah - buuqa roobka, gunuunka socodka , shimbiraha xayawaanka, iwm
Waxaa jira boqolkiiba dadka yaryar oo aan ku nasan karin xitaa iyadoo ay caawineyso takhtarka cilminafsiga. Oo halkan waxaan u imid gargaarka qaababka la isku daro ee daaweynta cilminafsiga. Inta badan waxaa la geeyaa daaweynta dawada.
Haddii aadan awoodin inaad isdifaacdo adigoo isticmaalaya iskudhafsi-self-hypnosis, markaa waxaad qaadan kartaa qadar yar oo ah daawo diabetes ah ama daroogo ah (sida aad u yaryar oo aan la dareemin, ugu badnaan dareenka waa nasasho fudud) asalkiisu wuxuu isticmaalaa dhammaan farsamooyinka is-hypnosis oo aan wax natiijo ah ku helin. Iyadoo isku-dhafkan, saameynta waxaa laga heli karaa ku dhawaad ​​100% kiisaska.
Hab kale oo la isku daro daaweynta cilminafsiga ayaa ah elektrooni-dawayneed, marka farsamooyinka is-hypnosis loo isticmaalo ka soo horjeeda asalka saameynta qalabka korontada. Habka ugu adag waa elektro-narco-psychotherapy. Isla markaa, soo jeedinta ama is-hypnosis waxaa lagu sameeyaa ka soo horjeeda soo bandhigida walxaha daawada iyadoo la adeegsanayo qalab koronto-korontada ah, ama iyadoo la adeegsanaayo qalabka korontada ku salaysan ee loo yaqaan 'transcerebral electrophoresis' sida waafaqsan farsamada 'transorital'.
Daawooyinka noocan oo kale ah sida sodium hydroxybutyrate iyo phenibut waxay ku habboon yihiin daaweynta electro-daaweynta. Waxay u fiican yihiin sababtoo ah marka lagu daro hawlaha dejinta iyo murqaha, marka lagu daro sii kordhinta sii deynta somatotropin si toos ah inta lagu jiro nidaamka lafteeda, waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​dheellitirka hormoonka somatotropic ee unugyada eosinophilic pituitary iyo dopamine ee habdhiska maskaxda ee xakameynaya hormoonka somatotropic ee dhiiga inta lagu jiro iyo kadib jimicsiga.
Maadaama ay HGH kordhiso sonkorta dhiigga iyo asiidhda dufanka, dabiiciga ah, hoos u dhaca heerka dhiigooda waxay kicinaysaa sii deynta HGH. Sidaa daraadeed, heerka ugu sarreeya ee SP ee dhiigga ayaa lagu arkay geeddi-socodka soonka, marka cuntadu aysan galin dhammaantood. Kordhinta sonkorta dhiigga iyo acids-ku waxay kordhineysaa hormoonka somatotropic. Ka hortagidda sii deynta somatotropin ee dhiiga ka dib markii maamulka xididdada ee gulukoosku uu si cad u muujiyo.
Talada waa 6 jeer maalintii, xitaa marar badanna looma jeedo in la kordhiyo cuntada maalinlaha ah ee shuruudaha.
Waxay ujeedadeedu tahay in la yareeyo heerka sonkorta iyo FFA ee dhiiga ka dib hal cuno cunto. Sidaas daraadeed, "quudinta cuntada" ee saleysiga HGH ayaa yareeya.
Habeenkii, waxaa lagu talinayaa in la cuno cuntooyinka borotiinka aan lahayn dufanka iyo carbohydrateska, ama qaadashada isku dhafka asiidhyada amma crystalline, si aanay u faragelin dheecaan habeenkii hormoonka koritaanka. Fikrad ahaan, cuntada ugu dambeysa waa inay ahaataa ugu dambeyn 6 pm, iyo ka hor intaadan aadin sariirta waxaad qaadan kartaa oo kaliya ashyaa'da amino acids crystalline iyo wax kale oo badan.
Inta badan cuntooyinka borotiinka waxaa ku jira qadar yar oo dufan iyo karbohidraat. Halkan waxaan u imid gargaar ah ukunta caanaha leh (oo aan lahayn jaallo), kuwaas oo ah cuntooyin borotiinka ku dhow. Waxay si sahlan u tirtiraan, sababtoo ah ma laha qaab dhismeed ah (waxaan ku xusuusinayaa in ukun waa hal unug weyn).
Ka-reebista jaakadaha ka yimaada cuntada waa lagama maarmaan maadaama ay ku jiraan waxyaabo badan oo kolestarool. Suufka lekithin wuxuu ka kooban yahay xitaa intaa ka badan, iyo marka laga hadlayo horumarinta atherosclerosis maaha khatar. Qodobka diidmada ahi waa joogitaanka ugxan-darrada qadarka badan ee saliidda dufanka ah, taasoo joojinaysa dheecaanka HGH. Taasi waa sababta ay tahay in laga saaro cuntada.
Walaac maadaama ay u muuqato in jaleecada hore, qadar yar oo karbohidraat ah oo la qaaday inta lagu guda jiray tababarka (kuwa yar yar) ma aha oo kaliya hoos udhaca, laakiin xitaa waxay gacan ka geysaneysaa dheecaan xooggan ee HGH. Sidaa darteed, talooyin ku saabsan qaadashada qiyaas yar oo karbohydrate carbohydrate isla markiiba ka hor jimicsi, iyo sidoo kale daqiiqado 15 kasta oo jimicsi ah, waa la caddeeyey. Tani waxay noqon kartaa glucose, fructose, maltose ama sukrose. Waqtigaan, cabitaan qaas ah oo qallalan ayaa la heli karaa kaas oo ku jira carbohydrates sahlan oo la kariyo oo isku dhafan oo leh fitamiino iyo maadooyin. Waxaa lagu kala diraa biyaha waxaana lagu qaadaa qiyaaso yar yar oo jajab ah kahor iyo inta lagu jiro jimicsiga.
Carbohydrates-ka xad-dhaafka ah ee maalintii oo dhan waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada dheecaanka somatotropin. Sidaa darteed, carbohydrates, labadaba fudud iyo kakan, waa in la wada cunaa sida hadba loo baahan yahay, iska ilaalinta macmacaanka iyo macmacaanka.
4. Dheecaan heerkulleh oo ah anabolism. Joogista heerkulka sare waxay si weyn u kordhisaa soodootinimada dhiigga. Tusaale ahaan, inta lagu jiro joogitaanka sauna, heerka HGH ee dhiigga wuxuu kordhiyaa waqtiyada 2-3, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad si sax ah u isticmaasho kiciyaha heerkulka. Sauna, waxaad u baahan tahay inaad maalin kasta wax ku dhajiso, wax yar ka yar - laga bilaabo 5 illaa 15. Haddii kale, isbeddel weyn oo ku yimaada dheef-shiid kiimikaadka lama gaari doono. Tirada ugu yar ee booqashooyinka sauna, oo saameyn ku leh anabolic - 3 jeer toddobaadkii. Isbuucle, joogitaan dheer oo ku yaala sauna oo leh booqasho badan oo ku saabsan shucaaciyadu wax macno ah ma sameeyo. Dharka qubeyska Ruushka ah ee dhaqdhaqaaqa ayaa muujiyay waxtarka xitaa ka badan sauna. Xitaa Finland, markaad booqanayso saun ayaa lagu dhisay dhaqan, Finns waxay diidaan saunas iyo dhisaan qubeyska Ruushka.
Isticmaalka habboon ee heerkulka sare waxay keenaysaa in la kordhiyo geeddi-socodka anabolic iyadoo la siman "gubasho" ee dufanka subcutanous. Tani waa calaamad fiican oo ah qadar kordhinta HGH. Marka jirku aad u kululaado, dhacdo aad u xiiso leh ayaa dhacaya, kaas oo loo yaqaan "xarun wareega dhiigga".
Iyada oo ay sabab u tahay kicinta dheeraadka ah ee nidaamka cilladda adrenaline iyo sii deynta dhiigga qadar badan oo adrenaline ah, cidhiidhi aad u xoogan oo ka yimaada maraakiibta agagaaraha ah iyo ballaarinta kuwa dhexe. Ciriirinta maraakiibta ku jirta xuddunta ayaa yaraynaysa kuleylka kuleylka ee maqaarka waxayna ka hortagtaa kuleyka xad-dhaafka ah ee ka dhexjirta xubnaha dhexe. Gubashada sii kordheysa ee dufanka subcutanous waxay qayb ahaan sabab u tahay foosha xoogan ee aan ahayn kaliya maqaarka, laakiin sidoo kale weelasha subcutaneous, taasoo carqaladaysa wareegga dhiigga ee dufanka subcutanous.
Neurotransmitters taas oo keenaysa in wareegga dhiigga wareegga dhiigga ay sidoo kale soo saarto somatotropin sii daayo. Qubeyska dabaasha ama sauna, marka heerkulka hawadu yahay 110 heerka Celsius, heerka somatotropin ee dhiigga wuxuu kordhin karaa 6 (!) Times. Ha iloobin in somatotropin uu yahay hormoon cadaadis iyo sii-deyntan waxaa keena walwal kasta oo culus. Somatotropin waxay ku kicisaa dufanka astaamaha ah ee dufanka subcutaneouska ah ee dhiigga iyo waxay beddeshaa mitochondria oo ka timaada carbohydrate ilaa cuntooyinka dufanka si ay u kordhiyaan waxqabadka.
Ka dib dhammaantiis, mitochondria ee ereyada evolution ayaa ah qaababka unugyada ugu yar waana dhib badanaa. Waxay ka difaacdaa burburinta somatotropin. Haddii adrenaline iyo hormoonnada glucocorticoid ee xad-dhaaf ah inta lagu jiro xilliga foosha ba'an ay dhaawici karto dhismayaasha unugyada, ka dibna somatotropin - marnaba.
Taas bedelkeeda, waxay ka hortagtaa dhaawaca unugyada unugyada jirka oo laga yaabo in ay dhacaan sababo badan oo ah adrenaline iyo glucocorticoids.
Saameyn wanaagsan oo dheeraad ah oo ku saabsan sauna waa hoos u dhigidda tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, kaas oo hoos u dhigaya nidaamyada hababka habka loo yaqaan 'muruqyada' ee muruqyada, halka murqaha la og yahay inay koraan 60% sababtoo ah calaamadaha qallafsan, iyo 40 oo keliya sababtuna tahay kororka anabolismka.
Isla sidaas oo kale ayaa loo sheegi karaa tayadaas oo kale sida adkeysiga iyo awoodda dib u soo kabashada ka dib marka aad u culus tahay jirkaaga. Horumarinta dulqaadka, kudhowaad iyo awoodda, guud ahaan 70% waxay ku xiran tahay hoos u dhigidda istaatistikada Kordhinta dammaanad waxay kuu ogolaataa inaad isticmaasho culeysyo waaweyn oo tababar ah, ugu dambaynna, si xawli ah u xoojiso anabolismka. Dhexdhexaadintu waa dabiici ahaan korodhka dheecaanka HGH.
Soo-gaadhista heerkulka hooseeya waxay sidoo kale kordhin kartaa anabolism iyada oo kordhinaysa dheecaanka HGH. Sidee ayay taasi dhacdaa? Marka jirku qaboojiyo, falcelinta difaaca waxay dhacdaa - kor u kac weyn oo ka yimaada lipolysis-ka baxa. Kordhinta heerka FFA ee dhiigga wuxuu kordhiyaa heerkulka jirka sababtoo ah kala-saaridda oxidation iyo fosfooraska (saameyn heer-kul-cabbir ah).
Mustaqbalka ayaa imanaya "go-ahead". Kadib joojinta qabowga qabow, heerka FFA ee dhiiga ayaa hoos u dhacda, oo sida caadiga ah, heerka HGH wuxuu kordhiyaa. Dhibaatada keliya ayaa ah kororka dufanka subcutaneous, sida kiiska leh isticmaalka nicotinic acid. Cuntada dufanka badan ee subcutaneous waxaa lagu hagaajiyaa cuntada iyo "qalajinta".
Waa in la qabadsiiyaa qaboojiyaha qaboojiyaha maalin kasta, qaabka ugu fiicanna waa la qaboojiyaa biyo qabow. Daadinta waxaa badanaa lagu sameeyaa habka "marxalad". Marka hore waxay gacmahooda u miiraan. Ka dib markii la qabsashada, oo qaadan kara waqtiyo kala duwan qof kasta, iyadoo ku xiran heerka caafimaadka iyo heerka jirdhiska, lugaha ayaa lagu shubay, ugu dambeyntii jirka oo dhan.
Xawaaraha qiyaasan ee ku-meel-gaadhka ah waa mid shakhsi ahaaneed. Biyo qabow qabow wuxuu leeyahay faa'iido noocyada kale ee adag. La xiriir biyo qabow waa muddo gaaban, jidhkuna waqti uma hayo in kabadan, taas oo ka soo horjeeda noocyada adag ee qubayska qabow iyo qubays biyo qabow. Hase yeeshe, jawaabta jidhka ee neuro-reflex-ka ee jidhka ayaa leh waqti ay ku hormariso, iyo sii deynta somatotropin waxay gaarsiisaa qiimaha la taaban karo (mararka qaarkood 3-4).
Sicirkani waa mudo gaaban, si kastaba ha ahaatee, saameynta anabolic waa mid aad u muuqata. Dhibaatada qabow si loo dhiso xajmiga murqaha ayaa si weyn loo isticmaalay tababarka cayaaraha da'yarta iyo quruumaha oo dhan (marka laga reebo kuwan, dabcan, kuwaas oo aan wakhti qaadin).
Biyaha kuleylka xataa waxaa lagu daadin karaa dadka qaba cudurada dabaysha ee joogtada ah. Si sax ah u samee, waxaan mar kale xoogga saarayaa, si taxadar leh, tallaabooyin. Waa maxay wiigga xajmiga ah? Marxaladda koowaad, waxaad ku shubeysaa gacmahaaga suxulka. Baaldi caadi ah oo biyo qabow qabta ayaa ugu fiican ujeedadaas.
Qofna ma ogaanayo sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hayso, suurtagalnimada inaad ku shubtid suxullada. Isla marka aad dareentid in qalabka dhamaystirka buuxa uu yimaado, waxaad bilaabi kartaa inaad ku shubto dhammaan gacmahaaga. Marxaladda xigta waa inay cagaha ku daadiyaan gacmaha. Dad badan, cagaha ayaa ah "ugu jilicsan" meeshii ay ka soo horjeesan lahaayeen qabow iyo qabsashada biyo qabow waxay ku qaadan kartaa waqti dheer.
Ka dib markii la qabsashada cagaha, lugaha horeba jilbaha-qoto dheer. Markaa oo kaliya, marka ay la qabsadaan, lugaha ayaa lagu shubay dhammaantood. Waa marxaladdan ugu dambeysa, marka gacmaha iyo lugaha ay si buuxda u bartaan biyo qabow, waxaad tagi kartaa oo dhan jirka oo dhan.
Si aad iskaga ilaaliso inaad qabowdo ama aad u sii xumaato cudur kasta oo jirran ee jirran, waxaad bilaabi kartaa inaad qaadatid miyirka ascorbic acid megadoses (10 g / maalin loogu talagalay miisaanka jirka ee miisaanka jirka) marxaladda ugu adag ee "khatar" maalmo ka mid ah "qalalan" soonka la'aan cunto la'aan iyo biyo la'aan. Inta badan waxay doorbidaan in ay noqdaan kuwo firfircoon.
Waxaa xiiso leh in xilliga qaboojinta, iyo sidoo kale inta lagu jiro kuleylka, meel dhexe oo qeexaya wareegga dhiigga. Maqasyada maqaarka, dufanka subcutaneous iyo mindhicirka ayaa cidhiidhi ah. Laakiin maraakiibta maskaxda, wadnaha, kelyaha ayaa ballaadhiya. Dhiiga kulaylka iyo kuleylka wuxuu ka baxaa xannibaadda bartamaha. Jidhku wuxuu raadiyaa inuu ilaaliyo nolosha xubnaha dhexe ee kharashka ka baxsan. Dhinaca kale, cidhiidhinta xooggan ee weelasha unugyada dillaaca ayaa yareynaya kuleylkooda kuleylka waxayna ka hortagtaa in qabowga qabow ku dhex jirka, iyo sidoo kale luminta kuleylka jirka.
5. Saameyn xun oo xanuun leh. Waxaan hore u sheegnay waxa saameyn weyn ku leh b-endorphin uu leeyahay dheecaan HGH. Ma jiro wakiilo kale oo farmaajo ah oo kordhin kara dheecaanka HGH 30, qiyaas kasta oo la isticmaalo. Maadaama dawadan aan hadda la heli karin suuqyadeena, habka keliya ee loo adeegsan karo waa in la kiciyo jiritaanka jirka ee b-endorphin.
Waqtigan xaadirka ah, dhowr nooc oo endorfin ah ayaa la go'doomiyay oo la soo saaray - a, b, y-endorphins, dinorphin, b-neo-endorphin, a-neo-endorphin. Dhaawacyada endorphins - enkephalins, oo leh saameyn morphine-sida enkephalin, leucine-enkephalin, methionine-enkephalin, ayaa sidoo kale la helay. Labada addorphins iyo enkephalins ayaa awood u leh inay u dhaqmaan maskaxda qabtayaasha (iyo unugyada aan qalliinka lahayn) kuwaas oo u arkaan morphine.
Laakiin si ka duwan sida morphine, sida kor ku xusan, ma laha saameyno waxyeelo leh oo aan u keenin maandooriye.
Waxaa xusuus mudan in endorphins iyo enkephalins la sameeyay kaliya ma ahan habka dhexe ee dareemayaasha, laakiin sidoo kale in mareenka caloosha iyo mindhicirrada, iyo formation waxay ku xiran tahay inta badan arrimo cunto ah.
Noocyada ugu muhiimsan ee soo-gaadhis xanuunka loo yaqaan, ee maanta loo yaqaan, waa:
a) Sariir sir ah oo badan. Waxaa la sameeyaa, inta badan, laga bilaabo raadiyaha raadinta ee lacag raadinta ah oo lagu riday santuuq caag ah. Waxaa laga samayn karaa codsiyada Kuznetsov. Marka habka loo raaco, talaalku si fudud ayaa loo adeegsan karaa jirka oo lagu riixaa gaab yar, oo si tartiib tartiib ah u kordhinaya xajmiga.
Korodhka tartiib tartiibka ah ee culeyska ayaa la soo saaraa sababtoo ah marka la sii daayo endorphins, dareenka xanuunka wuxuu yareeyaa wax badan. Iyada oo la soo dhaweynayo muddo dheer, waxaa la joogaa daqiiqad marka qofku joojiyo xanuunka.
b) Saamaynta koronto saarida korantada. Dheecaan ka yimaadda dusha sare ee jidhka ayaa la siiyaa, inta badan, qalabka D'Arsonval. Awoodda qulqulka duufka waa la hagaajin karaa. Haddii horay u shaqeynayeen qalabka D'Arsonval waxay ahayd lagama maarmaan in lumiyo wakhti aad ku tagto gawaarida, hadda wax waliba wuu isbedelay. Dhamaan qalabka caafimaadka oo dhan ayaa iibiya aalado yaryar oo la adeegsado oo ku habboon isticmaalka guriga.
Xirmada qalabka waxay ka kooban tahay nuucyo nuucyo ah oo ku saabsan maareynta dhinacyada kala duwan ee jirka iyo godadka gudaha. Waxaa jira kuwo badan oo koronto ku shaqeynaya oo ku shaqeeya beteriyada caadiga ah. Waxay bixiyaan dheecaan dillaac ah oo aan ka xuneyn qalabka D'Arsonval. Kaliya halkan ma haystaan ​​lifaaqyo gaar ah oo ay leedahay qalabka D'Arsonval leeyahay.
c) Acupuncture. Acupuncture dhaqameedka waxaa sameeya khabiir ku takhasusay khibradaha bayoolojiga ah ee gaarka ah. Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarrada sahlan ee habka loo xareeyo meelo gaar ah oo jirka ah oo leh cirbado badan oo cirbad. Nidaamkan waxaa la samayn karaa xitaa qof aan takhasus lahayn. Waxa kale oo jira xargaha cirbadaha gaar ah oo "rujin" qaybo ka mid ah jirka. Waxaa jira meelo gaar ah oo jidhka ka mid ah, ka shaqeynta oo leh cirbadda cirbadda badan ama codsashada qalabka Kuznetsov wuxuu keenaa sii-deyn aad u ballaaran oo ah endorfin.
Qeyb ka mid ah qaybta gaarka ah ee jirka waa meesha qoorta ah. Dhabarka qoorta, muruqyada trapezius - kuwani waa astaamaha caamka ah ee qoorta. Marka xirfad-celiye xirfadle ah oo ku takhasusay daaweynta cirbadda leh cirbadda cirbadaha badan, sii deynta endorphins waa mid aad u weyn in dhammaan dareensiyada ay soo martay qofku la mid yihiin kuwa la siiyay morfin. Marka hore wuxuu yimaadaa nasashada guud. Haddii meel aysan jirin xanuun aad u xoog badan, markaa marka hore wuu daciifaa marka hore, kadibna way wada baabi'isaa.
Dabeecadda ayaa si tartiib ah u kordha, waxaan rabaa inaan qoslo sabab la'aan. Kadib dhamaadka casharka ayaa riyadu ku timid. Ku dhowaad dhammaan, iyo sidoo kale ka dib markii lagu soo bandhigay morfin.
d) Maqnaansho xanuun. Tani waa miisaan gaar ah oo loogu talagalay inay keenaan xanuunka dhexdhexaad ah.
Miisaanka caadiga ah ee caadiga ah waxaa sidoo kale la socda sii deynta endorfin dhiigga, gaar ahaan haddii ay la socoto daraasad qoto dheer oo ah aagga qoorta. Xanuunka waxaa laga yaabaa inuu leeyahay dabeecad silliminal ah wuxuuna dareemayaa cadaadis caadi ah. Ka dib markaad dhaafto xadadan, xanuunka waxaa loo dareemayaa sida. Miisaan maskaxeed oo fiican ayaa sababa xanuunka hooseeya, kaas oo loo arko inuu yahay mid taabogal ah, laakiin wuxuu keenayaa sii deynta dhiigga ee endorfin. Marka loo sii daayo endorphins, xuddunta xanuunku waxay kordhin doontaa waxyaabo badan, sidaas awgeed awooda farsamooyinka masaajeynta ayaa si tartiib ah loo kordhin karaa, laakiin qofka ma dareemayo xanuunka.
Ugu dambeyntii, xanuunkan dhexdhexaad ah ma keeno wax waxyeelo ah, laakiin faa'iidooyinka miisaaniyadda noocan ahi waxay noqon doontaa mid muhiim ah.
e) Dhibaatooyinka saamaynta leh ee walxaha kiimikada. Waxaa lagu fuliyaa qaab isku dhafan oo jirka ah iyada oo loo mariyo xakamaynta. Bilowga hore sida xad-dhaafka ah waxaa loo qabtaa si aad u liita, qiyaasta taabashada.
Kadibna, si tartiib tartiib ah, sida endorphins ayaa loo sii daayaa dhiigga, xoojinta kor u kaca, sababtoo ah dareenka xanuunka ayaa hoos u dhacay sababtoo ah sii deynta hore ee endorphins. Ugu dambeyntii, nettles qof ayaa lagu wareersan karaa dhamaan awoodooda. Weli ma dareemayo xanuun.
e) Layli jimicsi. Jimicsiyada waxaa loo sameeyaa sida habka loo yareeyo xanuunka dhexdhexaadka ah.
Dhibaatada jimicsiga maaha in la kala fido meelo hore u dhaawacmay. Waa inaan jirno jimicsi oo tuujinjirta jilibka. Xanuunka wadajirka ah waa in uu had iyo jeer noqdaa mid dhexdhexaad ah, waana inuusan sabab u noqonin fara badan sida fiiqitaanka.
g) Dildilaaca sariirta qubeyska. Si loo yareeyo xanuunka qunyar-socodka ah, ma aha oo kaliya qashinka qashinka ayaa la isticmaalaa, laakin sidoo kale qoryaha yaryar - geed, geed.
In kasta oo xaqiiqda ah in sii-deynta ugu weyn ee endorphins waxaa lagu arkay marka la arko aagga qoorta - aagga trapezium, delta iyo qoorta qoorta, ugu haboon ayaa saameyn ku leh dhabarka dhan, sababtoo ah marka uu kuuskuusho dhabarka iyo qaybta paravertebral, qadar weyn oo norepinephrine ah ayaa lagu sii daayaa dhiigga, taas oo ah, sida aynu ognahay, kicineyno adrenoreceptors sidoo kale waxay kordhisaa dheecaanka hoormoonka koritaanka.
6. Gaajada oksijiin oo la qorto. Yaraanta dhexdhexaadka ah ee hawada oksijiinta ee hawada la neefsado waxay keenaysaa kororka muuqda ee ku jira soodotropin ee dhiiga. Tani waa saldhigga tababarka cimilada ee cayaaraha, marka tababarka lagu fuliyo xaaladaha buuraha hoose iyo buuraha dhexe. Baaxada buuraha badani waxay u hadlaysaa nafteeda. Faa'iidooyinka oksijiinta dhexdhexaadka ah ayaa si fiican loo yaqaan.
Waxa suurtagal ah, si kastaba ha ahaatee, in la jaangooyo xaaladaha cimilada buuraha ee bannaan. Tan waxaa lagu gaari karaa siyaabo kala duwan:
a) Layliyo loogu talagalay in lagu hayo neefta. Waxaa jira jimicsiyo badan, oo waxay u oggol yihiin, marka laga reebo gaajada oksijiinta, si loo gaaro qaar ka mid ah isku-darka kaarboon-dioxide ee unugyada, taas oo leh saameyn dheeraad ah oo tababar ah. Marka loo eego sidan, jimicsiga si aad neefta u qabato, lagu qabto bayaanka, wuxuu leeyahay faa'iido ka badan tababarada caadiga ah ee cimilada. Buuraha, sababtoo ah cimilada dhifka ah, waa magdhow
kordhinta qoto dheer ee neefsashada iyo lumista (caarada) ee dioxide kaarboon jirka. Dareeraha qafiifka ah, waa wax cajiib ah maaddaama ay u muuqato in jaleecada hore, ay sabab u tahay wax badan oo ka timi la'aanta oksijiin ee jirka, laakin waxaa ku yar maqnaanshaha dioxide.
b) Qalabka khaaska ah ee xaddidaya dalxiiska gogosha laabta, suumanka, iwm.
c) Neefsasho leh isku dhafka gaaska oo leh aalado yar oo oksijiin ah iyada oo loo marayo aalado gaar ah. Sida caadiga ah, kuwani waa qalab loogu talagalay suuxinta kaas oo hawada caadi ah lagu qasi karo gaas ku jira - nitrogen. Mararka qaar kaarboonka dioxide waxaa lagu daraa isku dar ah qiyaasta aan ka badnayn 8% ee isku-darka la kariyay.
d) Ku neefso iyada oo loo marayo hypoxicators shakhsi gaar ah. Kuwani waa aaladaha la qaadi karo ee isticmaalka guriga. Qaadashada hawada oxygen waxaa lagu helaa siyaabo kala duwan.
Qaar ka mid ah waxay ka shaqeeyaan mabda'a neefsashada ku-noqoshada - neefsiga iyo neefsiga waxaa lagu sameeyaa meel xiran. Qaar kalena waxay ka shaqeeyaan mabda'a abuurida "meelo ba'an" dheeraad ah - inhale iyo neefta ayaa lagu sameeyaa tuubo dhererka iyo dhererka, oo lagu duubo tuubo (si ay u qaadato meel bannaan). Waxaa jira noocyo kale.
Marmarka qaarkood shakhsiyaadka qaba hypoxicators waxay ku xiran yihiin jirka (inta badan, suunka ama dhabarka), iyo tababarka waxaa laga qaadaa asalka dabiiciga ah ee loo yaqaan hypoxicator. Badanaa, waxaa ku jira hipoxicator shakhsi ah oo ku shaqeeya treadmills joogta ah. Marar dhif ah - garoomada
e) Meeleynta heerkulbeega shaybaarka ah iyo heerkulbeega. Marka qolka xiran ee qolka xiran ama saxaafada lagu riixo, qofku wuxuu neefsanayaa oo soo saaraa meel isla meeshii illaa heerka oksijiin uu hoos u dhaco ilaa heerkulmeedkuna wuxuu kordhiyaa alaabada dioxide. Waxaa jira kiisaska dhismaha dhamaan garoomada, halkaa oo ah nidaam gaar ah oo loo yaqaan 'oxygen' si dabiici ah loo dayactiray '(buur yar ama mid dhexe).
7. Jimicsiga jimicsiga. Faa'iidooyinka iyo saameynta jimicsiga aerobik waxaa lagu sharaxay faahfaahin ku filan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee suugaanta gaarka ah. Waxaan kaliya ku dari doonaa in xaddiga ugu badan ee HGH ee dhiiga lagu daro inta lagu jiro kobaca. Waxa kale oo uu keenaa sii deynta ugu badan ee catecholamines ee dhiiga, iyo sidoo kale endorfin. Marka la eego aragtidayda, kicinta badan waxay hagaajinaysaa niyadda oo ka sii daba dheeraatay tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Diidmada a-adrenoreceptors inta lagu jiro kobaca waa maximal, sidaa daraadeed waa farsamo loo isticmaalo in lagu tababaro cayaaraha cayaaraha kuwaas oo u baahan in la dhiso muruqyo waaweyn. Haddii aad u baahan tahay inaad qorto qadar xaddidan oo ah shaqo aad u fiican, markaa taasi waxaa sameeya adoo kordhinaya qadarka tababarka.
Isticmaalidda HGH ee jirka jirka iyo kordhinta dhererka aadanaha
Sida kor ku xusan, isticmaalka somatotropin ayaa sii kordheysa adduunka. Waxayna u isticmaalaan wax badan oo loogu talagalay daaweynta curyaanka iyo cayaaraha, laakiin daaweynta dareenka gaaban ee dastuurka. Haweenka khibrad u leh noloshooda ayaa sheegaya in nin kastaa uu leeyahay laba arrimood oo waaweyn: kobaca iyo mushaharka. Kobaca, maskaxda ku hay, ayaa la gelinayaa meesha ugu horeysa. Dhamaan kaftan kasta waxaa jira qayb ka mid ah kaftanka. Inta hartay waa run.
Waalidiinta qaangaar yari waxay doonayaan in caruurtoodu ay ka dheeraadaan naftooda, sababtoo ah korniinka yar wuxuu inta badan abuuraa dhibaatooyin badan oo qof, kuwaas oo aan xataa lagama maarmaan u aheyn in lagu qoro. Dhinaca kale, waalidiinta kobaca caadiga ah waxay rabaan in carruurtoodu ay kor u kacaan celcelis ahaan si ay u gaarto natiijooyinka cayaaraha qaarkood. Tani waxay khuseysaa ciyaaraha isboortiga, iyo ciyaaraha. Ku saabsan kubada kolayga iyo kubbadda laliska, xitaa ma sheegi kartid. Dhaqdhaqaaqyadan, natiijooyinka waxay ku dhow yihiin in si toos ah saamiga koritaanka.
Sidee loo xoojiyaa koritaanka sii kordhaya? Gobollada koritaanka ee lafaha tuubada dheer, taas oo, dhab ahaantii, waxay ku xiran tahay dhererka qof, waxaa badanaa la xiraa inta u dhaxaysa 18 iyo 26 sano. Mararka qaarkood koritaanku wuxuu joojiyaa horaantii - at 16 ama xataa 14. Si kastaba ha ahaatee, waa arrin naadir ah. Qaangaarka hore wuxuu kor u qaadayaa xidhitaanka hore ee koritaanka, taniyo hormoonnada jinsiyadu waxay kobcisaa qalabka calcium ee kilyaha iyo ossification. Xilliga dambe, qadarin, dhererka muddada dheer ee koritaanka lafaha dhererka, sababtoo ah aagagga koritaanku ma dhicin waqti dheer.
Waxaa jira fikradda "da 'lafaha", oo aan ku haboonayn baasaboorka. Si loo ogaado da'da lafaha, raajada saddexaad ee dheeraadka ah ee gacanta hore ayaa loo qaataa (muuqaalka saddex meelood oo meel ka mid ah calaacalaha). Haddii sawirku muujiyo kilyaha neostosten ee aagga koritaanka, ka dibna waxaa jiri kara suurtogalnimada kobaca lafaha dhererka. Haddii aagga kobaca uu hore u ogyahay, ka dibna waxa loola jeedaa in kuwa kale ay sidoo kale ossified. Kala duwanaansho u dhexeeya baasaboorka iyo lafaha mararka qaarkood waa muhiim.
Haddii ilmaha da '16-da da' sano uu leeyahay da 'lafaha sanadaha 18, markaa tani macnaheedu waa inuusan u baahnayn inuu kor u kaco heer sare. Haddii sanadaha 16 da'da lafaha u dhiganta sanado 13 (tani badanaaba waxay dhacdaa inta badan), ka dibna koritaanka dhirta dhererka ayaa socon doonta wakhti dheer, korodhka koritaanka wuxuu noqon doonaa mid muhiim ah.
Ilmanimada, kobaca ilmaha ayaa la kordhi karaa iyada oo la adeegsanayo jinsi caan ah oo fitamiin ah, oo ka soo horjeeda asalka koorsooyinka daaweynta leh carnitine iyo nicotinic acid. In qaan-gooyo, horeyba waa suurtogal in la isku xiro daaweynta somatotropin. Khatarta kaliya ee halista ah ee la xusuusto ayaa ah halista ah in la qaado diabeteska. Dhallinyaradu, gaar ahaan waa weyn. Si loo qiimeeyo khatarta suurtagalka ah, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo tijaabo dhiig oo gaar ah oo dheellitiran oo sonkor leh iyada oo la dhisi doono dhismaha dambe ee loogu yeero "curve sonkorta".
Daraasadda sonkorta dhiigga waa in lagu dhajiyaa maskaxda in ay kordhin karto dabeecadda dareenka. Sidaa darteed, tijaabooyinku waxay sameeyaan subaxdii isla markiiba ka dib hurdo habeen iyo dabcan, calool madhan.
Go'aanka kama dambaysta ah ee maqnaanshaha macquulnimada sonkorowga mellitus wuxuu sameyn karaa kaliya takhasus gaar ah kadib baaritaan dhamaystiran.
Muhiimada weyni waa qiyaasta hidaha, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo falanqeeyo dhammaan khadadka qaraabada ee joogitaanka cudurka macaanka. Marka ugu horeysa, waa inaad ka taxadartaa sidi xanuunka nooca 1 (sonkorowga ku-tiirsan ee macaanka). Aad bay u yartahay khatarta ah in uu qabo sonkorowga 2 (sonkorowga aan ku-xidhneyn ee sonkorowga, ama "sonkorowga") ee qoyska.
Haddii aysan jirin wax khilaaf ah, waxaad bilaabi kartaa hordhaca hormoonka koritaanka, laakiin kiiskan waxaa sidoo kale lagugula talinayaa in si joogto ah loo sameeyo baaritaanka dhiigga, go'aaminta qandhada sonkorta.
Iyadoo uurjiifka yaraa uu korayo, oo hoos yimaada ficilka, ugu horreyntii, jinsiga iyo, meesha labaad, hoormoonka tayroodhka, qalfoofka ayaa kala duwan. Gobollada kobaca xayawaanka ayaa si tartiib ah u yaraaday oo la xiray. Waxaa soo baxa ossification dhamaystiran, korriin dheeraad ah oo dhererka dhererkeedu wuxuu noqonayaa mid aan macquul aheyn.
Daawooyinka anti-andogenogen-ka ah sida flutamide, cyproterone acetate, finasteride, epristeride, iyo roodhida waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo kala-duwanaanshaha qalfoofka iyo xiro aagagga koritaanka ee ragga. Kaliya waa in si taxadar leh loo adeegsadaa kormeer joogto ah oo ku takhasusay takhasus khibrad leh, xitaa ka sii fiican, koorsada bilawga ah ee daaweynta waa in lagu fuliyaa xaaladaha taagan.
Hormarka kobaca ee laftiisa laftigiisu ma kicin karo kala-duwanaanta qalfoofka mana u horseedi in la xiro xilliga hore ee xuduudaha koritaanka.
Dawaynta Somatotropin waxaa la samayn karaa wakhti dheer, sanado, illaa inta kala duwanaanshaha qalfoofka la dhammaystiray, iyo aagagga koritaanka ayaa la xiray. Waxaad geli kartaa maalin kasta ama maalin kasta. Cilmi-baareyaasha qaarkood waxay ku talinayaan inta lagu jiro muddada koritaanka jirka, somatotropin waxaa la qaadaa wakhtiga 1 ee maalmaha 3 si aan u keenin qabatimaadyo muhiim ah iyo samaynta unugyada difaaca ee daroogada.
Qiyaaso yar oo insulin ah (gudaha 4-14 IU, iyada oo ku xidhan miisaanka jirka) waxay kordhisaa saameynta HGH ee unugyada.
Xaqiiqada dhabta ah ee ficilka somatotropin, ee laga bixiyo dibedda, waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo dhammaan xaaladaha kor ku xusan ee isticmaalka dhaqdhaqaaqa jireed, hurdada, cunto ciriiri ah, isugeyn, heerkulka heerkulka, saameynta xanuun saamiga iyo gaajada oksijiin dhexdhexaad ah . Kaliya taariikh nololeed oo fiicnaado, farqulaha ayaa saameyn buuxa leh.
Isticmaalka HGH ee daawada
Isticmaalka HGH ee daawada waxay ka bilaabantey daaweynta nanism-ka ama "cuuryaan". Ku dhowaad isku mar, waxay bilaabeen in ay daaweeyaan qaabdhismeedka gaaban ee dastuuriga ah, taas oo dhab ahaantii, waa mid ka duwan midka caadiga ah. Later waxay bilaabeen in ay daaweeyaan somatotropin daahfurnaanta maskaxda iyo jinsiga, cudurada ku dhaca ilmaha dhicisoobay. Intaa waxaa dheer, somatotropin waxaa lagu muujiyay oo kaliya ma'aha horumarinta galmada oo dib loo dhigay, laakiin sidoo kale horumarinta galmada degdegga ah, marka meelaha koritaanku uu si dhakhso ah u dhowaado.
Tani waxaa la sameeyaa si jidhka dhallinyarada ah "waqti u leeyahay" inuu koro ka hor intaan koritaanku xirnayn sababtoo ah wax soo saarka xad-dhaafka ah ee hoormoonka galmada.
Tan iyo saameynta wanaagsan ee HGH ee qalfoofka ayaa la helay, isku dayga ayaa loo sameeyey si loo daaweeyo dhaawacyada daran ee qalabka lafdhabarta. Waxaa la ogaaday in daaweynta HGH, dhaawacyada lafdhabarta, dhaawacyada kooxaha waaweyn iyo kuwa yaryar ay bogsadeen ku dhawaad ​​saacadaha 2.
Haddii dhaawaca lafahaaga si dhakhso ah loogu daaweyn karo waxyaallaha anabolic, waxyeellada kilyaha ayaa kaliya ka jawaab celisa daaweynta somatotropin. Dareemida (dareenka) ee unugyada cirridka ee somatotropin waxay ahaayeen wakhtiyo 100 ka sareeya anabolic steroids, adaptogens iyo insulin. Natiijooyin gaar ah oo wanaagsan ayaa la helay iyadoo la isku daro somatotropin oo leh qiyaas hoose oo ah thyrocalcitonin, hormoon ka mid ah qanjirada iyo qanjirada parathyroid, taas oo kor u qaadaysa kalsiyum ku sameysma unugyada iyo, marka hore, lafaha.
Anabolism ee unugyada jilicsan, iyo muruqyada, waxaa suurtogal ah in lagu xoojiyo insulin badan marka loo eego wakiillada kale. Sidaa darteed, dhaawacyada aadka u daran, marka lafaha, jooniska, muruqyada iyo muruqyada ay waxyeeleeyaan, isku-darka somatotropin, thyrocalcitonin iyo qadar yar oo insulin ah ayaa u fiicnaanaya, taas oo intaa dheer, wax kasta oo kale, waxay kordhinaysaa saameynta somatotropin. Maanta, thyrocalcitonin ayaa ku jirta suuq-cilmiyeedka daaweynta qaabka saddexda daroogo:
1. Calcitonin synthetic, oo la mid ah tyrocalcitonin aadanaha; 2. Miacalcin - thyrocalcitonin synthetic, oo la mid ah tyrocalcitonin ee salmon. 3. Calcitrin - daroogo ka soo qanjirka thyroid ee doofaarrada. Saddexda daroogo oo dhan ayaa loo maamuli karaa subcutaneously, intramuscularly iyo intranasally by instillation galay sanka.
Daaweynta dhaawacyada halista ah, waxaa la ogaaday in HGH hoos u dhigi karto fosfooraska iyo kalsiyum kaadida, taas oo ka qayb qaadanaysa hagaajinta lafaha, oo ay ku jiraan iyo unugyada ilkaha.
Saameynta anabolic ee HGH ayaa lagu guuleystay in lagu daaweeyo cudurada gubashada, marka qofku uu dhinto weyn oo ka luntey borotiinka iyo elektarooliyooyinka iyada oo loo marayo boogta gubashada. HGH waxay xaqiijisay in ay tahay daaweyn aad u fiican boogaha caloosha iyo mindhicirka. Iyada oo uu saameyn ku yeeshay, dhiigbaxu wuu istaagaa, boogaha si dhakhso ah ayuu u bogsiiyaa.
Iyadoo gacan ka geysaneysa HGH, waxaa suurtagal ah in lagu daaweeyo cudurada ilkaha ee aan ku haboonayn daaweynta caadiga ah, tusaale ahaan cudurada mudada dheer, tusaale ahaan.
Wadna xanuunka, cudurada beerka iyo kelyaha, xanuunka trophic - tani ma aha liis dhamaystiran oo ka mid ah kiisaska markii somatotropin lagu guuleysan karo.
Isticmaalka somatotropin ee ciyaaraha isboortiga
Saameyntii anabolic ee somatotropin wuxuu u furay waddo ballaadhan daawada isboortiga. Tobaneeyo sano ka hor intaan la sheegin doping, waxaa horey loogu isticmaali jiray dhamaanba cayaaraha. First of all, isticmaalka somatotropin ee dhaqanka dhaqan-celinta ee daaweynta saameynta dhaawacyada iyo waxqabadyada qalliinka u qalmaan taxadar. Da'da isboortiga ee qofku had iyo jeer way socotaa oo wali gaaban (marka laga reebo xaalado gaar ah). Sidaa daraadeed, waqtiga cayaaraha xirfadlayaasha ah ee xirfadlaha ah ayaa lumiya daaweynta dhaawacyada (labadaba hawl-qabadka iyo muhimada) waa in la yareeyo.
Dhinaca kale, qaybta ugu liita ee nidaamka muruqyada waa kilyaha. Unugyada kareemka ah ee da'da 16 ayaa lumiya awoodda ay u leeyihiin inay kala qaybiyaan. Khariidadda iskudhafku marnaba si buuxda uma soo kabasho. Sidaa daraadeed, dhaawaca kasta ee maqaarka ku-meel-gaadhka ah, raajada, busteada dusha sare ee wadajirka ah waa dhaawac ah weligiis, si kasta ha ahaato sida murugadu u tahay in la aqbalo. Qayb ka mid ah unugyada kilyaha ayaa bilaabaya in ay ku dhuftaan jawaabta dhaawaca (dib u soo kabashada). Si kastaba ha ahaatee, tani ma saamaynayso qaab dhismeedka naqaska, taas oo ah 97% ay matalaan walxaha ka baxsan.
Dhinaca kale, waxaan ognahay in somatotropin kaliya ay awood u leedahay inay si weyn u saameyneyso unugyada cirridka (100 ka xoog badan yahay walxaha kale ee anabolic). Intaa waxaa dheer, HGH waxay saameyneysaa unugyada iyo walaxaha ka baxsan isku mar. Tani waxay ka dhigeysaa daaweyn aad u qiimo badan, ka ugu muhiimsan, ka hortagga dhaawacyada isboortiga. Da'da xirmooyinka kilyaha waa wax, nasiib daro, lama huraan. Xitaa haddii aysan jirin wax khasaare ah oo ka yimaada miisaaniyada, inta lagu guda jiro culeyska culus ee jir-dilka culus - horumarinta jibbaarada kilyaha bukaan-socodka ah.
Ka hortagga astaamaha meniscus waxay fududahay dhammaan dhaawacyada soo socda. Xitaa haddii aysan jirin wax dhaawac ah oo ka yimaada qalabka maqaarku, osteochondrosis waxay ku dhacdaa da 'da' - cillad ka mid ah maqaarka dhexdhexaad ah sababtoo ah culeyska caadiga ah ee culeyska. Inta badan cayaartoyda ayaa ka baxa isboortiga sababtoo ah dhaawacyo badan ka hor inta aysan suurtagal aheyn inay buuxaan. Si ay suurtogal u noqoto in dib loo dhigo waqtigan, iyo sidoo kale in laga hortago horumarinta habka loo yaqaan 'pathology-ka' -ka la xidhiidha da'da, willy-nilly, waa inaad daryeeshaa, gaar ahaan kilyaha.
Dhakhtar ahaan, waxaan rumaysanahay in somatotropin in loo isticmaalo sida ugu badan ee suurtogalka ah, sababtoo ah kaalmadu maaha inaad kaliya dhisato muruqa. Somatotropin waxay gacan ka geysataa horumarinta dulqaadka, waxay leedahay saamayn guud tamarta guud. Iyadoo daaweynta somatotropin, ka soo kabashada dhaqdhaqaaq jir ahaaneed oo aad u dhaqso badan ayaa ah.
Isticmaalka hore ee somatotropin ee dhaqdhaqaaqa isboortiga ayaa ka hortagi doona isku-imaatinka microtraumas, xirashada da'da ku xiran ee qalabka jilicsan iyo qalabka ugu dambeeya, ugu dambaynta, wuxuu ka hortagayaa dhaawacyada halista ah.
Labada daawo ee daaweynta iyo daawada, marka la daaweynayo dhaawaca jooniska, isku-darka somatotropin oo leh qiyaas yar oo insulin iyo thyrocalcitonin ayaa ah mid waxtar leh.
Marka la eego unugyada muruqyada, somatotropin ma muujiyaan saameyn xooggan sida insulin iyo stabdhab anabolic. Si kastaba ha ahaatee, somatotropin oo kaliya ayaa sababi karta kororka tirada faleebada muruqyada, halka dhammaan walxaha kale ee anabolic-ka ay sababaan fareemo jirka oo keliya, iyada oo aan saameyn ku laheyn lambarkooda.
Kordhinta murqaha jirka marka la yareeyo dufanka, HGH si wanaagsan ayey uga duwan tahay steroids iyo, sidoo kale, insulin, taas oo isla mar ahaantaana la kordhiyo tirada muruqyada ee lama huraan u ah kordhinta baruurta subcutanous. Koorasyada marxaladda ee daaweynta somatotropin ayaa sidoo kale lagama maarmaan u ah xoojinta qalabka wadajirka ah.
Isboortigaas oo u baahan istaraatiijiya sare, somatotropin ayaa sida badan loo isticmaalaa sida ciyaarahaas oo loo baahan yahay murqaha muruqyada. Haddii aan qaadanno, tusaale ahaan, ciyaaraha fudud ee ku jira sharaxaad aad u daran - marathon ordaya, ka dibna somatotropin waxaa loo isticmaalaa si aad u ballaaran.
Waxay ka qaybqaata murqaha muruqyada wadnaha, waxay ilaalisaa maqaarka ku-meel-gaadhka ah, menisci iyo jaallaha laga soo qaato microtrauma. Tirada mitokondria ee gudaha unugyada ayaa kor u kaca, sababtoo ah hoosta HGH, waxay awood u leeyihiin inay si madaxbannaan u kala qaybiyaan oo u noqdaan kuwo weyn. Abaabulka unugyada dufanka leh ee dufanka subcutaneous iyo isticmaalka baahida tamarta ayaa la xoojiyaa. Tamarta kordhay, ayaa iyaduna saameyn wanaagsan ku leh habka borotiinka-synthetic.
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in somatotropin iyo somatomedin C loo gudbiyo doping, waa suurtagal in la go'aamiyo waxyaabaha kor u kaca ee jirka. Nolosha nuska ah ee HGH, ayaa jidhka ka soo galay gudaha dibedda, qof caafimaad leh waa 20-30 keliya. Waxyaabaha kor u kaca ee somatomedin C waxaa loo go'aamiyaa wax ka badan hal maalin. Iyadoo la tixgelinayo in waxtarka HGH iyo somatomedin C ee jirka ku jiri karaa inta badan maalinta oo dhan taas oo ku xiran diiqada, jimicsiga jireed, iwm. Go'aaminta cayaaraha HGH iyo IGF-1 ee jirka ku yaala habka tartanka, iyo sidoo kale ka hor iyo ka dib tartanka, waa su'aal aad u sarreeya.
Hababka lagu ogaanayo heerarka dhiigga ee HGH iyo IGF-1 waa kuwo xiiso badan, maaha sida imtixaanka doping, laakiin qiimeynta xirfadaha asaasiga ah ee aasaasiga ah. Sidaa daraadeed, waxaa suurtagal ah in la go'aamiyo in cayaaraha loo baahan yahay in loo baahdo maamulka hirgelinta dheeraadka ah. Haddii qarsoodiga aasaasiga ah iyo qarsoodiga ah ee culeyska (qoraalada kacdooniga ah) ay yihiin kuwo aad u sarreeya, ka dibna waxa macno samaynaya
si aad u ogaatid feejignaanta maaha shaqada somatotropic ee qanjirka pituitary, laakiin qaybo kale oo ka mid ah sarrifka.
1. Hababka isdabajoogga ah ee go'aaminta HGH waxay ku saleysan tahay ogaanshaha habka difaaca jirka ee somatotropin ee dhiiga bini-aadamka. Tani waxaa la sameeyaa iyada oo la isticmaalayo:
fara-gelinta dareen-celinta xummad-joojinta;
isdhaafsashada jawaab celinta saxda ah;
Wadamo badan, xirmooyinka caadiga ah ee lagu ogaanayo hormoonnada (oo ay ku jiraan HGH) ee dareeraha noolaha ayaa la heli karaa.
Ficil ahaan, hababka difaaca ee go'aaminta HGH ma aysan caddayn rajada laga saaray iyaga. Oo waxaa jira sababo badan oo tan. Marka hore, ka hortagga daaweynta HGH, qadar yar oo ah unugyada difaaca ayaa la soo saaraa, kadib markii la joojiyo daaweynta si dhakhso ah ayay u baxdaa dhiigga. Marka labaad, qaybta hormoonka hormoonka ee ku xiran habka antibody iyo qaybta maaddooyinka hoormoonka ee soo bandhigay dhaqdhaqaaqa anabolic, ha ku dhajin meelaha ay ku jiraan molecule. Sababahan oo kale, qaababka difaaca ayaa go'aan ka gaari kara wax ka badan 10% HGH ee jirka ku jira.
2. Hababka bayoolojiga ee lagu ogaanayo HGH waxay ku saleysan tahay cabiridda saameynta bayoolojiga ee ay sababtay HGH. Kuwa ugu muhiimsan waa:
Baaritaanka miisaanka koritaanka jiirka caadiga ah.
Imtixaanka miisaanka koritaanka ee jiirka.
Tijaabi kordhinta dhererka dabada ee jiirka hypofizectomized.
Baaritaanka Tibia (saameynta HGH ee kor u qaadista dhererka laf-dhabarka).
Habka dhiirigelinta waxqabadka ee enzyme ornithine decarboxylase ee beerka.
Hababka loo kicinayo gaadiidka sonkorta ee lakab saaran oo ku yaal jiirka hypofizectomized.
Tijaabi waxyeellada HGH ee ku jirta dhiiggaaga.
Tijaabi saameynta HGH ee unugyada baruurta.
Tijaabinta kicinta kuleylka shucaaca leh ee nukliyeerka kuuskuuban.
Baadhitaanku wuxuu kicinayaa isku-xidhka uridiinta ee thymocyte RNA.
Baadhitaanku wuxuu kobciyaa isku-darka shucaaca ee ku jira maqaarka.
Hababka bayoolojiga ah ayaa si fiican u cadeeyay daraasaadka sayniska, laakiin dhammaantood saxnimadoodu maaha kuwo aan la aqbali karin oo lagu ogaanayo qiyaasta HGH ee dhiigga sida baaritaanka doping.
Mar labaad waxaan si gaaban u qori doonaa kooxda baaritaannada kicinta ee loogu talagalay kicinta hindhisada HGH, oo loo isticmaalo in lagu qiimeeyo awoodda qarsoodiga ah ee qanjirka pituitary:
Tijaabi insulin. Xajinta hormoonka HGH ee jawaabta insulin hypoglycemia ayaa lagu go'aamiyaa. Iyada oo la hirgelinayo insulin / qiyaasta 0.1 u / kg. Iyada oo hoos u dhiga heerka glucose by 50%, xaddiga HGH ee dhiigga ayaa kordhiya waqtiyada 2-3.
La tijaabi arginine. Arginine waxaa lagu maamulaa qiyaasta xNUMX g / kg for daqiiqo 0.5. Caadi ahaan, qiyaasta HGH waxay kordhisaa waqtiyada 30.
Tusaale ahaan L-DOPA (horaantii dopamine). Waxaa lagu geliyey gudaha qiyaasta mgmaanka 500. Xaddiga HGH caadi ahaan wuxuu kordhiyaa wakhtiyada 3-4.
La tijaabi glucagon. Gogol-xaddiga glucagon-ka ee qiyaasta mg ee 1 waxay kordhisaa dheecaanka HGH 1.5. Jawaabta glucagon waxaa lagu kordhin karaa maamulka propranolol (anaprilina).
Shaybaarada xakamaynta ee HGH ayaa sidoo kale loo isticmaalaa:
Iskuday gulukoos. Ka dib marka la qaato 100 g glucose, xaddiga HGH waxaa hoos udhaca wakhtiyada 2-2.5 marka loo eego caadada.
La tijaabi somatostatin. Iyada oo ku saleysan suurtogalnimada hindhisada HGH by somatostatin synthetic.
Waxaa sidoo kale jira kooxo baaritaano ku salaysan somatominn.
Hormoonka koritaanka iyo kansarka
Waxaa jira waxyaabo ay ka mid yihiin "dastuur kansar ah" ama soogalootiga nein-xannuunka malawadka ah. Saadaalintan waxaa la dhaxliyay marka laga reebo xaalado aad dhif u ah. Dadka qaba saameeyn ku yimaada neeflaytada malignantiga ah inta badan kuwa kale waxay ku guuleystaan ​​natiijooyin waaweyn oo isboorti, iyo sabab wanaagsan.
Ugu horreyn, kiniinada borotiinka ee jirka ee dadka sidaasi waa ka firfircoon marka loo eego jirka qofka caadiga ah. Dhinaca kale, tani waa mid aad u fiican waxayna u sahlaysaa in la dhiso qulqulka murqaha, iyo dhinaca kale, burooyinka ayaa sidoo kale si dhaqso badan u kora dadka caadiga ah. Marka labaad, awooddooda tamarta waxay ka badan tahay awoodda tamarta ee qof caadi ah. Dufanka astaamaha ah ayaa si sahal ah u kori kara oo ka fiican dadka kale. Laakiin biladan ayaa leh laba dhinac. Qaar ka mid ah unugyada difaaca jirka si wadajir ah loo cuno unugyada kansarka waxay bilaabaan inay quudiyaan dhibco yaryar oo baruur ah, marwalbo ku jirta dhiigga, ama asiidh dufan.
Si kastaba ha noqotee, waxay joojiyaan inay gutaan waajibaadkooda tooska ah - helitaanka iyo burburinta unugyada halista ah.
Farmashiyada isboortiga waxaa isticmaala dhammaan. Kuwa haysta dastuur kansar iyo kuwa aan haysan mid. Si kastaba ha noqotee, kuwa leh dastuur kansar waxay gaari doonaan natiijooyinka ugu badan ee isboortiga, gaar ahaan haddii ay ku lug leeyihiin dhisidda murqaha.
Tymus ee qanjirka thymus wuxuu mas'uul ka yahay difaaca jirka (anticancer). Tirada ugu badan ee thymus waxay leedahay waqtiga dhalashada ilmaha. Kadibna wuxuu bilaabmaa inuu hoos u dhaco si tartiib tartiib ah oo da ' Waa waqtigan in dadka intooda badan ay bilaabaan inay ku koraan burooyinka malignantiga ah, kuwaas oo ka dib tobanaan sano ka dib ay u koraan qiyaasta dhimashada.
Dhallinyaro badan oo xirfad leh ayaa inta badan iigu yimaada talo ahaan su'aasha ah: "Miyaanan waxyeeleynin somatotropin, maxaa yeelay waxaan lahaa burooyin malig ah oo qoyskayga ah?" Cabsidooda waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in dhammaan tilmaamaha isticmaalka somatotropin ay muujinayaan in waa ka hortaga burooyinka malignantiga ah. Qofna ma samaynin tijaabooyin, mana jirin somatotropin lagula tacaalayo bukaanada kansarka. Waa hormar hor leh oo hormoonada hormoonku ay tahay in la kordhiyo dhammaan neoplasms-ka jirka, sababtoo ah waxay leedahay saameyn kobac ah. Sababta qaar, qofna wax kama qoro statorids iyo xajmiyada anabolic, inkastoo saameyntooda anabolic ee qiyaasta ku habboon ay ka badnaan karto saameynta anabolic ee somatotropin.
Waa maxay jawaabtu? Somatotropin ma isticmaali karaan cayaartoyda dastuurka kansarka ama maahan? Jawaabtu waxay noqon doontaa mid qarsoodi ah.
Marka da'da yar (gaar ahaan ilaa sanadka 30), isticmaalka hoormoonka korriinka ma aha oo keliya halis, laakiin xitaa waa suurad wacan. HGH waa midka kaliya ee
waxay sababtaa hyperplasia (koritaan iyo dhalmo) ee unugyada xubnaha taranka. Marka hore waa unugyada qanjidhada thymus, oo mas'uul ka ah difaaca jirka ee antitumor. HGH badan ayaa loo isticmaalaa da'da yar, kan ugu weyn ee maskaxda dadka iyo wakhtiga dambe ayaa imanaya marka unugyada kansarka leh ay bilaabaan inay ku horumaraan jirka.
Ma jiro qalab kale oo si weyn u kordhiya xajmiga qanjidhada thymus hadda lama garanayo sayniska.
Haddii qofku horey u soo maro 40, waxaa suurtogal ah inuu abuuro buro qalooc leh oo hore u bilowday meel jidhka ka mid ah, maxaa yeelay qanjidhada thymus waxay gebi ahaanba burbureysaa, waxaana jirkoodu hoos udhaca unugyada (antitumor). Si dhakhso ah uma muujiso. Celceliska kansarku wuxuu ku koraa qof ka timi 20 ilaa 40 sano jir waxaana la ogaanayaa, isagoo marxaladihii hore ee horumarkiisa noqday. Da'da this, isticmaalka somatotropin horey u noqon kartaa khatar. Waxay gacan ka geysan doontaa horumarinta buro, haddii ay hore u jirtey.
Dadka aan haysan dastuur kansar ah, kuwa aan u dhiman kansarka qoyska, waxay isticmaali karaan somatotropin sida ugu badan ee ay jecel yihiin da 'kasta: labadaba iyo da'da.
Dadka qaba daan daansiga, waxaa jira khatar ka badan somatotropin. Kuwani waa asrogiin iyo steroids anabolic. Xaqiiqdu waxay tahay in wejiyada, marka la soo bandhigo, waxay keenaan si deg deg ah (mararka qaarkood xitaa toddobaadyo gudahood) iskudhafka qanjirada. Isticmaalidda stabdhabyada anabolic, inkastoo ay ka yartahay, waxay sidoo kale leeyihiin saameyn isku mid ah.
Xitaa dadka aan haysan dastuur kaansar ah waxay qaadi karaan kansar ka dib marka loo isticmaalo androgens si ay u dhisaan murqo. Dadka haysta dastuur kansar ah oo ay "fadhiyaan" on androgens ayaa ah kaliya ismiidaamiyeyaasha ismiidaamiya oo kaliya dardar-geliya dhamaadkooda. Dhibcahan halkan ma ahan mid kor u qaadaya dheellitirka borotiinka, laakiin burburinta xubinta taranka jirka ee difaaca jirka - qanjirka thymus. Sababahan oo kale, sida dhakhtarka caafimaadka, waxaan ahay mabaadi'da mabda'a ah ee isticmaalka of androgens si loo dhiso murqo.
Isticmaalka steroids anabolic waa in la beddelo iyada oo la isticmaalayo hormoonka koritaanka. Isticmaalka hormoonka koritaanka iyo steroids anabolic ayaa sidoo kale suurtagal ah.
Dhamaan ciyaartoyda ayaa ka jawaab celinaya asrogens aad uga xoog badan steroids iyo qiyaasta murqaha ee onrogens ayaa si dhakhso ah u kora. Si kastaba ha noqotee, qiimaha lagaa rabo inaad bixiso kororka degdegga ee koritaanka muruqa waa mid aad u sareysa.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay doorasho aad u ballaaran oo ah wakiilo kala duwan, kuwaas oo labaduba ka xoog badan yihiin orrogens. Mid ka mid ah macnaheedu waa hormoonka somatotropic oo lagu daro wakiilada kala duwan ee farmaajo.
Saadaasha horumarinta HGH
Wax walba waa la hagaajiyaa. Suuqa suuqa daawada, noocyo badan oo cusub oo hormoonnada hormoonada koritaanka ayaa u muuqda. Marka lagu daro aadanaha, injineernimada hidaha iyo synthetic, hormoon korriin dhaqameed ayaa u muuqday, kaas oo laga helo warbaahinta asluubta gaar ahaaneed.
Nasiib darro, qiimaha hormoonnada hormoonada korriinsho ayaa si joogto ah u koraya, tani maaha mid ka mid ah dhibaatooyinka farsamooyinka ama anshaxa. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in dalabka daroogada uu sii korayo. Qofkasta oo fahamsan dhaqaalaha wax yar ayaa kuu sheegi doona in qiimaha iibku ku xiran yahay kaliya heerka baahida loo qabo sheyga iyo wax kale oo badan.
In kasta oo qiimaha jaban ee wax soo saarka, diyaarinta HGH waxay si joogta ah u kordhin doontaa sicirka sababtoo ah koritaanka heerka baahida loo qabo.
Xaaladdan, ma dhibayso in la fiiriyo siyaabaha loo kordhinayo macaanka somatotropin ee jirka, oo aan la xiriirin daawooyinka daroogada dibadda.
Cudurka somatotropin, oo sidoo kale insulin-ta la isku duro, waxaa laga helaa Escherichia coli caadiga ah, ee genome-ka kaas oo hiddaha somatotropin synthesis loo yaqaan "wired". Cudurka Escherichia coli wuxuu sameysmaa waxyaabaha ku jira mindhicirkaaga waana sida ugu macquulsan jirka.
Waxay muddo dheer ahayd hababka loo maro hababka gumeysiga ee mindhicirka bini'aadamka oo leh ul oo soo saaro insulin. Waxaa jira dad badan oo adduunka ah oo aan ku dhejin insulin, laakiin waxay ka qaadaan mindhiciradooda. Isla sidaas oo kale ayaa la sameeyey somatotropin. Xiidmaha mindhicirka, oo laga helo somatotropin hiddo-wade ah, waxaa laga yaabaa in lagu riixo mindhicirka bini-aadamka muddada loo baahan yahay iyo ka dibna, haddii loo baahdana, si fudud loo tirtiro. Kaliya wax qofna ma jiro si dhakhso ah u kobciya oo kor loogu qaado farsamada. Waa la fahmi karo.
Dadku waxay si fudud u bilaabi doonaan inay wadaagaan HGH-soo-saarka E. coli, kadibna dhammaan daawooyinka daawooyinka ayaa noqon doona kuwo aan loo baahnayn. Shirkadaha dawooyinka ee giant uma baahna inay waxyeello u geystaan, oo waxay samayn doonaan wax kasta oo awoodooda ah si ay u aasaan farsamadaan weligiis. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale nasiib lahayn. Qofka si tartiib tartiib ah ugala baxo suuqyada qiimaha jaban ee bakteeriya oo soo saara HGH.
Goob kale oo xiiso leh waa gooyo (ku-tallaalid) oo ah burooyinka embriyaha kore ee pituitary anterior oo leh unugyada eosinophilic.
Haddii unugyada caadiga ah ka dib marka la isu tallaalay ay diidaan difaaca jirka ee qofka unugyada kuwaasi oo la beddelay, lakabyada jeermiska ah maaha. Waxay xidid ku yeeshaan jidhka qofka qofka loo beddelay. Qalabaynta casriga ahi waxay kuu oggolaaneysaa inaad dib u soo celiso qof haddii uusan ahayn dhammaan, ka dibna wax walba oo dhan. Xitaa jeermisyada ilkaha ee caanaha ayaa la googooyaa, ilkaha caanuhu waxay ku koraan goobta boogtada.
Waxaa la sameeyey, iyo ilaa maanta, waxaa lagu sameeyaa unugyada qanjidhada ee qanjirada hore ee qanjirka, kaas oo qaadanaya xidid, korriistaa qiyaasta caadiga ah, iyo bilaabaan inay qarsoodaan HGH. Waa suurtagal, in feker ahaan, in la sameeyo xubin ka mid ah maqaarka hoostiisa hoostiisa, maadama unugyada implanted laga saari karo si fudud si ka hoos mareen maqaarka markii aan loo baahnayn, ama hiddo-wadaha HGH-ka oo qarsoodi ah ayaa billaabaya soo saaridda waxyeellooyin dhinaca .
In tijaabooyinka xayawaanka, ku-beddelashada jeermiska jeermiska ee laf-dhabarka tooska ah ee pituitary ee si toos ah hypothalamus ayaa la sameeyey. Qalitaanada sida ka dib, dheecaanka dheeraadka ah ee "somatotropin" wuxuu ahaa ugu badnaan marka la barbar dhigo xubno kale oo jirka ah iyo qaybo jirka ah. Faa'iido la'aanta hawlgalka noocan oo kale ah waa markaa waxay noqoneysaa mid aan macquul ahayn in laga saaro unugyada unugyada eosinophilic-ka ee ka baxa hypothalamus.
Qalliinka curry ee xubno kala duwan ayaa laga soo qaatay alaabta caadiga ah ee ilmo soo rididda. Sidaa daraadeed, nasiib daro, marnaba waxbadan kuma dhicin. Dhamaan calaamadaha maskaxdu ma aha mid xidid, badankoodna waa la nuugaa ka dib marka la isu tallaalayo. Si loo sii hagaajiyo isdhexgalka unugyada, waxay bilawday in ay ku beddesho caadada qallalan ee koritaanka tuunbada imtixaanka. Aabaha ama hooyada embriyaha waa qof u baahan uurqaadis. Inta badan embriyaha waxay u dhintaan fitamiin, laakiin qaar ka mid ah ayaa weli ku noolaanaya isla markaana xubnahooda embriyoonkoodu ka yaryahay xubnahooda ayaa yareynaya inta badan ka dib marka la isu tallaalo.
Sida biyotechnology sida sayniska ayaa hagaajineysa, warshadeeda oo ka walwalsan yahiin transplanting burooyinkeeda embriloon ayaa horumaraya, waxaan rajeynayaa sidaas. Tani waxay u muuqataa in aan aad u rajeynayo.
Qaar badan oo mahadnaq u soo qora maqaalkan, qalabka buugga Y. Bulanov